3403s 3/25/2020 နယူးယောက်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Cuomo သည် coronavirus ကပ်ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားသည် images and subtitles
ဒီမှာဒီမှာရှိနေခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဘယ်သူလဲသိဘူးထင်တယ် ဒီမှာ။ ငါ့ဝေးညာ, ON လက်ထောက် ၏ဌာနကြီးကြပ်ရေးမှူး ဘဏ္SERVာရေးဝန်ဆောင်မှု။ ငါနှင့်အတူကြာမြင့်စွာနေခဲ့။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ SWAT အဖွဲ့၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ငါတို့အင်ပါယာ၏ဥက္ကID္ဌရှိသည် ကောလိပ်, DR ။ ZUCKER, လုပ် Lisa DeROSA နှင့်ဘတ်ဂျက်ညွှန်ကြားရေးမှူး။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်စိတ်ဝင်စားစရာများစွာရှိသည် TODAYLISA သတင်းများ DeROSA နှင့်ဘတ်ဂျက်ညွှန်ကြားရေးမှူး။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်စိတ်ဝင်စားစရာများစွာရှိသည် ဒီနေ့အသစ်များ၊ အရာများရွေ့လျားနေကြသည်။ လက်ရှိအခြေအနေ, ကျနော်တို့နေဆဲ သွားနေသည့်လမ်းကြောင်း။ WE လှည့်မကြည့်ကြပြီမဟုတ် WE ရှိသည် APEX ကိုနှိပ်ပါ။ ထိုလိုင်းပေါ်တက်လိမ့်မည်ကိုသတိရပါ, အိုင်တီအိုင်တီမြင့်မားသော POINT ရောက်ရှိပါလိမ့်မယ် ထိပ်ဖျားလိမ့်မည်, အိုင်တီပြန်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့လမ်းအပေါ် UP နေဆဲ တောင်တန်း။ ရှိသောရောဂါပိုးအရေအတွက် လာ 80% နေဆဲ ဖြေရှင်းခဲ့သည် စမ်းသပ်သူတွေကို၏ 15% ခန့် အပြုသဘောဆောင်တဲ့လိုအပ်ချက် ဆေးရုံ။ ပြီးတော့ဒီဂရီရှိပါတယ် ဆေးရုံ။ ဒါပေမဲ့စုစုပေါင်းစကြဝIVာ ဆေးရုံ ၀ င်ရန်လိုအပ်သည်မှာ ၁၅% ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စီမံကိန်းပုံစံများကိုအသုံးပြုသည်။ ကြှနျုပျတို့သညျ Cornell WIL ရှိသည် စီမံကိန်းပုံစံများ၊ McKENZIE, ဌာန ကျန်းမာရေးစီမံကိန်းစီမံကိန်း။ သူတို့သည်အရေးကြီးသောကြောင့် သင်သူတို့စီမံကိန်းနေကြသည် ဖြစ်နိုင်ခြေကောင်းသော JEKER AND လိုအပ်ချက်အတွက်စီစဉ်။ စီမံကိန်းမော်ဒယ်များ့ သောသူတို့မော်ဒယ်များ စီမံကိန်းများ, သူတို့မဟုတ်ပါဘူး လိုအပ်သောအဓိပ္ပာယ်, ဒါပေမယ့်အိုင်တီ ငါတို့တစ်ခုတည်းသောကိရိယာဖြစ်သည် စီစဉ်, ညာ? အချက်အလက်များကိုလိုက်နာပါ ဒေတာ, ဒေတာကိုလိုက်နာပါ။ အမှန်တကယ်ဆေးရုံတွင်ရှိသည် ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောနှုန်းထားတွင်ရွှေ့ အားလုံးထက်စီမံကိန်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းပုံစံများ။ သိသာထင်ရှားခဲ့ဒီတော့ စိုးရိမ်။ သောပိုမိုမြင့်မားသောရောဂါကူးစက်မှုကြောင့် နှုန်းမြန်မြန်ဆိုလိုသည် ဆေးရုံ၌စွမ်းရည်များနှင့် သောအရေးပါသောအချက် အမေရိကန်လူ ဦး ရေ၏နံပါတ် ဆေးရုံသို့။ အခုအချိန်မှာငါတို့ကြည့်နေသောအရာကို ကိစ္စပေါင်း 140,000 အကြောင်းကိုလာပြီ ဆေးရုံသို့, ဆေးရုံသို့ စွမ်းရည်ကုတင် ၅၃၀၀၀ ရှိသည်။ ပြAနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ 40,000 အကြောင်းကြည့်ရှုပါ ထဲသို့ ICU ပြCASနာများ ဆေးရုံ။ ICU ခုတင် ၃၀၀၀ လောက်ရှိပြီ။ သောအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီအတွက် ICU BED ဆိုတာဘာလဲ ရည်ရွယ်ချက်? အခြေခံအားဖြင့်တစ် ဦး က BED ပိုးသတ်ဆေး။ VENTILATOR ကအများဆုံးပါ FOR ကိရိယာတန်ဆာပလာ၏ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် အထူးအာရုံစိုက်စောင့်ရှောက်မှုယူနစ် ဤသည်တစ် ဦး သည် Respiratory တစ်ခုဖြစ်သည် လူနာတွေနဲ့လူတွေနောက်ထပ်လိုအပ်တယ် ပုံမှန်ထက် VENTILATION ။ ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ချင်ပါသလဲ။ ကိစ္စရပ်များ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချပါ ဆေးရုံသို့လာ, နှေးကွေး ထဲသို့ဝင်ကိစ္စရပ်များ၏အရေအတွက် ဆေးရုံ။ DR ဆိုတာဘာလဲ။ FAUCI IS နေ့တိုင်းတီဗီအကြောင်းပြောနေတာ။ THE ပြား, ပြား။ ပြား CURVE, ပြား။ လူများ၏နံပါတ်နှေးကွေး ဆေးရုံထဲကိုဝင်နိုင်ပါပြီ သူတို့နှင့်အတူဆေးရုံ။ ငါတို့သည်ဤအလုပ်လုပ်ကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာတိုးပွားပါ ဆေးရုံ၊ ၏နံပါတ်နှေးကွေးနိုင်အောင်ကြော် ဆေးရုံသို့ပြနာများ၊ တစ်ချိန်တည်းမှာသင်၏ဆေးခန်းကိုမြှင့်တင်ပါ စွမ်းရည်။ ကျနော်တို့နှစ် ဦး စလုံးအလုပ်လုပ်နေကြသည် တစ်ပြိုင်နက်တည်း။ ကျနော်တို့တစ်နေ့ကနေခဲ့ကြပြီ။ ကိစ္စရပ်များ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချပါ လာ, CURVE ပြား။ ဖြန့်ဖြူး FLTS ရောဂါပိုးနှေး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်နိုင်သမျှလုပ်နေကြသည်။ သောမလိုအပ်သောတားမြစ်သည် အလုပ်သမားများ၊ လူမှုရေးအကွာအဝေး အားကစားရုံပိတ်ပါ စားသောက်ဆိုင်။ နယူးယောက်မြို့ရှိကိစ္စတစ်ခုခု WE သိပ်သည်းမှုအဆင့်မြင့်ခဲ့သည် အထူးသဖြင့်ကျနော်တို့ချင်တယ် အထူးသဖြင့် New York City ပန်းခြံများ လူငယ်များနှင့်အတူငါအဖြစ်ငါဖြစ်ခဲ့သည် ငါတတ်နိုင်သမျှ AS တိုက်ရိုက်နှင့်အဖြစ် ငါလူငယ်များနှင့် THE နိုင်သလား သူတို့ရှိသည်သောသတင်းအချက်အလက်။ သင် Coronavirus ကိုဖမ်းနိုင်။ သင်စူပါစတားတစ်ယောက်လို့မင်းထင်လိမ့်မယ် ဒီမှာ, သင်အမှန်တကယ်မဟုတ်ပါဘူး။ သင်အိုင်တီဖမ်းနိုင်သလား။ တဖန်သင်တို့အိုင်တီလွှဲပြောင်းနိုင်သလား သင်သည်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည် သင်ချစ်သောသူ။ ဒါပေမဲ့ New York City ပန်းခြံများရှိသည် ပြAနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြPROနာကိုတွေ့ခဲ့တယ် ပထမ။ ငါမြို့တော်ဝန် De Blasio သို့ပြောဆိုသည် စပီကာဂျွန်ဆင်, ငါတို့လာကြဟုဆိုသည် 24 နာရီအတွင်းအစီအစဉ်နှင့်အတူ လူတိုင်းသဘောတူသည်။ သူတို့ကတစ် ဦး အစီအစဉ်နှင့်အတူလာကြ၏။ ကျနော်တို့အခုအကောင်အထည်ဖော်နေကြသည် စီစဉ်ပါ။ ငါအစီအစဉ်အပေါ် OFF လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။ အစီအစဉ်ပိတ်ပစ်မည် နယူးယောက်မြို့ရှိလမ်းများကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပါးသောနည်းစနစ်အသစ်ရှိသည် York City, ကျနော်တို့နည်းပါးလာရှိသည် New York City ရှိကားများ။ လမ်းတွေဖွင့်။ လူတွေလမ်းလျှောက်ချင်တယ်၊ ထွက်သွားနှင့်အချို့သောလေထုရရန်။ သင်အနည်းငယ်သောENရိယာလို။ SO PILOT ပိတ်လမ်းများ ကားများ, လမ်းများဖွင့်လှစ် လူနာ။ ငါတို့သည်လည်း Mandat ကျင့်သုံးပါလိမ့်မယ် လူမှုရေး DENSITY PLAYGROUND ။ ဖြစ်နိုင်သည်အသစ်သောအယူအဆ။ တစ် ဦး ၌နီးကပ်သောဆက်သွယ်ရန်အားကစား မြေပြင်တွင်ကစား။ ဥပမာအဘို့အဘတ်စကက်ဘော။ မင်းဒါကိုမလုပ်နိုင်ဘူး။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့လူတွေကိုတောင်းဆိုနေတာပါ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခြေခံပေါ်မှာ။ ကိုက်ညီမှုမရှိပါက သော, ငါတို့ထို့နောက်လုပ်ပါလိမ့်မယ် အတိအလင်းနှင့်ငါတို့တကယ်တော့ပါလိမ့်မယ် PLAYGROUNDS ပိတ်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့လုပ်ပေးချင်ကြဘူး PLAY မြေပြင် GO တစ်နေရာဖြစ်ပါတယ် အပြင်မှာဖွင့်လှစ်လေ, သင်တို့မူကား လူမှုရေးသိပ်သည်းဆလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်ရှိသည် ပင်ကစားကွင်း၌။ ထပ်, အိုင်တီစေတနာ့ဝန်ထမ်း IS ။ မြို့တော်ဝန်အိုင်တီလုပ်မယ့် ဤအချက်သည်အရေးကြီးကြောင်းရှင်းလင်းပါ မြို့တော်။ ဒီအဖြစ်အပျက်မဖြစ်ခဲ့ရင်၊ အမှန်တကယ် PLAY ချအနီးကပ် မြေပြင်။ ငါလုပ်ပေးချင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ငါတို့လိုအပ်ပါတယ် ကူးစက်ဖြန့်ဖြူးနှင့်သော အရေးအကြီးဆုံးကဘာလဲ ဒီဟာအရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ အထောက်အထားအထောက်အထားကြောင့် သော DENSITY ထိန်းချုပ်မှု တိုင်းတာအလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ထပ်, ငါတို့သည်ဤလုပ်နေတာ စီမံကိန်းများမှ။ ဒါပေမဲ့ဒီနည်းကိုကြည့်ရှုပါ IS စိတ်ဝင်စားစရာ။ ဒီနည်းကိုအတိတ်တနင်္ဂနွေ, စီမံကိန်း သောဆေးရုံဖွင့်ခဲ့သည် နှစ်ရက်တိုင်းနှစ်ဆ။ အိုကေလား? တနင်္လာနေ့တွင်, နံပါတ်အကြံပြုသည် သောဆေးရုံ နှစ်ဆတိုးတိုင်း ၃.၄ ရက်။ တနင်္လာနေ့တွင်, စီမံကိန်း သောအကြံပြုသည် ဆေးရုံမှာနှစ်ဆရှိခဲ့သည် ၄.၇ ရက်တိုင်း။ အခုဆိုရင်, ဖို့နီးပါးနီးပါး အစစ်အမှန်ဖြစ်ပါစေ။ ဒါပေမဲ့သီအိုရီကိုပေးတော်မူ၏ ကျွန်ုပ်တို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသောသိပ်သည်းမှု၊ အိုင်တီလျင်မြန်စွာဖြန့်, သို့သော် IF သငျသညျ, နိုင် DENSITY လျှော့ချ လျင်မြန်စွာဖြန့်ဖြူးလျှော့ချ။ SO ဤစီမံကိန်းများ, ငါပါပဲ သူတို့ကိုကျော် BUNCHED ကြည့်ရှုကြ၏ PLACE ငါကြီးစွာသောမထားဘူး တယောက်ကိုတယောက် STOCK ၏သဘောတူညီချက် အားလုံး DUE လေးစားမှုနှင့်အတူစီမံကိန်း အားလုံးပြည်နယ် TO SHANS ဆက်လက် လုပ်နေတာ။ သို့သော်ထပ်မံ, ဒီအပြုသဘော IS နိမိတ်လက္ခဏာ။ ငါ 100% သေချာတယ်အိုင်တီကိုင်ထားသည် OR တိကျသည်။ ဒါပေမဲ့မြား၏ ဦး ခေါင်း၌ ညာဘက်ညွှန်ကြားချက်။ ပြီးတော့ဒီအရာထက်သာ။ ကောင်း၏ မြား၏ ဦး ခေါင်းမြားမြှား လမ်းညွှန်။ ဒီနေ့ခေတ်လူတွေပြောပါ ဤလိုအပ်ချက်များ, လူမှုရေး အကွာအဝေးမရှိစားသောက်ဆိုင်များမရှိပါ ဟုတ်တယ်, သူတို့ကလိုအပ်သောအလုပ်လုပ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်ကြသည်။ နည်းလမ်း, သူတို့ထိရောက်သောဖြစ်ကြသည် သူတို့သည်လိုအပ်ပါသည် သူဒီနည်းကို POINT မှာအကြံပြုသည် သောသူတို့နှေးကွေးသော ဆေးရုံ။ AND ဤအရာခပ်သိမ်းသည်။ ဆေးရုံနှေးခြင်း ဆေးရုံသို့လာ။ နှုန်းထားများ အရာအားလုံး SO ဆေးရုံ လူတွေရဲ့နှုန်းနဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်တယ် လာ။ တိုးချဲ့သောထိုအချိန်က ဆေးရုံစွမ်းရည် မြင့်မားသောအချက် သင်ဒီမှာလိုင်းကိုကြည့်ပါ စတင်။ ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာနေတာဘာလဲဘာလဲ သောလိမ်၏အမြင့်ဆုံးအချက် သောလ၏ APEX ။ သော၏အချက် IS လာလာသောလူများ၏အကြီးမြတ်ဆုံးနံပါတ် ဆေးရုံစနစ်ထဲသို့ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမားဆုံးသော IS IS APEX ။ အဘယ်မှာသွားမယ့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ထပ်, တစ် ဦး စီမံကိန်း IS ။ ထပ်, လှည့်ပတ်လှည့်ပတ်။ သို့သော်လက်ရှိစီမံကိန်း IS သော 21 ရက်အတွင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ SO ဆေးရုံစွမ်းရည်မြှင့် လုပ်နိုင် - ကိုင်တွယ်နိုင်ဖြစ် သော APEX အသံ။ ဆေးရုံကိုသင်မည်ကဲ့သို့တိုးမြှင့်ပေးသနည်း စွမ်းရည်လား။ သငျသညျကုတင် UP တိုး ဝန်ထမ်းများနှင့်သင်ပစ္စည်းကိရိယာကိုတိုးမြှင့် AND VENTILATORS ဖြစ်ကြ၏ ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ကိရိယာတွင်ပြWEနာရှိသည် အချိန်ကာလများစွာကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ငါတို့ဘယ်မှာလဲ ကုတင်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ၁၄၀,၀၀၀ လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၅၃,၀၀၀ ရှိသည်။ ၏လက်ရှိစွမ်းရည်သည် ဆေးရုံ။ ငါတို့ဆေးရုံတွေအားလုံးကိုသူတို့ပြောပြတယ် သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ရှိခဲ့ပါတယ် 50% BY ။ သူတို့ကိုငါတစ် ဦး အပေါ်သူတို့ကိုပြောပြတယ် YESTERDAY ကွန်ဖရင့်ခေါ်။ ဒီနည်းကိုအတွက်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး IS ယခုသင့်အားပြောရန်ဆေးရုံများ စွမ်းရည် 50% တိုးမြှင့်။ သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့ကိုပြောပြရန်ရှိသည် အိုင်တီနှင့်ပတ်သက်။ အလွန်အထွေထွေရှိ ငါတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုသူတို့သဘောပေါက်လာတယ် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။ သူတို့သည်တက်ရန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ကြသည် ပန်းကန်သို့။ သင်ဆေးရုံတိုးမြှင့်လျှင် သင့်ကိုရရှိသောစွမ်းရည် ၅၀% ၏ထိပ်ပေါ်မှာအိပ် 27,000 တည်ရှိ, သင်မှ 80 ကြာကြာ။ ငါရည်မှန်းချက်အဖြစ်ငါ ASP ဆေးရုံတချို့ သင့်အား ၁၀၀% တိုးရန်ကြိုးစားပါ စွမ်းရည်။ 50% နိမ့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ရည်မှန်းချက် 100 ဖွစျသညျ။ ငါအချို့ဆေးရုံများယုံကြည်ကြလိမ့်မည် တကယ်တော့လုပ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ငါသူတို့ကိုကြိုးစားအားပေးခဲ့တယ် မဖြစ်နိုင်တာကိုလုပ်ပါ အသံ။ ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ဖြစ်မည့်အချိန် သင် Agressive လုပ်နေတာတွေကိုလုပ်ပါ ဘယ်တော့မှမပြီးဆုံးပါ။ သူတို့ထဲကတချို့လုပ်ပေး, ငါ သူတို့ထဲကတချို့ယုံကြည်ကြလိမ့်မည် အပိုဆောင်း 5000 ဖြစ်လိမ့်မည် ကုတင်၊ ၈၅၀၀၀ ခုခုကိုကျွန်မတို့ရပြီ။ FEMA, အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့များ၊ JAVITS တွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသောအရာ စင်တာ, စည်းဝေးကြီး ဗဟို, အနောက် Berry CAMPUS, ကျောက် ကျွန်တော်တို့ကိုယူသော Brook Brook ၈၉,၀၀၀ ။ အမေရိကန်ရေတပ်သင်္ဘော "နှစ်သိမ့်" သမ္မတစေလွှတ်ခဲ့သည် နောက်ပြန်ဖြည့်ရန် ၁၀၀၀ ဖိုးဖြစ်လိမ့်မည် သင့်အားခေါ်ဆောင်သွားသောဟိုတယ်များမှ 90,000 ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြည်နယ်ကိုယူလျှင် ချပြည်နယ်ကအသစ်အဆောင် အမေရိကန်ရနိုင် York က အပိုဆောင်း ၂၉၀၀၀ ခုတင်။ ကုတင် ၁၁၉,၀၀၀ ကိုပေါ့။ သင် 140 ကို AT နေဆဲမဟုတ်ပါဘူးသော 140 သင်လိုအပ်ပေမယ့်ကျနော်တို့မျှော်ကြည့် ဟိုတယ်များမှာငါတို့ကြည့်ပါတယ် ယခင်သူနာပြုများအိမ်ပြောင်းခြင်း လုပ်ဖို့ OWE စက်ရုံများ ကွဲပြားခြားနားမှု။ အများကြီးတီထွင်ဖန်တီးမှု, Agressive ဒါပေမဲ့ဘဝမှာသင်လုပ်သမျှကိုလုပ်ပါ လုပ်ရန်။ AND ကျနော်တို့လုပ်နေတာဘာလဲ ကုတင်စွမ်းရည်။ အကာအကွယ်ပစ္စည်း, ငါတို့ရှိသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစျေးဝယ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးရှိသည် လုပ်နေတာ။ အခုငါတို့လုံလောက်ပြီ အကာအကွယ်ပေးသည့်ပစ္စည်း၊ လက်အိတ်၊ လူအပေါင်းတို့သည်မျက်နှာဖုံးများ, GOWNS နေသောဆေးရုံတင် IT နှင့်ဆက်ဆံခြင်း။ ဒီနေ့ဆေးရုံ, သူနာပြု, မ ဆရာဝန်ကတရား ၀ င်ပြောနိုင်ပါတယ် အကာအကွယ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူး။ အခုအချိန်မှာ FOR FOR ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆနိုင်သောအနာဂတ် ထောက်ပံ့ရေး။ ကျနော်တို့တစ် ဦး ကလုံခြုံကြပြီမဟုတ် ယခု မှစ၍ သုံးပတ်အတွင်းထောက်ပံ့မှု။ ယခု မှစ၍ လေးပတ်၊ ငါးပတ် ယခုကနေ။ ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့စျေးဝယ်နေဆဲ။ AND ဒီနည်းကိုကောငျးတဲ့သတင်းများနှင့်တစ် ဦး TEAM BY ယောဘ။ ထပ်မံ WE စျေးဝယ်နေပါတယ် နောက်ထပ်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်။ ပိုးသတ်ဆေး, စက်ရုံများ, ပိုးသတ်ဆေး။ ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာ ၃၀၀၀၀ လိုတယ်။ ငါတို့တည်ရှိနေသောဆေးရုံတွင်ရှိသည် စနစ် 4000 အပေါက်တွေ။ ဒီနည်းကိုသာမန်၌တည်၏ ဆေးရုံလည်ပတ်မှု။ WE 7000 ၀ ယ်ယူပြီးပါပြီ နေဆဲစျေးဝယ်။ ဖက်ဒရယ်အစိုးရပေးပို့ခဲ့သည် ၄၀၀၀ ။ ကျနော်တို့ဘယ်မှာ SPLITTING ရှင်းပြနေပါတယ် တစ် ဦး တည်း ventilator နှစ်ခုလုပ်နိုင်ပါတယ် ပုံ။ အိုင်တီလုပ်ဖို့အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့တယ် ကျွန်တော်လေ့လာချင်ရင်ကြည့်ချင်ပါတယ် အနည်းငယ်သောအိုင်တီလုပ်ပါ အနည်းငယ်ပိုအချိန်ရှိသည် အိုင်တီနှင့်အတူအတွေ့အကြုံ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပါပဲ SPLITTING ကိုကြည့် ပိုးသတ်ဆေး။ ကျနော်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေပါတယ် ကြိုးစားကြည့်ဖို့ဗဟိုအစိုးရ VENTILATORS နောက်ထပ်ရှာပါ။ ဒါပေမဲ့ငါတို့တစ်ကိုယ်ရေအကြီးမားဆုံး စိန်ခေါ်မှုသည် ventilator များဖြစ်သည်။ ထပ်, အမှန်တကယ်သော ICU အိပ်ရာ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဝင်လေထွက်ကုတင်ကိုဆိုလိုသည် ထပ်, ဒီနည်းကိုတစ်ခုဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာ။ သင်၌အိပ်ရာ၊ စက်ကိရိယာ, သင်ဝန်ထမ်းလိုအပ်ပါတယ်, AND နားလည်ရန်လိုအပ်သည် သောအချို့ဝန်ထမ်းသွားမယ့် ဖျားနာသူတို့ထွက်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အလုပ်လုပ်နေပြီ တစ် ဦး ထက်ပိုသော SURGE ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါ ပြန်သွား GO ပြန်သွား GO နောက်သို့ ဖြစ်နိုင်သည့်သူနာပြုများနှင့်ဆရာဝန်များ ဆေးရုံတွင်မနေပါနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုအလုပ်များနှင့်မေးပါ သူတို့တာဝန်ကျဖို့လက်မှတ်ထိုးရန် တာဝန်ဝတ္တရား။ သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ 40,000 လူတွေ AS UP လက်မှတ်ထိုးကြပါပြီ တစ် ဦး က Surge ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု Force ။ ဤလိုအပ်သောရူပဗေဒပညာရှင်များ YOL ES ည့်သည်များ၊ သူနာပြုများ၊ LPN များ၊ လူတွေတက်လက်မှတ်ထိုးပါပြီ ဒါကအလွန်အရေးကြီးပါတယ် - BIG ဆိုတာဘာလဲ၊ BIG သဘောတူညီချက်။ သင်သည်အိပ်ရာများကိုဖန်တီးနိုင်သောကြောင့်၊ သင်ရှိသည့်ပစ္စည်းကိုရှာတွေ့နိုင်သည် ဝန်ထမ်းများရှိသည်။ AND သင်ကဝန်ထမ်းရှိသည် သောအပိုဆောင်းကုတင်များအတွက် ယခုဆေးရုံတွင်မရှိပါ စနစ်။ သငျသညျအခါ ရှိပြီးသားဝန်ထမ်းများရရှိနိုင်ပါသည်။ OR နည်းလမ်းဖြင့်အလုပ်လုပ်မရနိုင် ကျနော်တို့သွားမယ့်နာရီ လူတွေအလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်။ ဒါအလွန်ကောင်းသည်။ ဒီနည်းနဲ့အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှမသိဘူး ဒီနည်းကိုပြီးပြီ။ ကျနော်တို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းပြောခဲ့တယ် ဒီနည်းကိုဖွင့်သောဖိစီးမှု လူတွေ။ AND စိတ်ကျန်းမာရေးဖိအားနှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ။ ဘယ်သူမှတကယ်အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး ဒီနည်းကို။ ငါတို့အားလုံးအကြောင်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ် ချက်ချင်းလိုအပ်ချက်, ဘဝ နှင့်ချက်ချင်းသေခြင်း မှန်ကန်သောအခြေအနေ, သို့သော် အထင်မသေးပါနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုစိတ်ဒဏ်ရာလူတွေ ခံစားချက်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေး ဆောင်းပါးများ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်တောင်းခံသည် စေတနာ့ဝန်ထမ်းမှပရော်ဖက်ရှင်နယ် အွန်လိုင်းစိတ်ဓာတ်ကိုထောက်ပံ့ပေးရန် sign up လုပ်ပါ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု။ 6000 စိတ်ကျန်းမာရေး ပညာရှင်များသဘောတူ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပေးရန်စေတနာ့ဝန်ထမ်း WHO ကလူများအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီဟာကဘယ်လိုအလှအပပါလဲ။ နှင့် HOTLINE 1-844-863-9314, သင်ဤတယ်လီဖုန်းခေါ်နိုင်သလား, အချိန်ဇယားတစ် ဦး နှင့်အတူရက်ချိန်း စိတ်ကျန်းမာရေးပရော်ဖက်ရှင်နယ် သူတို့ကိုစကားပြောရန်လုံးဝအခမဲ့ သင်ခံစားရသောဖိစီးမှု။ တဖန်ဘုရားသခင် 6000 ကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏ WHO ကစိတ်ကျန်းမာရေးပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဒီနည်းကိုအခမဲ့လုပ်နေတယ်။ AND ငါသူတို့ပုံမှန်အတွက်သေချာပါတယ် သူတို့အလေ့အကျင့်အလုပ်များနေကြသည်။ ဒီနည်းကသာမန်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည် သူတို့ကိုငါသေချာ S သူတို့အလေ့အကျင့်အလုပ်များနေကြသည်။ ဒီနည်းကသာမန်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည် သူတို့ကို။ သမ္မတ Trump နှင့်စကားပြော အချို့သောကာလ, နောက်ဆုံးည, ငါ NO သူ့ကိုဒီမနက်နှင့်အတူ။ ငါလူတွေကိုပြောတယ် ကိုင်တွယ်သောအဖြူရောင်အိမ် ဤလုပ်ငန်းများကို။ ငါအသံနှင့်အတူပြောခဲ့တယ် သမ္မတ။ ငါ JARED KUSHNER နှင့်အတူပြောဆိုခဲ့သည် ဘယ်သူလဲ New Yorker သူသိတယ် နယူးယောက်။ သူသည်အဖြူရောင်တွင်အလုပ်လုပ်သည် အိမ်သူအိမ်သား အထူးသဖြင့်အထူးအထောက်အကူပြုသည် ဒီအခြေအနေတွေ၏။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသည့်အရာသည် A ဖြစ်သည် အများသုံးအခက်အခဲ။ ဤအဘယ်သူမျှဤ ventilator နှင့် ဘယ်သူ့ကိုမှမဆိုတစ် ဦး သင်လိုအပ်သည့်အခြေအနေ ဤစက်၏ဤနံပါတ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်ဆံပါ အရေးပေါ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့အရာအားလုံးကိုဝယ်ယူခဲ့သည် ဝယ်ယူနိုင်။ ကျနော်တို့အခုအခြေအနေမှာပါပဲ WE အရှိန်မြှင့်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ် ဒီ VENTILATORS ၏ထုတ်လုပ်မှု နှင့် ventilator ရှုပ်ထွေးသည် ကိရိယာတန်ဆာပလာ။ သမ္မတနှင့်သူ၏အဖွဲ့ ၁ DPA သည်ကောင်းစွာအသုံးပြုနေသည် အခြေခံအားဖြင့်အိုင်တီကြောင့်ဖြစ်သော - အိုင်တီ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့်အခါတစ် ဦး သြဇာကိရိယာ IS ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများနှင့်, လက်ျာဘက်? သင့်ကိုကူညီပါ။ သင်၏အကူအညီကိုကျွန်ုပ်တို့တောင်းခံနိုင်ပြီ။ OR သင်ကူညီရန်သဘောတူနိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားတက်ရန်လိုအပ်သည် တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်မှု။ ပင်အတူရှိ၏ RAMP ထည့်သွင်းရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက် UP UP TIME , supply ချိတ်ဆက်အတူတကွ အလုပ်ခွင်အတူတကွနှင့် GET ဤအရာတို့ကိုအပြေး။ သင်ကြားနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာကကူညီလိမ့်မယ်။ အထွေထွေ motor များကူညီလိမ့်မည်။ ပြTHEနာကငါတို့ရဲ့အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်တိုတို, ငါတို့ AN ကြည့်ရှုပါ APEX 21 ရက်အတွင်း။ VENTILATORS AND ဤအရ စီးပွားရေးညှိနှိုင်းရေးမှူးထား အတူတူ, ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်, ဖြန့်ဝေပေးပို့သည် AN IS အလွန်ခက်ခဲသောတာဝန်။ AND အိုင်တီကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုခု အဖွဲ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည် အဖြူရောင်အိမ်အသင်းနှင့်ငါချင်တယ် မိမိအဘို့အПрезидентကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်သူ့အဖွဲ့ သူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုရယူပါ၊ ကျနော်တို့နိုင်ငံများနှင့်ပြောနေတာပါ အဖြစ်ကောင်းစွာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအသစ် လုပ်နိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီများ ထုတ်လုပ်မှု။ ငါတို့လည်းအဖြူနှင့်စကားပြောနေကြတယ် အခြားအယူအဆအကြောင်းအိမ်။ New York ကအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ရှိသည် နံပါတ်စည်းကမ်းချက်များ၌တည်၏။ နယူးယောက်မှလည်းအများဆုံးရှိသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွက်လိုအပ်ချက် အချိန်။ ညာဘက်? ကျွန်ုပ်တို့၏ APEX အကြောင်းပြောဆိုဆွေးနွေးကြသည် သောကုလားကာအကြောင်း။ ပတ်ပတ်လည်ကွဲပြားဒေသများ တိုင်းပြည်သွားနေကြသည် ကွဲပြားခြားနားသောကျီး။ WE တချို့နည်းလမ်းတွေထဲမှာပထမ ဦး ဆုံး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြUMနာအရေအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးတက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းကြောင်းပထမ ဦး ဆုံး။ ရှည်လျားသောရိုက်ချက် BY ။ ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရပါလိမ့်မယ် ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်သူတို့၏ကုလား။ သမ္မတ ဦး သိန်းစိန်ကိုငါပြောခဲ့တဲ့စကား၊ သူ့အဖွဲ့ကကြည့်ရှု, အဲဒီမှာထက် ကျနော်တို့ပေးဖို့ရှိသည်ဟုဆိုသည် တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာ တစ်ကြိမ်တွင်စကားပြောကြရအောင် လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း သော HOT အစက်အပြောက်, တခါ သင်ရှိသည်သောကြောင့်အစက်အပြောက်လည်ပတ် APEX ပြီးတော့ပြီးတော့သင်တစ် ဦး ကုလားအုတ်ရှိသည်, AND ကုလားဆွေမျိုးဖြစ်ပါတယ် တိုတို, သင်ဤအပူ ADDRESS ကိုတခါ သောပြင်းထန်မှုနှင့်အတူအစက်အပြောက်, INTENSE ပစ္စည်းကိရိယာ, INTENSE ဝန်ထမ်း, ထို့နောက်ပြောင်းရွှေ့ NEXT HOT အစက်အပြောက်။ AND တစ် ဦး ကပို။ ပို။ ရှိသည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှဖြုန်းတီးမှု တစ် ဦး static ပြန်ပို့, မှန်တယ်? ငါဖက်ဒရယ်အစိုးရ၌ရှိ၏ HUD မှာငါဆယ်ကျော်သက်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် ဘေးအန္တရာယ်များ။ သင်၌ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုနှင့်ပတ်သက်သည် ထိုကာလ၌သင်တို့ရှေ့ ထို့နောက်သင်သည်နောက်သို့ရွှေ့ပါ ဘေးအန္တရာယ်။ AND ငါသော Rolling တှေး DEPLOYMENT ဒီမှာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး NEW YORK ၏ BEF, ငါတို့ 100% ဖြစ်လိမ့်မည်လွတ်လပ်သော အထောက်အကူပြု။ H မြေတပြင်လုံးမှအကူအညီလိုအပ်သည် အခုအချိန်မှာနိုင်ငံ။ ကျနော်တို့ကနေအရင်းအမြစ်များလိုအပ်ပါတယ် အခုအချိန်မှာတစ်ခုလုံးကိုတိုင်းပြည်။ ငါတို့ APEX ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်သောကြောင့် AND ကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်များအမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမဲ့ APEX HIGH POINT ဖြစ်လိမ့်မည် တိုင်းပြည်ဖြတ်ပြီး SEQUENTIAL ။ ဒါနဲ့အဖြူရောင်အိမ်တော်ကိုပြောကြားခဲ့သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံသောပစ္စည်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပို့ပါ လိုအပ်ပါတယ်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျွန်တော်တို့ကိုပေးပို့ပါ။ မကြာမီငါတို့အတိတ်ရ AS အရေးပါသောအချိန်, ငါတို့လိမ့်မည် သောပစ္စည်းကိရိယာပြန်ပေးရန်နှင့် NEXT ၏အစက်အပြောက်သို့ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ။ ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာမခံပါလိမ့်မယ် အိုင်တီနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအိုင်တီစီမံခန့်ခွဲ။ အကယ်၍ သင်သည် US 15,000 ပို့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ပြီးနောက် VENTILATORS ပြီးတော့ Los Angeles လိုအပ် CURVE 15,000 ကျနော်တို့ယူနိုင်ပါတယ် ventilator ဒီမှာမှပစ္စည်းကိရိယာ, ငါတို့ယူနိုင်ပါတယ် သူတို့ကိုမှဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်, ငါတို့ ဒီမှာမှသင်ခန်းစာယူနိုင်သလား, WE ပထမ ဦး ဆုံးသွား, အရာလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ် သောအခြားဘယ်သူမှလေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။ ငါတို့ဖြစ်မယ့်သောကြောင့် ပထမတစ်ဝက်ဖြတ်သန်းသွားသည်။ ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာမခံ WE, ထိုပစ္စည်းကိရိယာယူပါလိမ့်မယ် သောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ယူလာပါလိမ့်မယ် သောနည်းပညာအကူအညီကိုယူလာပါ NEXT ကိုအစက်အပြောက် TO ။ ငါသမ္မတဖြစ်မယ်, ငါဖြစ်လိမ့်မယ် NEXT ကိုသွားပါအပိုင်း ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့နှင့်အတူအစက်အပြောက်။ တိုင်းပြည်ကိုကူညီဖို့တောင်းပန်ပါတယ် အမေရိကန် ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤ၌ရှိကြ၏။ ငါတို့သည်သူတို့အကူအညီအတွက်တောင်းပါတယ် AND သူတို့စဉ်းစား AND WE DIVIDENDS နှင့်အတူအိုင်တီပြန်ပေးလိမ့်မည်။ ကန်ြပATEတြာတငြ်အကALက်ြပ CONS သည် IS $2ထရီလီယံ Bill FOR Quote / Unquote Relief စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, တစ် ဦး ချင်းစီနှင့် အစိုးရများ။ အမှန်ပင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ် နယူးယောက်ပြည်နယ်။ ဒေါ်လာ ၂ ထရီလီယံငွေပမာဏ New York ပြည်နယ်ဆိုလိုတာက အစိုးရလား။ အိုင်တီကဒေါ်လာ ၃.၈ ဘီလီယံကိုဆိုလိုတယ်။ အများကြီးကဲ့သို့ $ 3.8 ဘီလီယံအသံ ပိုက်ဆံ။ ဘတ်ဂျက်ဒါရိုက်တာကသင့်ကိုစကားပြောနိုင်တယ် မှတဆင့်။ ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့တစ် ဦး မျက်နှာဖုံးကိုကြည့်ပါတယ် $9ဘီလီယံ, $ 10 ၏တိုတောင်း ဘီလီယံ, $ 15 ဘီလီယံ။ ဒီနည်းကိုဗိုင်းရပ်စ်ဖို့ဒီတုံ့ပြန်မှု ဖြစ်နိုင်သည် US $ 1 ကုန်ကျသည် ဘီလီယံ, ဖြစ်နိုင်သည်ကုန်ကျမည် အမေရိကန်မှာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ဒေါ်လာတွေ လုပ်ပြီးပြီ New York City တစ်ခုတည်းသာ $ 1.3 ရရှိသည် ဒီ packet ထဲကသန်းပေါင်းများစွာ။ သောအိတ်ထဲမှာတစ်စက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်အိမ်DEL္ဌာနဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ် SPO ကိုစကားပြောခဲ့သည်၊ ဒီနည်းကိုကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နံနက်။ ငါဒီနည်းကိုမလုပ်ဘူးဟုပြောသည် အိုင်တီ ငါသိ၏ငါသိ၏ SENATE သီအိုရီနှင့်သမ္မတနိုင်ငံ သီအိုရီ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အိမ်လိုအပ်ပါတယ် Adjustments လုပ်ပါ။ သွားလေ၏အိမ်နှင့် Bill OVER, New York ပြည်နယ် $ 17 ရပြီ ဘီလီယံ အထွေထွေဥပဒေကြမ်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေါ်လာ ၃.၈ ရရှိသည် ဘီလီယံ AND, ကောင်းပြီ, သင်ရုံ - BIG သုံးစွဲခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောသုံးစွဲမှုအခြေအနေမဟုတ်ပါ။ ငါနှစ်တိုင်းအခွန်ဖြတ်။ ကျွန်ုပ်တွင်အနိမ့်ဆုံးတိုးတက်မှုနှုန်းရှိသည် မျက်မှောက်ခေတ်ပြည်နယ်ဘတ်ဂျက် နိုင်ငံရေးနောက်ခံ။ အိုကေလား? ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ချွေတာဖြစ်ကြပြီး WE ဖြစ်ကြသည် အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဒီနံပါတ်များကိုငါပြောပြမယ် အလုပ်မလုပ်နဲ့ငါအိမ်ကိုပြောပြတယ် ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်လိုအပ်သောအသင်းဝင်များ သူတို့ရဲ့အကူအညီ။ NUMBERS ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, စုစုပေါင်း စမ်းသပ်ပြီးကျနော်တို့ 103,000 အထိပါပဲ လူတွေ။ WE 12,000 အထိစမ်းသပ်မှုအသစ်။ မနေ့က၏, ခန့် 28% ၏ တစ်နိုင်ငံလုံးစမ်းသပ်မှုအားလုံး အသစ်၏ပြည်နယ်အားဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည် YORK ။ နယူးယောက်ပြည်နယ်နောက်ထပ်လုပ်နေတယ် မည်သည့်ပြည်နယ်ကနေစမ်းသပ် အမေရိကန်ြပည်ထောင်စု။ ငါ TEAM အလွန်ဂုဏ်ယူပါတယ် ငါတို့ဘယ်လိုရွေ့လျားသွားခဲ့သလဲ ဒီနည်းကို UP စမ်းသပ်ပြီး အပြေး။ လူတွေကဒီမေးခွန်းကိုဘယ်လိုလုပ်ကြသလဲမေးကြပါ အလုပ်။ မည်သည့်ဆေးရုံတက်ရမည်နည်း စမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်။ သင်တစ် ဦး ဆေးရုံသို့သှားနိုငျသညျ ဘူဖလာ, New York သင်ပြပါလျှင် ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်တွေ့ဆုံ ပရိုတိုကော၊ သင့်ကိုစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ နည်းဗျူဟာအရ WE စမ်းသပ်ခြင်းကိုဖျက်လိုက်သည် ဘယ်နေရာမှာအများဆုံးဆုံး ကျနော်တို့ drive ကို - THRUS ကို set up ပြီးပြီ ET CETERA ။ အဘယ်ကြောင့်? ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြုသဘောဆောင်သည့်မုဆိုးများဖြစ်သောကြောင့်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြုသဘောဆောင်သောမုဆိုးများဖြစ်သည် သူတို့ကိုသီးခြားဖယ်ရှားပေးနိုင်သလား ဖြန့် သင်ပို။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် မြင့်မားသောအပြုသဘောဆောင်သည့်အခြေအနေများ မှန်, ?ရိယာ? BRONX တွင် drive-THRU တစ်ခုတည်ဆောက်ပါ တစ် ဦး က drive-Thrus VERSUS CHAUTAUQUA County, သင်ရပါလိမ့်မယ် BRONX တွင်နောက်ထပ်အပြုသဘောဆောင်။ AND ငါတို့လိုအရာကားအဘယ်သို့။ သို့သော်မည်သည့်နေရာ၌မဆို သင့်အနေဖြင့်ရောဂါလက္ခဏာများရှိပါကသင် စိုးရိမ်ပူပန်, သင်ထဲသို့လမ်းလျှောက်နိုင် မည်သည့်ဆေးရုံနှင့်သောဆေးရုံ တစ် ဦး ကစမ်းသပ်မှုရရှိနိုင်သလား။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဖြစ်ရပ်များအရေအတွက်, ငါတို့ပါပဲ အထိ 300,000 အထိ။ ဖြစ်ရပ်အသစ်များ ၅၀၀၀ ။ ပြန်ကြည့်ပါ။ 13,000 - တောင်းပန်ပါတယ်, 17,000 New York မြို့တော်။ 4,000 WESTCHESTER, 3000 IN NASSAU County ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသော WESTCHESTER ရှိသည် ဘာတွေသိသိသာသာနှေးကွေး အထင်ကရတိုးမြှင့်။ သတင်းကောင်းဘက်မှာပြန်စ သင်နှုန်းနှေးကွေးနိုင်သလား ရောဂါကူးစက်မှု။ ဟုတ်သည်။ မင်းဘယ်လိုသိလဲ? ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ခဲ့သလဲကြည့်ပါ WESTCHESTER ။ သောအပူဆုံးစပျစ်သီးပြွတ်ဖွစျသညျ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းများပိတ်ပြီးပြီ စုရုံး။ WE စမ်းသပ်ခြင်းကိုဖမ်းမိ။ ငါတို့သည်သိသိသာသာနှေးကွေးခဲ့သည် တိုးတက်မှု။ NASSAU County 3000 ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဆွေမျိုးမှန်ဖြစ်ကြသည် WESTCHESTER ။ WESTCHESTER သည့်အခါ ZERO ကဲ့သို့ စတင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကသူ့ကိုနှေးကွေးနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရှိသည် အိုင်တီနှေးကွေး ထပ်, သင်ကပြန့်ပွားကြည့်ပါ ငါတို့ပြောခဲ့သည့်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ဖြစ်လိမ့်မယ်။ လက်ရှိအရေအတွက်, 30,000 စမ်းသပ် အပြုသဘော။ အပြုသဘောစမ်းသပ်သူမြား၏ 12% ဆေးရုံတင်ထားပါသည်။ ၃ ရာခိုင်နှုန်းသည် ICU တွင်ရှိသည်။ အိုကေလား? ဤသည်ကိုထပ်ရှူရှိုက်အချိန်။ ငါကအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားတယ်၊ ဆိုလိုတာလား 30,000 စမ်းသပ်ပြီးအပြုသဘော။ ဆေးရုံတွင် ၁၂% ရှိသည်။ ၃% သည် ICU တွင်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သူတို့ကို ၃% ကြည့်ရှုပါက၊ pre- လွှမ်းမိုးသောသက်ကြီးရွယ်အိုများဖြစ်ကြသည် နိုင်ငံသားများ, လူတွေ လူတွေဒုက္ခရောက်နေတယ် အမ်မိုင်နှင့်အတူ, လူတွေ နှိုင်းယှဉ် IMMUNE စနစ်။ ဤအရာအလုံးစုံအကြောင်းပါ။ ဆူညံသံအားလုံး၊ စွမ်းအင်အားလုံး၊ အိုင်တီဒီအကြောင်း 3% အကြောင်း။ အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါ။ NOW က, ဒီ 3%, ငါ့အမိကား, သင်၏အမိကားအဘယျသို့သော သင်၏နှမ၊ ဤသူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်ကြသည် ဤချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသူများဖြစ်သည် ငါတို့သည်ငါတို့ရှိသမျှလုပ်ပါလိမ့်မယ် တစ်ခုချင်းစီကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင် သူတို့ကို။ ငါလူတွေကိုပေးပါ နယူးယောက်၏ပြည်နယ်ငါ၏သောစကား WE အိုင်တီလုပ်နေပါတယ် ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အကြောင်းကို 3% အကြောင်းပြောနေတာပါ အပြုသဘောစမ်းသပ်သောလူများ ငါတို့အကြောင်းကြိုးစားနေပါတယ်။ အများဆုံးသက်ရောက်သောပြည်နယ်များ, ငါတို့ပါ ၃၀၀၀၀ ။ NEXT နှင့်အနီးဆုံးပြည်နယ်သည် New Jersey ဖြစ်သည် AT3ကယ်လီဖိုးနီးယား2။ ဒီဟာတကယ်ကိုသိသိသာသာ drammatic ကွဲပြားခြားနားမှု။ ဤသူကားငါဖို့စီစဉ်သောအရာဖြစ်တယ် နားထောင်သူမည်သူမဆို။ ကျွန်ုပ်တို့မှာပြIMနာဆယ်ကြိမ်ရှိပြီ ဂျာစီအသစ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုကာလီဖိုးနီးယားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည် သောစည်းကမ်းချက်များ၌ပို။ သော လူ ဦး ရေ။ ကျွန်တော်တို့မှာပြTနာ 15 ကြိမ်ရှိတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးကြည့်ရအောင် အဘယ်ကြောင့်။ ဘာကြောင့်နယူးယောက်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ နံပါတ်အမြင့်။ ထပ်မံ WE စုစုပေါင်း ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာနားလည်ဖို့။ ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့် NEW YORK ဘာကြောင့်လဲ နံပါတ်တစ်ခု? ဤရွေ့ကား, ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်။ ငါသေချာအောင်လို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှသီးခြားအချက်အလက် အမြင်။ ငါပေးသောအချက်အလက်များ ငါနှင့်ဆန့်ကျင်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံး DAY မှနေ့ရက်များအပြောင်းအလဲများ။ ငါမူကားငါအတိအကျငါပေးမည် တစ်နေ့နေ့အခြေခံရှိခြင်း။ အသစ်သောအဘယ်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင် YORK ၌များစွာသောကိစ္စရပ်များရှိသည် အခြားပြည်နယ်တခုခုရှိပါသလား။ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲ သငျသညျ၏နံပါတ် 15 ကြိမ်ပါပဲ ကယ်လီဖိုးနီးယား။ ငါဆိုလိုတာကတကယ်ပင်အငြင်းပွားနေသည် သင်စဉ်းစားသည့်အခါ။ အချိန် 30 နဲ့မက်ဆာချူးဆက် THE အမှုအရေအတွက်။ ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်သောမေးခွန်းကဘာလဲ လူတွေငါ့ကိုမေးကြည့်ပါ အဖြေနှစ်ခု။ အဖြေတစ်ခုကကျွန်ုပ်တို့ကကြိုဆိုပါတယ် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလူများ။ ငါတို့ဒီမှာလာလူတွေ, ငါတို့ ဒီကနေလာကြတဲ့လူတွေရှိသည် အီတလီကနေလာတဲ့တရုတ်, နိုင်ငံများအားလုံးမှလာသောသူ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်နိုင်ငံတကာခရီးသွားများရှိသည် တရုတ်ပြည်မှာဘယ်သူ WHO က ကိုရီးယားနှင့် KOREA ၌နေသော။ AND WHO ကဒီမှာလာကြ၏။ ငါ၌သံသယမရှိ VIRUS ဒီမှာအစောပိုင်း၌ရှိ၏ ငါတို့ပင် AN KNOW ။ ငါ၌သံသယမရှိ ဗိုင်းရပ်စ်ဒီမှာအစောပိုင်းကထက် အခြားပြည်နယ်တစ်ခုရှိခဲ့သည်။ သူတို့လာဒီမှာကြောင့် ပထမ။ ပထမ ဦး ဆုံးအဖြေဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအဖြေကြှနျုပျတို့သညျ နီးကပ်လာသည်။ WE နီးကပ်နေသောကြောင့်။ ဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့စကားပြောသနည်း DENSE နယ်မြေအတွင်းအိုင်တီလွှဲပြောင်း။ အိုင်တီ LITERALLY သောကြောင့် ပိတ်ပါ။ ငါတို့နှင့်နီးကပ်စွာနေထိုင်သောကြောင့် နောက်ထပ်။ သောကြောင့်ကျနော်တို့တစျခုနီးကပ်လာပါတယ် နောက်ထပ်လမ်းပေါ်မှာ။ ကျနော်တို့အနီးကပ်နေသောကြောင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း။ သောကြောင့်ကျနော်တို့တစျခုနီးကပ်လာပါတယ် နောက်ထပ်ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်တ ဦး တည်းနီးကပ်လာပါပြီ စားသောက်ဆိုင်။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်တ ဦး တည်းနီးကပ်လာပါပြီ ရုပ်ရှင်ရုံ။ AND ကျနော်တို့အများဆုံးထဲကတစ်ခုရှိသည် THE DENSE CLOSE ပတ်ဝန်းကျင် တိုင်းပြည်။ AND ဤဗိုင်းရပ်စ်ဘာလဲဆိုတာ အိုင်တီပြုခဲ့သောလမ်းဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြုလုပ်သည် အားနည်းချက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြုလုပ်သည် အားနည်းချက်။ သော Spacial ပိုမိုနီးကပ်စွာကျွန်တော်တို့ကိုစေသည် အားနည်းချက်။ ဒါပေမဲ့ဒါဟာသင့်အတွက်အမှန်ပဲ အကြီးမြတ်ဆုံးနိုးကြားမှုသည်လည်းသင့်အတွက်ပါ အကြီးမြတ်ဆုံးခွန်အား။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အနီးကပ်စေသည်အရာဖြစ်တယ် ကျွန်ုပ်တို့ WHO သည်။ နယူးယောက် IS ကဘာလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြုလုပ်သောအရာဖြစ်သည် အထူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ခံမှု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တံခါးဖွင့်သည် အဘယ်အရာကိုအမေရိကန်အထူးစေသည်။ အိုင်တီကအမေရိကန်ကိုအဲဒီလိုခံစားရစေတယ် အခြားတယောက်ချိတ်ဆက်။ အိုင်တီကအမေရိကန်ကိုလက်ခံမှုဖြစ်စေသည် နောက်ထပ်တစ်ခု။ အိုင်တီစေသည်သောအနီးကပ် ကျွန်ုပ်တို့လူသားများကိုအသုံးပြုပါ။ အနီးကပ် New York က ငါစဉ်းစားသောလူသား အခြားအရာများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အနီးကပ်နီးကပ်မှုသည် အသိုင်းအဝိုင်း၏ခံစားချက်။ ငါ WHO ကတစ် ဦး ကလူနာရှိပါတယ် ဆက်လက်လမ်းညွှန် AND ဦး ဆောင်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှု။ သူဒီမှာနောက်ထပ်မဟုတ်ပါဘူး။ မင်းအတွက်။ သူနေဆဲငါ့အဘို့ဒီမှာ။ ဒါပေမဲ့သူကပိုမိုသောအရာတို့ကိုပြောခဲ့သည် နှင့်ပိုပြီးအလှအပထက်ပိုပြီးပို အခြားလူများရှိသည်။ သူပြောခဲ့သည်သောအရာတစျခု သောဤလျောက်ပတ်သည် ဒီနေ့ကျနော်တို့တစ် ဦး တည်း၌ယုံကြည်ကြသည် ဖော်ပြသောအခြေခံသဘောတရား ကျောင်းစာကြည့်တိုက်ထက်ပိုကောင်းတယ် ငါရေးလိုက်နိုင်တဲ့မိန့်ခွန်း ကောင်းတဲ့အစိုးရတစ်ခုဘာလုပ်သင့်လဲ BE ။ မိသားစု၏စိတ်ကူး၊ အကျိုးကျေးဇူးများဝေမျှခြင်းနှင့် လူအပေါင်းတို့၏ကောငျးကြိုးဝ။ နောက်ထပ်နာကျင်မှုတစ်ခုခံစားရသည်။ နောက်ထပ်ကောင်းချီးတစ်ခုဝေမျှပါ။ အမှန်တကယ်, ရိုးသားဖြောင့်မတ် လူမျိုးနှင့်လိင်ဆိုင်ရာရိုသေလေးစားမှုမရှိ OR ပထဝီဝင်သို့မဟုတ်နိုင်ငံရေး အထောက်အပံ့။ New York က။ ဒါကအနီးကပ်သော မိသားစု၏အယူအဆ, အသိုင်းအဝိုင်း။ NEW YORK အသစ်လုပ်သောအရာ YORK ။ ပြီးတော့ဒါက US ကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲ ဒီမှာအားနည်းချက်။ ဒါပေမဲ့ဒီနည်းကိုနီးကပ်စွာ နှင့်သောချိတ်ဆက် လူသားနှင့်ထိုမျှဝေသော ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးသောအစွမ်းသတ္တိဖြစ်ပါတယ်။ AND သွားမယ့်အရာဖြစ်တယ် နေ့၏အဆုံးကိုကျော်လွန်။ ငါသည်သင်တို့ကိုကတိ။ နယူးယောက်ဘယ်လောက်မြင်လဲ တုံ့ပြန်။ နယူးယောက်တွေဘယ်လိုမြင်လဲ နောက်ထပ်တစ်ခုကုသ။ ငါ 6000 စိတ်ကျန်းမာရေးကြည့်ရှုပါ စေတနာ့ဝန်ထမ်း။ ငါ 400,000 ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ကြည့်ပါ တက်န်အလုပ်သားများ။ ငါ့ကိုခေါ်တဲ့ရောင်းချသူတွေကိုမြင်လိုက်ရ ငါကူညီနိုင်ဟုဆိုသည်။ New York က။ New York က။ နှင့်ငါ့သူငယ်ချင်း IS IN-DEFEATABLE ။ AND ငါအချို့နည်းလမ်းတွေထဲမှာဝမ်းမြောက်မိပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအခြေအနေနှင့်ပထမ ဦး ဆုံးပါ ငါတို့အောင်မြင်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် AND ကျနော်တို့အခြားပြသပါလိမ့်မယ် ဒီနိုင်ငံဖြတ်ကျော်အသိုင်းအဝိုင်း ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ သူတို့အဘို့ထိုအရပ်၌ရှိပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သူတို့အဲဒီမှာဖြစ်ချင်တယ်။ ငါတို့သည်တစ်ခုချင်းစီရှိလိမ့်မည် အစဉ်အမြဲငါတို့ဖြစ်သကဲ့သို့အခြား။ မေးခွန်းများရှိပါသလား? >> နိုင်ငံတော်သည်မည်သူမည်ဝါဆုံးဖြတ်ပေးသည် အိုင်တီကြွလာသောအခါ ဦး စားပေး IS လေဝင်လေထွက်? >> ကျနော်တို့အဘယ်သူမျှမ antipipation ရှိသည် VENTILATOR ဦး စားပေးရှိသည် အသုံးပြုမှု။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်မှာ VENTILATOR တစ်ခုရှိရန်ဖြစ်သည် တစ်ယောက်လိုအပ်သူ။ >> သင်သောအမေရိကန် NUMBERS ပြသခဲ့သည် သင်အကောင်းမြင်ဖြစ်ကြောင်းပြပါ ၁၅၀၀၀ ကို AT ပြီးတော့မင်းကမင်းကိုပြောခဲ့တယ် လိုအပ်ပါတယ် ၄၀၀၀၀ ။ SO တချို့ရဲ့ NITTY- GRITTY မေးခွန်းများ, အဲဒီ VENTILATORS ဘယ်မှာလဲ FEMA ကနေလာကြပါပြီ။ သင်သည်မည်သည့်ကတိကဝတ်မှရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါ သူတို့လိမ့်မယ်အဖြူရောင်အိမ် သော 4000 ထက်ပို။ ပေးပို့ပါ သူတို့ကတိကဝတ်ပြုပြီးပြီလား နှင့်ရောက်ရှိရန်အစီအစဉ်ကဘာလဲ သောတူညီသောလမ်းအရေအတွက် ဆေးရုံတင်များ၊ >> ကောင်းတစ် ဦး သောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ WE ပထမ ဦး ဆုံး VENTILATORS လာကြလိမ့်မယ် STOCKPILE AND ငါမှစွန့်ပစ်ပါလိမ့်မယ် ငါတို့လိုအပ်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်။ လိုအပ်ချက်အပေါ် LITERALLY ဖျက်ပစ် အခြေခံ, မှန်? တစ် ဦး ကဆေးရုံတက်ခေါ်လျှင် WE Overlay, ဟုဆိုလိမ့်မယ် ဖျက်သိမ်းရန်အပြုသဘောဆောင်ပါ။ ကုတင်၏တိုးပွားလာ IS ငါတို့ထိန်းချုပ်မှုအတွင်း, ညာ? ဒီနေရာမှာအိတ်ဆောင်ရှိပါတယ်။ သူတို့သည်ဆေးရုံတင်မဟုတ်ပါ သင်မည်သို့ပုံကိုသိရန်ရှိသည် သူတို့ကိုဆေးရုံတင်များသို့ပြောင်းပါ တဖန်သင်တို့ပုံကိုသိရန်ရှိသည် သူတို့ကိုရဖို့, ဒါပေမယ့် WE အိပ်ရာ။ ဒါကြောင့်တစ် ဦး Logistic IS လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာအခက်အခဲ၊ သင်တစ် ဦး ထဲသို့နံနက်အခန်းသို့လှည့် ဆေးရုံတင်။ ဆေးရုံတွင်မည်ကဲ့သို့တည်ဆောက်မည်နည်း JAVITS ဗဟို။ VENTILATORS ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ သူတို့ကိုငါမရှိကြပါဘူး။ ဖက်ဒရယ်အစိုးရမရှိပါ သူတို့ကိုရှိသည်။ ဘယ်သူမှ၏ရှယ်ယာရှင်များရှိသည် ဤ။ ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှိခဲ့ပါတယ် သူတို့ကိုတူညီသောလမ်းကိုရယူပါ သူတို့ကိုဝယ်ယူရန်ရှိသည်။ ငါအဖြူရောင်အိမ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေပါတယ် ရယူရန်တီထွင်မှုနည်းလမ်းများ သူတို့ကို, RAMP ကုမ္ပဏီများရယူ UP, ကုမ္ပဏီများရယူခြင်း အခြားစက်များပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း လှိမ့်ဆင်းသက်လာနည်းစနစ်, ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှသူတို့ကိုရှိသည်။ ဆေးကုသမှုခံယူစရာမရှိပါ ဝါသနာတူနိုင်သလားဝါရှင်တန် သူတို့ကိုပေါ်လာပါစေ။ >> 2015 ခုနှစ်အစီရင်ခံစာရှိခဲ့သည် အကြံပြုထားသည့်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်တစ် ဦး Task Force ကအသစ်ဖြစ်နိုင်သည်အကြံပြုသည် YORK သည်၎င်း၏တိုးမြှင့်ရမည် STOCKPILE ။ သောမအကြောင်းပြချက် ပြီးပြီလား >> တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး, Jimmy AND သင်အိုင်တီသိတယ်။ အချက်အလက်များစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ အကြံပေးကော်မရှင်ရှိခဲ့သည် ဘဝဟုခေါ်ဝေါ်သောဥပဒေ အကယ်၍ သင်ပြောခဲ့သည့် ၂၀၁၅ ဇယား THE 1918 စပိန် FLU ရှိခဲ့ပါတယ် ကူးစက်ရောဂါ, သင်က X နံပါတ်လိုအပ်နိုင်ပါသည် VENTILATORS ၏။ ယူနိုက်တက်စတိတ်မရှိပါ ၀ န်ထမ်းများအားလုံလောက်သောအချက်များ စပိန် FLU ကူးစက်မှုသည်။ ဖက်ဒရယ်အစိုးရမ 1918 FOR ဝယ်ယူ ventilator စပိန် FLU ကူးစက်မှု။ ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်သူမှ တစ် ဦး အတွက်ပြင်ဆင်မှုအတွက် VENTILATORS 1918 စပိန် FLU ကူးစက်မှု။ >> သင်သောအမှု၏နံပါတ် အစီရင်ခံစာမည်မျှရှိသည် ဖြေရှင်းပြီး? ဥပမာ WHO ကအမျိုးသမီးကိုဥပမာ အိုင်ယာလန်မှ, သူမယခုရှင်းလင်းစွာ IS ဖြစ်ရပ်များကိုသင်အစီရင်ခံနေဆဲလား သူတို့ဖြေရှင်းပြီးပြီလား >> တိုတောင်းသောအဖြေဟုတ်သည်။ သင်သိသလား၊ ZUCKER THE မည်သူဖြေရှင်းခဲ့သနည်း။ >> WE ရာနှင့်ရာပေါင်းများစွာရှိသည် ထွက်ခွာသွားသောလူများ၏ ဆေးရုံနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီ ဖြေရှင်းပြီးပြီများစွာသော ဘယ်တော့မှမသောအခြားပုဂ္ဂိုလ်များ ဆေးရုံသို့ကျွန်တော်တို့ရောက်လာသည် သင်အတိအကျရရှိရန်ကြိုးစားနိုင်သလား သောအပေါ်နံပါတ်။ >> သင်မူကားပြောင်းလဲနေကြသည် အမေရိကန်ကိုပြောပြ KRITERIA နှင့် County အကယ်၍ စည်းမျဉ်းများသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားလျှင်၊ သူတို့ပြောင်းလဲခဲ့ - >> မှန်။ >> သင်ဘာတွေအကြောင်းပြောဆိုနိုင်သလား သောနောက်ကွယ်မှ? >> ကောင်းပြီ, ငါတို့ CDC နောက်သို့ပါတယ် လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးပြီးနောက်, အကယ်။ သင် ခုနစ်ပြီးနောက်အပြုသဘောဆောင်ခဲ့ကြသည် အပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့် AS ၏နေ့ရက်များ သင် 72 ထက်ပိုနေသမျှကာလပတ်လုံး 72 ရောဂါလက္ခဏာများမရှိသည့်နာရီများ၊ အိမ်သို့ပြန်သွားနိုင်သလား။ >> ဤအရာသည်အကောင်းဆုံးသောအချက်အလက်များဖြစ်သည်။ အိုကေလား? ဒါက Johns Hopkins ။ တရုတ်နိုင်ငံမှဖြစ်ရပ်တိုင်းသည်။ 435,000 ။ 19,000 သေဆုံးပြီးနောက်, ငါ သင်လုပ်နိုင်သည့်ငွေပမာဏများ Donuts, သင်သည်ထိုသူတို့ကြည့်ရှုပါ ၁၉၀၀၀၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ နှိုင်းယှဉ် IMMUNE စနစ်, ET CETERA ။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး, 100,000 ။ ညာဘက်? ရိုးရိုး ၂၅% ။ ဆိုင်းငံ့ထား 300,000 ။ ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပါတယ်, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးများမှာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးများ သင်ရပြီ - ငါသိတဲ့လူတွေ၊ အပတ်နှစ်ခုအတွက်အိမ်မှာနေကြတယ်၊ ပြီးတော့သူတို့အစမ်းစစ်ကြော။ သငျသညျနှစ်ခုထဲမှာအစမ်းစမ်းသပ်နိုင်သလား သုံးပတ်အတွင်းအပတ်များ၊ သင်လုပ်နိုင်သည် ပြီးနောက်တစ်ပတ်ထဲမှာစမ်းသပ်မှုအပျက် သင်၌ရှိသည်။ သောသူသည်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည် OVERWHELMING လူတွေ။ ဒီနည်းကိုသောအခါအကြီးမားဆုံးနံပါတ် DONE AND ကျနော်တို့တကယ်ပဲပြန်သွားနိုင်သလား နှင့်စမ်းသပ်မှု, အကြီးမားဆုံးနံပါတ် IS အိုင်တီ၌ရှိသောလူဖြစ်လာမယ့် ဘယ်သူ့ကိုမှမသိတဲ့ဘယ်သူ့ကိုကူညီဖြေရှင်းပေးခဲ့သူ အိုင်တီ။ >> ကျွန်ုပ်တို့သည် ပို၍ ICU ကုတင်များကိုဖန်တီးနိုင်သည် အိမ်၌ VENTILATORS နှင့်အတူ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ 14,000 VENTILATORS ရှိသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ် လေဝင်လေထွက်ကုတင် ၁၄၀၀၀ ကိုဖန်တီးပါ ကျနော်တို့ဆန့် Bump ခဲ့ကြသည် စွမ်းဆောင်ရည်, မှန်ကန်သော? >> မှန်ကန်သော။ ကာလပတ်လုံး ICU အိပ်ရာ <font color="#FF0000"><u>F $ !, DOI လက်ျာဘက်၌နေ</u> </font> NOW ကကွဲပြားခြားနားသည်။ တစ် ဦး နှင့်အတူ SO ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအခန်း VENTILATOR ဆိုတာ ICU BED ပါ။ ဒါအတိအကျနံပါတ်များပဲ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီသတင်းအချက်အလက်ရှိသည် ကောင်းပြီ။ >> ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းရှိပါတယ် တိုးချဲ့ဖို့စီစဉ်ထားသလား နံပါတ်? <u>ထပ် 1.2 သန်းသန်းထပ်တိုး</u> လာရန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူများ New York State နှင့်သင်တို့ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ် ဤနံပါတ်များကိုတင်ပြခဲ့သည် ဒီနေ့အထူး AS တိုးပွားလာ ခေါ်သွားကြသည်ခေါ်ဆိုမှု။ အိုင်တီရုံပြည်နယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ငါတို့သည်လည်းပြည်နယ်ထဲကတောင်းဆိုနေတာ အငြိမ်းစားများနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရှိခဲ့သည် လုပ်သားများနှင့်သူတို့အတွက်စီစဉ် ဒီနေရာမှာလာရန်။ >> RESရိယာRESရိယာရှိခဲ့သည်။ >> နောက်သို့ Piggy့မေးခွန်း။ >> သင်အစီရင်ခံနေသည်ကိုမြင်ပါသလား သူတို့အားပြီးသားတုံ့ပြန်? >> ငါသူတို့အား NUMERER တုံ့ပြန် ငါတို့ရှိသည်။ နှင့် ICU အိပ်ရာ၏နံပါတ် ပိုးသတ်ဆေး။ နံပါတ်တစ်ပါပဲ။ အကယ်၍ သင်ကကျွန်ုပ်တို့အား ventilator များယူလာပါက သူတို့ကိုလက်၌ထည့်ပါ နံပါတ်တက်လာသည့်ကုတင်။ ကျနော်တို့သူတို့ကိုရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ >> AND STOCK လိပ်ခေါင်း။ ဒီမှာပုံ STOCK ။ အကွိမျမြားစှာ STOCK လိပ်ခေါင်းရှိတယ် ငါတို့လုပ်သော။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာ Multiple Stock Stores ရှိခဲ့တယ်။ WE ဤ Multiple ၌ထားရှိမည် STOCK ပုံ။ ကျနော်တို့မြို့တော်သို့သွားခဲ့ကြတယ်။ WE ရှည်လျားသော STOCK ပုံရှိသည် ISLAND.íp ($ oH # & W ■ AND အိုင်တီအိုင်၌ပုံနှင့် STOCK အိုင်တီ ငါ၏မြေအောက်ခန်းထဲမှာ STOCK ပုံ။ >> သောအုပ်ချုပ်။ >> WE ICU ရှိခဲ့ပါတယ်။ WE ထဲမှာ VENTILATORS ရှိခဲ့ပါတယ် STOCK ပုံ။ သူတို့ကိုသူတို့ကိုမယူကြပြီ ဆေးရုံ။ ကျွန်မမှာဆေးရုံခေါ်ဝေါ်ခြင်းမရှိပါ ငါ VENTILED လိုအပ်ကြောင်းပြောခဲ့သည် ခုတင်။ >> ထုတ်ယူခြင်း။ သူတို့စွန့်ပစ်ခံနေရသည် ရှေ့တန်း။ <font color="#FF0000"><u>၏အစိတ်အပိုင်းများ■</u> </font> ဆေးရုံ။ >> သင်ငါ့ကိုဆုံးမနိုင်သလား။ ငါသူတို့မယုံကြည်ကြဘူး ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ သူတို့ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုသီးသန့်ထား။ အသစ်သောကုတင်များအတွက်သင်လိုအပ်သည်။ အခုသင် 200 လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် ကုတင်သို့မဟုတ်သင်တစ် ဦး ဆေးရုံရှိ အလုပ်သမားရှားပါးမှုရှိသည် နာရီနှင့်နာမကျန်းဖြစ်သောကြောင့်။ ဒါပေမဲ့ Jim, ငါကျနော်တို့မယုံပါဘူး NOW ကယာယီစပါးကျီ။ >> သောမှန်ကန်သော။ >> လူနာစိုးရိမ်ပူပန်ရပါမည် ပါဝင်ပတ်သက်စည်းမျဉ်းအကြောင်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုသမှုနှင့် စည်းမျဉ်း။ >> ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမေးခွန်းများကိုကြည့်ရှုပါ ကောင်းပြီ။ အချို့သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါတယ် ကျနော်တို့ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းထမြောက်ခဲ့ကြ အရင်ဖိအားပေးအစည်းအဝေးတွေမှာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းမျဉ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုသင့်သည် စည်းမျဉ်းများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် အညီဒီတော့ငါတို့လုပ်မယ့် အဖြစ်ကောင်းစွာ။ ငါနှင့်အတူဖုန်းပေါ်မှာရှိ၏ ဆေးရုံအုပ်ချုပ်ရေးမှူး။ ကျန်းမာရေး ဦး စီးဌာန - THE ကျန်းမာရေး ဦး စီးဌာနရှိခဲ့ပါတယ် ပြေးရန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ယူနိုက်တက်တွင်အကောင်းဆုံးကျန်းမာရေးစနစ် အမေရိကန်။ ထိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအိုင်တီလုပ်ပါ စည်းမျဉ်းများတစ်ခါတစ်ရံတွင်နိုင်ပါတယ် အမြန်လမ်း၏ GET AND လုပ်ဆောင်မှုနှင့်လှုပ်ရှားမှု။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီဖြစ်ရပ်တွင်ပြောကြားခဲ့သည် လျှော့ပေါ့သွား။ သူတို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအများအပြား တက်နိုင်သလား, သူတို့သည်တိုးပွားလာနိုင်ပါတယ် စွမ်းရည်, သင်သိတစ် ဦး ကမေးတယ် နှစ်ဆစွမ်းရည်မှဆေးရုံ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အာကာသအကျယ်အ ၀ န်းရှိသည် စည်းမျဉ်းများ။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လိုအပ်သည် <u>81çw NG81BI သို့</u> သူတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ လုပ်ပါ >> ငါရှုပ်ထွေးတယ်။ ငါ New York နဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင် စီးတီးပေမယ့် REICHERS NEW အားဖြင့်ပြေး York City ။ >> သင်တစ် ဦး ပွိုင့်ရှိနိုင်ပါသည်။ >> နယူးယောက်မြို့ပြီးပြီ သူတို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်နေတာ။ နယူးယောက်မြို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ် 77 တစ်နေ့တာအတွက်အချိန်။ >> 78 ။ >> NO ။ >> ငါနိုင်သလား။ သင်တစ် ဦး ကွန်ဂရက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ် ပုဂ္ဂိုလ်။ ခင်ဗျားမှာစီနီယာတစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ် ထိုသူအပေါင်းတို့နှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ ဝါရှင်တန်ကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ် BUREAUCRACY ။ ကိုယ်အဲဒီမှာရှိနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ငါရှိစဉ်အခါ, ဘီလ်ဖြတ်သန်း အတွင်းရေးမှူး။ ဘယ်လောက်ခက်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်ငါလည်းသိတယ် Stak ဘယ်လောက်မြင့်သလဲဆိုတာ KNOW ဒီမှာ။ သင်ဆုံးရှုံးမှုကိုကြည့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ငါ့ကိုအကြောင်းပြောနေတာ။ နိုင်ငံပိုင်ဘတ်ဂျက်ကိုသင်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်သနည်း အကျိုးကျေးဇူးများဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူ။ သူကောင်းပြီဟုဆိုခဲ့သည် ဖက်ဒရယ်အစိုးရသွားတော့ သောလှုံ့ဆော်မှု Package ဖြတ်သန်း ထပ်ဆောင်းရန်ပုံငွေပေးပို့ အစိုးရမဟုတ်သောအစိုးရများ။ အိုကေ။ ဒီမှာအိတ်ဆောင်။ ၎င်းသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃.၈ ဘီလီယံကိုပေးသည်။ ဒီအပေါက် $ 15 အထိအမြင့် ဘီလီယံ >> သင်တစ် ဦး $ 15 ဘီလီယံထိုးကြပုံ 3.8 ဘီလီယံနှင့်အတူအပေါက်? မင်း >> သင်မည်သို့တုံ့ပြန်သလဲ သောစိတ်နှင့်အတွေးအခေါ် အဆိုပါကုသမှုထက်ဆိုးရွားသည် BY ရောဂါနှင့်အကြံပြုချက် သူလိုခငျြသောသမ္မတ တိုင်းပြည်ဖွင့်လှစ်ရန် အီစတာလား >> ကြည့်ရှုပါ, ငါအိုင်တီရဲ့အပိုင်း ဘာသာစကား၊ >> ဘယ်သူမှအိုင်တီပြောပါလိမ့်မယ် စီးပွားရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်ရေရှည်တည်တံ့ ပိတ်သိမ်း။ >> အိုင်တီရေရှည်တည်တံ့မဟုတ်ပါဘူး။ ငါတို့ရ။ သော .1, .2 ပါပဲ။ ငါယုံကြည်သည်လူတိုင်းသဘောတူသည် ဒီနည်းကိုပြည်နယ်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သမျှလုပ်နိုင်သည် ဘဝကိုလုံခြုံစေရန်။ ဤသူတို့သည်အားနည်းသောလူဖြစ်ကြ၏။ မကြာခင်မှာသူတို့သေတော့မယ် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် SO ရွှေ့ကြပါစို့။ ငါမည်သည့်အမေရိကန်မယုံကြည်ကြဘူး သောယုံကြည်သည်။ နယူးယောက်ကိုမယုံဘူးဆိုတာငါသိတယ် သောနှင့်အစိုးရ၏အဖြစ် ငါကျိန်ဆိုနိုင် New York ၏ပြည်နယ် ငါလုပ်ပေးဘယ်တော့မှသင်။ ဒါဆိုသင့်မှာနှစ်ခုရှိတယ် သံသယ သင်စီးပွားရေးရရှိရန်ရှိသည် run နှင့်သင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည် သင်လုပ်နိုင်သည့်ဘဝတိုင်း။ ငါပိုမိုသန့်စင်သောရှိပါတယ်ယုံကြည်သည် WE ယခုပြောနေတာထက်နည်းဗျူဟာ အကြောင်း။ ငါအိုင်တီ BINARY စဉ်းစားကြဘူး။ ငါသည်သင်တို့ကိုချပိတ်ပင်ထင်ပါတယ် တစ်ခုလုံးကိုစီးပွားရေးနှင့်ဖွင့်လှစ် AS စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးလူ့အဖွဲ့အစည်း ပုံမှန် အဲဒီမှာကျနော်တို့လေ့လာသင်ယူကြပြီ သိသာထင်ရှားတဲ့သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်။ လူငယ်များသည်အန္တရာယ်နည်းပါးသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့လူတွေ လျော့နည်းအန္တရာယ်ရှိသည်ဖြေရှင်းနိုင် ယူလာခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးကိုစတင်ပါ အနည်းငယ်သောလူငယ်များ အန္တရာယ်မှာစတင်ရွေ့လျား နည်းလမ်း။ စီးပွားရေးကိုပြန်လည်စတင်ပါ လမ်း။ ထို့အပြင်အကောင်းဆုံးအများပြည်သူ ကျန်းမာရေးဗျူဟာ။ ထွက်သွားသောလူငယ်တစ် ဦး ပန်းခြံသို့။ ဘတ်စကက်ဘောမကစား။ ထို့နောက်BACKçóသို့လာ အများပြည်သူမဖြစ်သည့်အိမ် ကျန်းမာရေးဗျူဟာ။ ဒါသန့်စင်သောအတိတ်ရှိသေး၏ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမဟာဗျူဟာနှင့် စီးပွားရေးတိုးတက်ကြီးပွားခြင်းနှင့် ငါတို့ရှိသည်ဖို့ဘာလဲ - သောပါပဲ တဆင့်ကျနော်တို့အလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်။ >> ဒါကသင့်ကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါသလား။ သငျသညျအရပျ၌တည်နေသလား သင့်ကိုယ်ပိုင်မြန်နှုန်းသို့ \_ t >> ဖက်ဒရယ် ပြီးပြီလမ်းညွှန်ချက်များ။ သူတို့ကသူတို့ကိုလမ်းညွှန်ခေါ်ဆိုခဲ့သည် အကြောင်းမှာသူတို့သည်လမ်းညွှန်ချက်များဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ပြည်နယ်များလိုက်နာနိုင်ပါတယ် လမ်းညွှန်ချက်များ။ ပြည်နယ်များဖက်ရှင်နိုင်ပါတယ် သူတို့ရဲ့အထူးသင့်လျော်ဖို့လမ်းညွှန် အခြေအနေများ။ New York သောသံသယမရှိပါ ကွဲပြားခြားနားပါတယ် မည်သည့်နေရာတွင်ရှိပါကပြနာ တိုင်းပြည်, ညာ? သငျသညျသောနံပါတ်တိုင်းပါပဲ ကြည့်ပါ။ သင်သိသည့်အချက်အလက်များအားလုံးသည်။ သံသယမရှိပါ။ ဒီမှာပိုကြီးတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုရှိတယ် နယူးယောက်၌ CITY နံပါတ်များ AND အရှိဆုံးသောတစ်ခု စီးပွားရေး။ AND သောသူအပေါင်းတို့ယူရမည် ပြီးတော့ငါလိုအပ်သည် IFS မသိ TULSA OR SAN အတွက်အလုပ်လုပ်ရန်သွား Antonyo ဒါကြောင့်ငါတို့တစ် ဦး အစီအစဉ်နှင့်အတူတက်လာပါလိမ့်မယ် သော New York နှင့်အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ် ဖက်ဒရယ်အစိုးရမပြောပါ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အရာကိုမဆိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သူတို့ကကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းပါတယ်ပြောနေ လမ်းညွှန်ချက်များ။ >> သင်သည်အဘယ်သို့သောအရာကိုလုပ်ပါ သမ္မတကပြောကြားခဲ့တဲ့အဖွဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို -Quarantine AND ဒုတိယမေးခွန်းသင်လိမ့်မည် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ပါ YORK YESTERDAY ၌တည်၏။ >> သမ္မတဘယ်သူ့ကိုမှပြောကြားခဲ့သည် နယူးယောက်မြို့သို့ခရီးသွားလာ နှစ် ဦး အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကို -Quarantine သင့်သည် အပတ် >> နယူးယောက်၌။ >> နယူးယောက်မြို့၌။ >> သင်နယူးယောက်၌ရှိလျှင် သငျသညျအသစ်အတွက် Quantantine ရမယ်မြို့ York State ။ သင်သည်နောက်သို့ပြန်သွားစရာမလိုပါ Quantantine ဖို့ York မြို့။ ငါအသစ်အတွက် Quantantine သွားတော့မည် York State ။ >> ဒါကဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံပေးချက်ကို IS ။ ဘဝ၌အရေးအပါဆုံးအရာ သင်မသိသောအရာကိုသိရန်ဖြစ်သည်။ ငါဆေးမသိဘူး ဆရာဝန်ဆီသို့လှည့်ပါလိမ့်မယ်။ ငါလိုက်နာရန်လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ် CDC လမ်းညွှန်များနှင့် CDC လမ်းညွှန်များကိုသင့်အားအကြံပြုသည် ဝေးနေတဲ့ဝေးနေပါ။ လူမှုရေးအကွာအဝေးအဖြစ်ကောင်းစွာနှင့် ဒီနည်းကိုနယူးယောက်မြို့ကျော်လွန် အစိုးရမှဖော်ပြခဲ့သည်။ >> SPENCERy] သင်ကပြောနေတာ Quantantine သငျ့သညျ။ >> သူတို့လူမှုရေးအကွာအဝေး။ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးအပေါငျးတို့သ တိုင်းပြည်။ အိုင်တီရုံ New York ကမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှေ့တန်းရောက်နေသည်။ >> နောက်ထပ်ရန်ပုံငွေမရရှိပါက FEDS မှငါဘယ်လိုသိလည်းမသိဘူး ကျနော်တို့ဘတ်ဂျက်ရေးလိုက်။ ဒီနည်းကိုဒီ SENATE Bill သည်အဘယ်ကြောင့် အရမ်းဝမ်းနည်းပါတယ်။ ငါ PLAY ၏နိုင်ငံရေးကိုငါသိ၏ မည်သည့်ဖိအားကိုမထားပါနဲ့ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့်အခြားရုံးများ။ အခြားသူတို့သင်ပြောလိမ့်မယ် SHARP / íx ဒီနည်းကိုအလုပ်မလုပ်ဘူး။ ဝမ်းသာပါတယ်။
3/25/2020 နယူးယောက်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Cuomo သည် coronavirus ကပ်ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားသည်
< start="0.333" dur="4.27"> ဒီမှာဒီမှာရှိနေခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ >
< start="1.768" dur="3.136"> ဘယ်သူလဲသိဘူးထင်တယ် >
< start="4.737" dur="4.372"> ဒီမှာ။ >
< start="5.037" dur="5.073"> ငါ့ဝေးညာ, ON လက်ထောက် >
< start="9.242" dur="4.771"> ၏ဌာနကြီးကြပ်ရေးမှူး >
< start="10.243" dur="4.971"> ဘဏ္SERVာရေးဝန်ဆောင်မှု။ >
< start="14.147" dur="4.57"> ငါနှင့်အတူကြာမြင့်စွာနေခဲ့။ >
< start="15.348" dur="6.84"> သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ SWAT အဖွဲ့၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ >
< start="18.851" dur="7.441"> ငါတို့အင်ပါယာ၏ဥက္ကID္ဌရှိသည် >
< start="22.322" dur="6.239"> ကောလိပ်, DR ။ ZUCKER, လုပ် Lisa >
< start="26.425" dur="2.837"> DeROSA နှင့်ဘတ်ဂျက်ညွှန်ကြားရေးမှူး။ >
< start="28.695" dur="2.702"> ကျွန်ုပ်တို့တွင်စိတ်ဝင်စားစရာများစွာရှိသည် >
< start="29.395" dur="2.77"> TODAYLISA သတင်းများ >
< start="31.531" dur="1.334"> DeROSA နှင့်ဘတ်ဂျက်ညွှန်ကြားရေးမှူး။ >
< start="32.298" dur="2.903"> ကျွန်ုပ်တို့တွင်စိတ်ဝင်စားစရာများစွာရှိသည် >
< start="32.999" dur="3.737"> ဒီနေ့အသစ်များ၊ အရာများရွေ့လျားနေကြသည်။ >
< start="35.335" dur="5.905"> လက်ရှိအခြေအနေ, ကျနော်တို့နေဆဲ >
< start="36.869" dur="6.574"> သွားနေသည့်လမ်းကြောင်း။ >
< start="41.374" dur="3.002"> WE လှည့်မကြည့်ကြပြီမဟုတ် WE ရှိသည် >
< start="43.576" dur="2.336"> APEX ကိုနှိပ်ပါ။ >
< start="44.51" dur="2.836"> ထိုလိုင်းပေါ်တက်လိမ့်မည်ကိုသတိရပါ, >
< start="46.045" dur="2.936"> အိုင်တီအိုင်တီမြင့်မားသော POINT ရောက်ရှိပါလိမ့်မယ် >
< start="47.479" dur="4.405"> ထိပ်ဖျားလိမ့်မည်, အိုင်တီပြန်သွားပါလိမ့်မယ်။ >
< start="49.115" dur="3.136"> ကျနော်တို့လမ်းအပေါ် UP နေဆဲ >
< start="52.018" dur="1.535"> တောင်တန်း။ >
< start="52.385" dur="5.972"> ရှိသောရောဂါပိုးအရေအတွက် >
< start="53.686" dur="5.906"> လာ 80% နေဆဲ >
< start="58.491" dur="4.571"> ဖြေရှင်းခဲ့သည် >
< start="59.726" dur="5.271"> စမ်းသပ်သူတွေကို၏ 15% ခန့် >
< start="63.196" dur="3.202"> အပြုသဘောဆောင်တဲ့လိုအပ်ချက် >
< start="65.131" dur="3.837"> ဆေးရုံ။ >
< start="66.532" dur="2.937"> ပြီးတော့ဒီဂရီရှိပါတယ် >
< start="69.102" dur="2.202"> ဆေးရုံ။ >
< start="69.602" dur="7.841"> ဒါပေမဲ့စုစုပေါင်းစကြဝIVာ >
< start="71.437" dur="10.377"> ဆေးရုံ ၀ င်ရန်လိုအပ်သည်မှာ ၁၅% ဖြစ်သည်။ >
< start="77.577" dur="8.575"> ကျွန်ုပ်တို့သည်စီမံကိန်းပုံစံများကိုအသုံးပြုသည်။ >
< start="81.948" dur="5.939"> ကြှနျုပျတို့သညျ Cornell WIL ရှိသည် >
< start="86.285" dur="4.271"> စီမံကိန်းပုံစံများ၊ >
< start="88.02" dur="5.339"> McKENZIE, ဌာန >
< start="90.69" dur="6.273"> ကျန်းမာရေးစီမံကိန်းစီမံကိန်း။ >
< start="93.493" dur="7.107"> သူတို့သည်အရေးကြီးသောကြောင့် >
< start="97.096" dur="5.038"> သင်သူတို့စီမံကိန်းနေကြသည် >
< start="100.733" dur="3.336"> ဖြစ်နိုင်ခြေကောင်းသော JEKER AND >
< start="102.267" dur="3.504"> လိုအပ်ချက်အတွက်စီစဉ်။ >
< start="104.203" dur="5.172"> စီမံကိန်းမော်ဒယ်များ့ >
< start="105.905" dur="4.672"> သောသူတို့မော်ဒယ်များ >
< start="109.509" dur="2.568"> စီမံကိန်းများ, သူတို့မဟုတ်ပါဘူး >
< start="110.71" dur="3.136"> လိုအပ်သောအဓိပ္ပာယ်, ဒါပေမယ့်အိုင်တီ >
< start="112.211" dur="2.469"> ငါတို့တစ်ခုတည်းသောကိရိယာဖြစ်သည် >
< start="113.979" dur="2.069"> စီစဉ်, ညာ? >
< start="114.814" dur="4.471"> အချက်အလက်များကိုလိုက်နာပါ >
< start="116.182" dur="6.606"> ဒေတာ, ဒေတာကိုလိုက်နာပါ။ >
< start="119.419" dur="7.74"> အမှန်တကယ်ဆေးရုံတွင်ရှိသည် >
< start="122.922" dur="6.373"> ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောနှုန်းထားတွင်ရွှေ့ >
< start="127.292" dur="2.67"> အားလုံးထက်စီမံကိန်းစီမံကိန်း >
< start="129.428" dur="2.903"> စီမံကိန်းပုံစံများ။ >
< start="130.096" dur="2.636"> သိသာထင်ရှားခဲ့ဒီတော့ >
< start="132.465" dur="3.804"> စိုးရိမ်။ >
< start="132.865" dur="5.139"> သောပိုမိုမြင့်မားသောရောဂါကူးစက်မှုကြောင့် >
< start="136.402" dur="4.905"> နှုန်းမြန်မြန်ဆိုလိုသည် >
< start="138.137" dur="5.772"> ဆေးရုံ၌စွမ်းရည်များနှင့် >
< start="141.44" dur="4.872"> သောအရေးပါသောအချက် >
< start="144.042" dur="3.504"> အမေရိကန်လူ ဦး ရေ၏နံပါတ် >
< start="146.446" dur="3.703"> ဆေးရုံသို့။ >
< start="147.68" dur="5.739"> အခုအချိန်မှာငါတို့ကြည့်နေသောအရာကို >
< start="150.282" dur="5.94"> ကိစ္စပေါင်း 140,000 အကြောင်းကိုလာပြီ >
< start="153.552" dur="4.738"> ဆေးရုံသို့, ဆေးရုံသို့ >
< start="156.356" dur="3.769"> စွမ်းရည်ကုတင် ၅၃၀၀၀ ရှိသည်။ >
< start="158.424" dur="5.338"> ပြAနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ >
< start="160.259" dur="5.472"> ကျနော်တို့ 40,000 အကြောင်းကြည့်ရှုပါ >
< start="163.896" dur="2.202"> ထဲသို့ ICU ပြCASနာများ >
< start="165.865" dur="2.902"> ဆေးရုံ။ >
< start="166.232" dur="4.304"> ICU ခုတင် ၃၀၀၀ လောက်ရှိပြီ။ >
< start="168.901" dur="4.204"> သောအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ >
< start="170.67" dur="2.836"> ဒီအတွက် ICU BED ဆိုတာဘာလဲ >
< start="173.239" dur="2.302"> ရည်ရွယ်ချက်? >
< start="173.639" dur="2.303"> အခြေခံအားဖြင့်တစ် ဦး က BED >
< start="175.675" dur="2.669"> ပိုးသတ်ဆေး။ >
< start="176.075" dur="5.372"> VENTILATOR ကအများဆုံးပါ >
< start="178.477" dur="4.872"> FOR ကိရိယာတန်ဆာပလာ၏ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် >
< start="181.58" dur="3.871"> အထူးအာရုံစိုက်စောင့်ရှောက်မှုယူနစ် >
< start="183.482" dur="4.405"> ဤသည်တစ် ဦး သည် Respiratory တစ်ခုဖြစ်သည် >
< start="185.584" dur="3.437"> လူနာတွေနဲ့လူတွေနောက်ထပ်လိုအပ်တယ် >
< start="188.02" dur="3.17"> ပုံမှန်ထက် VENTILATION ။ >
< start="189.155" dur="3.137"> ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ချင်ပါသလဲ။ >
< start="191.324" dur="3.403"> ကိစ္စရပ်များ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချပါ >
< start="192.425" dur="4.004"> ဆေးရုံသို့လာ, နှေးကွေး >
< start="194.86" dur="3.203"> ထဲသို့ဝင်ကိစ္စရပ်များ၏အရေအတွက် >
< start="196.563" dur="3.136"> ဆေးရုံ။ >
< start="198.197" dur="3.17"> DR ဆိုတာဘာလဲ။ FAUCI IS >
< start="199.832" dur="3.036"> နေ့တိုင်းတီဗီအကြောင်းပြောနေတာ။ >
< start="201.501" dur="2.502"> THE ပြား, ပြား။ ပြား >
< start="203.002" dur="2.702"> CURVE, ပြား။ >
< start="204.137" dur="3.736"> လူများ၏နံပါတ်နှေးကွေး >
< start="205.838" dur="4.337"> ဆေးရုံထဲကိုဝင်နိုင်ပါပြီ >
< start="208.007" dur="4.971"> သူတို့နှင့်အတူဆေးရုံ။ >
< start="210.309" dur="5.606"> ငါတို့သည်ဤအလုပ်လုပ်ကြသည်။ >
< start="213.112" dur="5.072"> တစ်ချိန်တည်းမှာတိုးပွားပါ >
< start="216.048" dur="3.571"> ဆေးရုံ၊ >
< start="218.318" dur="3.803"> ၏နံပါတ်နှေးကွေးနိုင်အောင်ကြော် >
< start="219.752" dur="4.404"> ဆေးရုံသို့ပြနာများ၊ >
< start="222.254" dur="2.269"> တစ်ချိန်တည်းမှာသင်၏ဆေးခန်းကိုမြှင့်တင်ပါ >
< start="224.29" dur="3.403"> စွမ်းရည်။ >
< start="224.657" dur="3.537"> ကျနော်တို့နှစ် ဦး စလုံးအလုပ်လုပ်နေကြသည် >
< start="227.827" dur="2.368"> တစ်ပြိုင်နက်တည်း။ >
< start="228.327" dur="4.605"> ကျနော်တို့တစ်နေ့ကနေခဲ့ကြပြီ။ >
< start="230.329" dur="6.34"> ကိစ္စရပ်များ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချပါ >
< start="233.065" dur="8.442"> လာ, CURVE ပြား။ >
< start="236.802" dur="6.24"> ဖြန့်ဖြူး FLTS ရောဂါပိုးနှေး။ >
< start="241.641" dur="6.239"> ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်နိုင်သမျှလုပ်နေကြသည်။ >
< start="243.176" dur="6.239"> သောမလိုအပ်သောတားမြစ်သည် >
< start="250.416" dur="3.603"> အလုပ်သမားများ၊ လူမှုရေးအကွာအဝေး >
< start="251.417" dur="3.003"> အားကစားရုံပိတ်ပါ >
< start="254.153" dur="1.335"> စားသောက်ဆိုင်။ >
< start="254.553" dur="2.97"> နယူးယောက်မြို့ရှိကိစ္စတစ်ခုခု >
< start="255.621" dur="3.67"> WE သိပ်သည်းမှုအဆင့်မြင့်ခဲ့သည် >
< start="257.657" dur="2.936"> အထူးသဖြင့်ကျနော်တို့ချင်တယ် >
< start="259.425" dur="7.374"> အထူးသဖြင့် New York City ပန်းခြံများ >
< start="260.759" dur="7.007"> လူငယ်များနှင့်အတူငါအဖြစ်ငါဖြစ်ခဲ့သည် >
< start="268.934" dur="1.803"> ငါတတ်နိုင်သမျှ AS တိုက်ရိုက်နှင့်အဖြစ် >
< start="269.768" dur="1.769"> ငါလူငယ်များနှင့် THE နိုင်သလား >
< start="270.87" dur="4.237"> သူတို့ရှိသည်သောသတင်းအချက်အလက်။ >
< start="271.671" dur="5.738"> သင် Coronavirus ကိုဖမ်းနိုင်။ >
< start="275.241" dur="3.203"> သင်စူပါစတားတစ်ယောက်လို့မင်းထင်လိမ့်မယ် >
< start="277.543" dur="3.036"> ဒီမှာ, သင်အမှန်တကယ်မဟုတ်ပါဘူး။ >
< start="278.578" dur="5.172"> သင်အိုင်တီဖမ်းနိုင်သလား။ >
< start="280.713" dur="3.971"> တဖန်သင်တို့အိုင်တီလွှဲပြောင်းနိုင်သလား >
< start="283.883" dur="3.102"> သင်သည်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည် >
< start="284.817" dur="3.803"> သင်ချစ်သောသူ။ >
< start="287.119" dur="3.103"> ဒါပေမဲ့ New York City ပန်းခြံများရှိသည် >
< start="288.754" dur="3.203"> ပြAနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ >
< start="290.356" dur="2.869"> ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြPROနာကိုတွေ့ခဲ့တယ် >
< start="292.091" dur="2.703"> ပထမ။ >
< start="293.359" dur="2.869"> ငါမြို့တော်ဝန် De Blasio သို့ပြောဆိုသည် >
< start="294.927" dur="4.004"> စပီကာဂျွန်ဆင်, ငါတို့လာကြဟုဆိုသည် >
< start="296.362" dur="3.57"> 24 နာရီအတွင်းအစီအစဉ်နှင့်အတူ >
< start="299.064" dur="3.671"> လူတိုင်းသဘောတူသည်။ >
< start="300.066" dur="6.139"> သူတို့ကတစ် ဦး အစီအစဉ်နှင့်အတူလာကြ၏။ >
< start="302.869" dur="3.636"> ကျနော်တို့အခုအကောင်အထည်ဖော်နေကြသည် >
< start="306.338" dur="3.671"> စီစဉ်ပါ။ >
< start="306.638" dur="4.439"> ငါအစီအစဉ်အပေါ် OFF လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။ >
< start="310.142" dur="2.202"> အစီအစဉ်ပိတ်ပစ်မည် >
< start="311.21" dur="3.57"> နယူးယောက်မြို့ရှိလမ်းများကြောင့် >
< start="312.478" dur="3.637"> ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပါးသောနည်းစနစ်အသစ်ရှိသည် >
< start="314.914" dur="2.135"> York City, ကျနော်တို့နည်းပါးလာရှိသည် >
< start="316.248" dur="1.702"> New York City ရှိကားများ။ >
< start="317.183" dur="1.969"> လမ်းတွေဖွင့်။ >
< start="318.084" dur="3.87"> လူတွေလမ်းလျှောက်ချင်တယ်၊ >
< start="319.285" dur="5.705"> ထွက်သွားနှင့်အချို့သောလေထုရရန်။ >
< start="322.088" dur="6.439"> သင်အနည်းငယ်သောENရိယာလို။ >
< start="325.124" dur="9.442"> SO PILOT ပိတ်လမ်းများ >
< start="328.661" dur="6.306"> ကားများ, လမ်းများဖွင့်လှစ် >
< start="334.7" dur="4.071"> လူနာ။ >
< start="335.1" dur="4.838"> ငါတို့သည်လည်း Mandat ကျင့်သုံးပါလိမ့်မယ် >
< start="338.904" dur="4.304"> လူမှုရေး DENSITY PLAYGROUND ။ >
< start="340.072" dur="6.74"> ဖြစ်နိုင်သည်အသစ်သောအယူအဆ။ >
< start="343.342" dur="5.439"> တစ် ဦး ၌နီးကပ်သောဆက်သွယ်ရန်အားကစား >
< start="346.945" dur="5.506"> မြေပြင်တွင်ကစား။ >
< start="348.915" dur="4.303"> ဥပမာအဘို့အဘတ်စကက်ဘော။ >
< start="352.585" dur="2.669"> မင်းဒါကိုမလုပ်နိုင်ဘူး။ >
< start="353.352" dur="4.805"> အဲဒီလိုလုပ်ဖို့လူတွေကိုတောင်းဆိုနေတာပါ >
< start="355.387" dur="4.438"> စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခြေခံပေါ်မှာ။ >
< start="358.29" dur="4.138"> ကိုက်ညီမှုမရှိပါက >
< start="359.959" dur="3.971"> သော, ငါတို့ထို့နောက်လုပ်ပါလိမ့်မယ် >
< start="362.562" dur="2.735"> အတိအလင်းနှင့်ငါတို့တကယ်တော့ပါလိမ့်မယ် >
< start="364.063" dur="3.002"> PLAYGROUNDS ပိတ်ပါ။ >
< start="365.431" dur="3.437"> ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့လုပ်ပေးချင်ကြဘူး >
< start="367.199" dur="5.172"> PLAY မြေပြင် GO တစ်နေရာဖြစ်ပါတယ် >
< start="369.001" dur="4.571"> အပြင်မှာဖွင့်လှစ်လေ, သင်တို့မူကား >
< start="372.505" dur="4.504"> လူမှုရေးသိပ်သည်းဆလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်ရှိသည် >
< start="373.705" dur="5.639"> ပင်ကစားကွင်း၌။ >
< start="377.143" dur="4.337"> ထပ်, အိုင်တီစေတနာ့ဝန်ထမ်း IS ။ >
< start="379.478" dur="3.136"> မြို့တော်ဝန်အိုင်တီလုပ်မယ့် >
< start="381.614" dur="3.102"> ဤအချက်သည်အရေးကြီးကြောင်းရှင်းလင်းပါ >
< start="382.748" dur="3.37"> မြို့တော်။ >
< start="384.85" dur="3.136"> ဒီအဖြစ်အပျက်မဖြစ်ခဲ့ရင်၊ >
< start="386.251" dur="2.069"> အမှန်တကယ် PLAY ချအနီးကပ် >
< start="388.12" dur="4.004"> မြေပြင်။ >
< start="388.453" dur="6.04"> ငါလုပ်ပေးချင်ကြပါဘူး။ >
< start="392.258" dur="3.403"> ဒါပေမဲ့ငါတို့လိုအပ်ပါတယ် >
< start="394.626" dur="3.103"> ကူးစက်ဖြန့်ဖြူးနှင့်သော >
< start="395.795" dur="3.636"> အရေးအကြီးဆုံးကဘာလဲ >
< start="397.863" dur="2.937"> ဒီဟာအရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ >
< start="399.565" dur="4.137"> အထောက်အထားအထောက်အထားကြောင့် >
< start="400.933" dur="4.337"> သော DENSITY ထိန်းချုပ်မှု >
< start="403.835" dur="3.471"> တိုင်းတာအလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ >
< start="405.404" dur="2.936"> ထပ်, ငါတို့သည်ဤလုပ်နေတာ >
< start="407.439" dur="3.67"> စီမံကိန်းများမှ။ >
< start="408.473" dur="4.071"> ဒါပေမဲ့ဒီနည်းကိုကြည့်ရှုပါ IS >
< start="411.243" dur="3.036"> စိတ်ဝင်စားစရာ။ >
< start="412.678" dur="3.403"> ဒီနည်းကိုအတိတ်တနင်္ဂနွေ, စီမံကိန်း >
< start="414.413" dur="4.838"> သောဆေးရုံဖွင့်ခဲ့သည် >
< start="416.214" dur="3.338"> နှစ်ရက်တိုင်းနှစ်ဆ။ >
< start="419.385" dur="2.236"> အိုကေလား? >
< start="419.685" dur="3.737"> တနင်္လာနေ့တွင်, နံပါတ်အကြံပြုသည် >
< start="421.754" dur="5.905"> သောဆေးရုံ >
< start="423.555" dur="5.74"> နှစ်ဆတိုးတိုင်း ၃.၄ ရက်။ >
< start="427.793" dur="2.77"> တနင်္လာနေ့တွင်, စီမံကိန်း >
< start="429.428" dur="2.536"> သောအကြံပြုသည် >
< start="430.696" dur="4.805"> ဆေးရုံမှာနှစ်ဆရှိခဲ့သည် >
< start="432.097" dur="7.475"> ၄.၇ ရက်တိုင်း။ >
< start="435.635" dur="7.006"> အခုဆိုရင်, ဖို့နီးပါးနီးပါး >
< start="439.705" dur="7.508"> အစစ်အမှန်ဖြစ်ပါစေ။ >
< start="442.775" dur="6.072"> ဒါပေမဲ့သီအိုရီကိုပေးတော်မူ၏ >
< start="447.346" dur="4.271"> ကျွန်ုပ်တို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသောသိပ်သည်းမှု၊ >
< start="448.981" dur="4.972"> အိုင်တီလျင်မြန်စွာဖြန့်, သို့သော် IF >
< start="451.751" dur="5.605"> သငျသညျ, နိုင် DENSITY လျှော့ချ >
< start="454.086" dur="5.205"> လျင်မြန်စွာဖြန့်ဖြူးလျှော့ချ။ >
< start="457.49" dur="3.136"> SO ဤစီမံကိန်းများ, ငါပါပဲ >
< start="459.424" dur="3.271"> သူတို့ကိုကျော် BUNCHED ကြည့်ရှုကြ၏ >
< start="460.76" dur="4.738"> PLACE ငါကြီးစွာသောမထားဘူး >
< start="462.828" dur="4.038"> တယောက်ကိုတယောက် STOCK ၏သဘောတူညီချက် >
< start="465.631" dur="9.142"> အားလုံး DUE လေးစားမှုနှင့်အတူစီမံကိန်း >
< start="466.999" dur="8.341"> အားလုံးပြည်နယ် TO SHANS ဆက်လက် >
< start="474.907" dur="1.234"> လုပ်နေတာ။ >
< start="475.474" dur="0.967"> သို့သော်ထပ်မံ, ဒီအပြုသဘော IS >
< start="476.275" dur="2.902"> နိမိတ်လက္ခဏာ။ >
< start="476.575" dur="4.338"> ငါ 100% သေချာတယ်အိုင်တီကိုင်ထားသည် >
< start="479.311" dur="3.704"> OR တိကျသည်။ >
< start="481.047" dur="2.568"> ဒါပေမဲ့မြား၏ ဦး ခေါင်း၌ >
< start="483.149" dur="4.337"> ညာဘက်ညွှန်ကြားချက်။ >
< start="483.749" dur="5.505"> ပြီးတော့ဒီအရာထက်သာ။ ကောင်း၏ >
< start="487.619" dur="2.236"> မြား၏ ဦး ခေါင်းမြားမြှား >
< start="489.388" dur="5.606"> လမ်းညွှန်။ >
< start="489.989" dur="6.439"> ဒီနေ့ခေတ်လူတွေပြောပါ >
< start="495.127" dur="4.571"> ဤလိုအပ်ချက်များ, လူမှုရေး >
< start="496.562" dur="5.005"> အကွာအဝေးမရှိစားသောက်ဆိုင်များမရှိပါ >
< start="499.832" dur="3.136"> ဟုတ်တယ်, သူတို့ကလိုအပ်သောအလုပ်လုပ် >
< start="501.7" dur="2.269"> ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်ကြသည်။ >
< start="503.102" dur="4.104"> နည်းလမ်း, သူတို့ထိရောက်သောဖြစ်ကြသည် >
< start="504.103" dur="5.505"> သူတို့သည်လိုအပ်ပါသည် >
< start="507.339" dur="5.272"> သူဒီနည်းကို POINT မှာအကြံပြုသည် >
< start="509.741" dur="4.505"> သောသူတို့နှေးကွေးသော >
< start="514.38" dur="1.501"> ဆေးရုံ။ >
< start="514.88" dur="2.369"> AND ဤအရာခပ်သိမ်းသည်။ >
< start="516.015" dur="2.902"> ဆေးရုံနှေးခြင်း >
< start="517.382" dur="4.672"> ဆေးရုံသို့လာ။ နှုန်းထားများ >
< start="519.051" dur="4.971"> အရာအားလုံး SO ဆေးရုံ >
< start="522.187" dur="2.369"> လူတွေရဲ့နှုန်းနဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်တယ် >
< start="524.156" dur="3.57"> လာ။ >
< start="524.69" dur="4.471"> တိုးချဲ့သောထိုအချိန်က >
< start="527.859" dur="1.802"> ဆေးရုံစွမ်းရည် >
< start="529.295" dur="2.702"> မြင့်မားသောအချက် >
< start="529.795" dur="2.569"> သင်ဒီမှာလိုင်းကိုကြည့်ပါ >
< start="532.131" dur="1.801"> စတင်။ >
< start="532.498" dur="2.936"> ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာနေတာဘာလဲဘာလဲ >
< start="534.065" dur="3.037"> သောလိမ်၏အမြင့်ဆုံးအချက် >
< start="535.567" dur="3.938"> သောလ၏ APEX ။ >
< start="537.236" dur="4.003"> သော၏အချက် IS >
< start="539.638" dur="3.47"> လာလာသောလူများ၏အကြီးမြတ်ဆုံးနံပါတ် >
< start="541.373" dur="5.505"> ဆေးရုံစနစ်ထဲသို့ >
< start="543.242" dur="3.937"> ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမားဆုံးသော IS IS >
< start="547.012" dur="2.135"> APEX ။ >
< start="547.312" dur="2.169"> အဘယ်မှာသွားမယ့် >
< start="549.281" dur="2.402"> ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ >
< start="549.614" dur="4.305"> ထပ်, တစ် ဦး စီမံကိန်း IS ။ >
< start="551.817" dur="3.17"> ထပ်, လှည့်ပတ်လှည့်ပတ်။ >
< start="554.053" dur="3.169"> သို့သော်လက်ရှိစီမံကိန်း IS >
< start="555.12" dur="5.205"> သော 21 ရက်အတွင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ >
< start="557.356" dur="6.073"> SO ဆေးရုံစွမ်းရည်မြှင့် >
< start="560.459" dur="4.371"> လုပ်နိုင် - ကိုင်တွယ်နိုင်ဖြစ် >
< start="563.562" dur="3.503"> သော APEX အသံ။ >
< start="564.964" dur="2.468"> ဆေးရုံကိုသင်မည်ကဲ့သို့တိုးမြှင့်ပေးသနည်း >
< start="567.199" dur="2.269"> စွမ်းရည်လား။ >
< start="567.566" dur="3.571"> သငျသညျကုတင် UP တိုး >
< start="569.601" dur="3.671"> ဝန်ထမ်းများနှင့်သင်ပစ္စည်းကိရိယာကိုတိုးမြှင့် >
< start="571.27" dur="3.27"> AND VENTILATORS ဖြစ်ကြ၏ >
< start="573.405" dur="3.604"> ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ကိရိယာတွင်ပြWEနာရှိသည် >
< start="574.673" dur="5.038"> အချိန်ကာလများစွာကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်။ >
< start="577.143" dur="4.437"> ငါတို့ဘယ်မှာလဲ >
< start="579.845" dur="2.969"> ကုတင်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ၁၄၀,၀၀၀ လိုအပ်သည်။ >
< start="581.714" dur="3.202"> ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၅၃,၀၀၀ ရှိသည်။ >
< start="582.948" dur="2.369"> ၏လက်ရှိစွမ်းရည်သည် >
< start="585.05" dur="1.835"> ဆေးရုံ။ >
< start="585.45" dur="2.67"> ငါတို့ဆေးရုံတွေအားလုံးကိုသူတို့ပြောပြတယ် >
< start="587.019" dur="2.969"> သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ရှိခဲ့ပါတယ် >
< start="588.253" dur="4.639"> 50% BY ။ >
< start="590.122" dur="5.572"> သူတို့ကိုငါတစ် ဦး အပေါ်သူတို့ကိုပြောပြတယ် >
< start="593.025" dur="5.572"> YESTERDAY ကွန်ဖရင့်ခေါ်။ >
< start="595.828" dur="4.737"> ဒီနည်းကိုအတွက်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး IS >
< start="598.73" dur="2.703"> ယခုသင့်အားပြောရန်ဆေးရုံများ >
< start="600.699" dur="2.97"> စွမ်းရည် 50% တိုးမြှင့်။ >
< start="601.566" dur="3.471"> သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့ကိုပြောပြရန်ရှိသည် >
< start="603.802" dur="3.17"> အိုင်တီနှင့်ပတ်သက်။ အလွန်အထွေထွေရှိ >
< start="605.17" dur="2.469"> ငါတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုသူတို့သဘောပေါက်လာတယ် >
< start="607.105" dur="2.236"> ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။ >
< start="607.773" dur="2.736"> သူတို့သည်တက်ရန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ကြသည် >
< start="609.474" dur="2.169"> ပန်းကန်သို့။ >
< start="610.643" dur="4.203"> သင်ဆေးရုံတိုးမြှင့်လျှင် >
< start="611.776" dur="4.705"> သင့်ကိုရရှိသောစွမ်းရည် ၅၀% >
< start="614.98" dur="6.54"> ၏ထိပ်ပေါ်မှာအိပ် 27,000 >
< start="616.615" dur="7.541"> တည်ရှိ, သင်မှ 80 ကြာကြာ။ >
< start="621.654" dur="6.072"> ငါရည်မှန်းချက်အဖြစ်ငါ ASP ဆေးရုံတချို့ >
< start="624.29" dur="3.803"> သင့်အား ၁၀၀% တိုးရန်ကြိုးစားပါ >
< start="627.86" dur="1.668"> စွမ်းရည်။ >
< start="628.227" dur="4.604"> 50% နိမ့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ >
< start="629.662" dur="4.704"> ရည်မှန်းချက် 100 ဖွစျသညျ။ >
< start="632.965" dur="3.203"> ငါအချို့ဆေးရုံများယုံကြည်ကြလိမ့်မည် >
< start="634.499" dur="4.271"> တကယ်တော့လုပ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။ >
< start="636.302" dur="5.271"> ငါသူတို့ကိုကြိုးစားအားပေးခဲ့တယ် >
< start="638.904" dur="3.003"> မဖြစ်နိုင်တာကိုလုပ်ပါ >
< start="641.707" dur="2.469"> အသံ။ >
< start="642.04" dur="4.338"> ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ဖြစ်မည့်အချိန် >
< start="644.309" dur="3.036"> သင် Agressive လုပ်နေတာတွေကိုလုပ်ပါ >
< start="646.511" dur="4.472"> ဘယ်တော့မှမပြီးဆုံးပါ။ >
< start="647.479" dur="4.972"> သူတို့ထဲကတချို့လုပ်ပေး, ငါ >
< start="651.116" dur="3.136"> သူတို့ထဲကတချို့ယုံကြည်ကြလိမ့်မည် >
< start="652.584" dur="5.339"> အပိုဆောင်း 5000 ဖြစ်လိမ့်မည် >
< start="654.386" dur="5.672"> ကုတင်၊ ၈၅၀၀၀ ခုခုကိုကျွန်မတို့ရပြီ။ >
< start="658.057" dur="3.97"> FEMA, အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့များ၊ >
< start="660.192" dur="3.237"> JAVITS တွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသောအရာ >
< start="662.16" dur="3.704"> စင်တာ, စည်းဝေးကြီး >
< start="663.562" dur="5.205"> ဗဟို, အနောက် Berry CAMPUS, ကျောက် >
< start="665.998" dur="3.103"> ကျွန်တော်တို့ကိုယူသော Brook Brook >
< start="668.901" dur="2.87"> ၈၉,၀၀၀ ။ >
< start="669.234" dur="3.738"> အမေရိကန်ရေတပ်သင်္ဘော "နှစ်သိမ့်" >
< start="671.904" dur="2.835"> သမ္မတစေလွှတ်ခဲ့သည် >
< start="673.105" dur="5.105"> နောက်ပြန်ဖြည့်ရန် ၁၀၀၀ ဖိုးဖြစ်လိမ့်မည် >
< start="674.873" dur="4.538"> သင့်အားခေါ်ဆောင်သွားသောဟိုတယ်များမှ >
< start="678.344" dur="5.972"> 90,000 ။ >
< start="679.545" dur="6.472"> ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြည်နယ်ကိုယူလျှင် >
< start="684.449" dur="3.805"> ချပြည်နယ်ကအသစ်အဆောင် >
< start="686.151" dur="4.605"> အမေရိကန်ရနိုင် York က >
< start="688.387" dur="7.874"> အပိုဆောင်း ၂၉၀၀၀ ခုတင်။ >
< start="690.89" dur="6.706"> ကုတင် ၁၁၉,၀၀၀ ကိုပေါ့။ >
< start="696.395" dur="2.669"> သင် 140 ကို AT နေဆဲမဟုတ်ပါဘူးသော 140 >
< start="697.73" dur="4.27"> သင်လိုအပ်ပေမယ့်ကျနော်တို့မျှော်ကြည့် >
< start="699.198" dur="5.105"> ဟိုတယ်များမှာငါတို့ကြည့်ပါတယ် >
< start="702.133" dur="5.906"> ယခင်သူနာပြုများအိမ်ပြောင်းခြင်း >
< start="704.436" dur="4.037"> လုပ်ဖို့ OWE စက်ရုံများ >
< start="708.173" dur="3.837"> ကွဲပြားခြားနားမှု။ >
< start="708.606" dur="5.072"> အများကြီးတီထွင်ဖန်တီးမှု, Agressive >
< start="712.143" dur="2.103"> ဒါပေမဲ့ဘဝမှာသင်လုပ်သမျှကိုလုပ်ပါ >
< start="713.812" dur="2.67"> လုပ်ရန်။ >
< start="714.38" dur="4.036"> AND ကျနော်တို့လုပ်နေတာဘာလဲ >
< start="716.615" dur="2.67"> ကုတင်စွမ်းရည်။ >
< start="718.55" dur="2.803"> အကာအကွယ်ပစ္စည်း, ငါတို့ရှိသည် >
< start="719.418" dur="3.937"> ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစျေးဝယ်ခဲ့သည်။ >
< start="721.487" dur="2.735"> ကျွန်ုပ်တို့တွင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးရှိသည် >
< start="723.488" dur="2.87"> လုပ်နေတာ။ >
< start="724.356" dur="5.605"> အခုငါတို့လုံလောက်ပြီ >
< start="726.491" dur="5.172"> အကာအကွယ်ပေးသည့်ပစ္စည်း၊ လက်အိတ်၊ >
< start="730.095" dur="2.703"> လူအပေါင်းတို့သည်မျက်နှာဖုံးများ, GOWNS >
< start="731.796" dur="5.239"> နေသောဆေးရုံတင် >
< start="732.931" dur="6.473"> IT နှင့်ဆက်ဆံခြင်း။ >
< start="737.169" dur="4.872"> ဒီနေ့ဆေးရုံ, သူနာပြု, မ >
< start="739.537" dur="4.739"> ဆရာဝန်ကတရား ၀ င်ပြောနိုင်ပါတယ် >
< start="742.174" dur="4.772"> အကာအကွယ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူး။ >
< start="744.41" dur="4.137"> အခုအချိန်မှာ FOR FOR >
< start="747.079" dur="1.802"> ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆနိုင်သောအနာဂတ် >
< start="748.681" dur="2.302"> ထောက်ပံ့ရေး။ >
< start="749.014" dur="3.136"> ကျနော်တို့တစ် ဦး ကလုံခြုံကြပြီမဟုတ် >
< start="751.116" dur="4.371"> ယခု မှစ၍ သုံးပတ်အတွင်းထောက်ပံ့မှု။ >
< start="752.284" dur="10.244"> ယခု မှစ၍ လေးပတ်၊ ငါးပတ် >
< start="755.62" dur="7.609"> ယခုကနေ။ >
< start="763.362" dur="1.235"> ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့စျေးဝယ်နေဆဲ။ >
< start="763.996" dur="1.635"> AND ဒီနည်းကိုကောငျးတဲ့သတင်းများနှင့်တစ် ဦး >
< start="764.73" dur="2.201"> TEAM BY ယောဘ။ >
< start="765.765" dur="2.701"> ထပ်မံ WE စျေးဝယ်နေပါတယ် >
< start="767.065" dur="4.705"> နောက်ထပ်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်။ >
< start="768.6" dur="3.604"> ပိုးသတ်ဆေး, စက်ရုံများ, >
< start="771.904" dur="1.368"> ပိုးသတ်ဆေး။ >
< start="772.337" dur="2.97"> ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာ ၃၀၀၀၀ လိုတယ်။ >
< start="773.405" dur="5.939"> ငါတို့တည်ရှိနေသောဆေးရုံတွင်ရှိသည် >
< start="775.441" dur="5.738"> စနစ် 4000 အပေါက်တွေ။ >
< start="779.478" dur="3.403"> ဒီနည်းကိုသာမန်၌တည်၏ >
< start="781.313" dur="3.303"> ဆေးရုံလည်ပတ်မှု။ >
< start="783.015" dur="3.136"> WE 7000 ၀ ယ်ယူပြီးပါပြီ >
< start="784.749" dur="5.84"> နေဆဲစျေးဝယ်။ >
< start="786.285" dur="7.607"> ဖက်ဒရယ်အစိုးရပေးပို့ခဲ့သည် >
< start="790.722" dur="7.274"> ၄၀၀၀ ။ >
< start="798.13" dur="3.203"> ကျနော်တို့ဘယ်မှာ SPLITTING ရှင်းပြနေပါတယ် >
< start="800.532" dur="1.168"> တစ် ဦး တည်း ventilator နှစ်ခုလုပ်နိုင်ပါတယ် >
< start="801.466" dur="0.868"> ပုံ။ >
< start="801.833" dur="1.335"> အိုင်တီလုပ်ဖို့အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့တယ် >
< start="802.467" dur="2.77"> ကျွန်တော်လေ့လာချင်ရင်ကြည့်ချင်ပါတယ် >
< start="803.302" dur="3.103"> အနည်းငယ်သောအိုင်တီလုပ်ပါ >
< start="805.37" dur="3.537"> အနည်းငယ်ပိုအချိန်ရှိသည် >
< start="806.538" dur="3.837"> အိုင်တီနှင့်အတူအတွေ့အကြုံ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပါပဲ >
< start="809.041" dur="1.735"> SPLITTING ကိုကြည့် >
< start="810.509" dur="1.901"> ပိုးသတ်ဆေး။ >
< start="810.909" dur="2.603"> ကျနော်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေပါတယ် >
< start="812.544" dur="2.869"> ကြိုးစားကြည့်ဖို့ဗဟိုအစိုးရ >
< start="813.645" dur="4.672"> VENTILATORS နောက်ထပ်ရှာပါ။ >
< start="815.547" dur="4.971"> ဒါပေမဲ့ငါတို့တစ်ကိုယ်ရေအကြီးမားဆုံး >
< start="818.45" dur="5.972"> စိန်ခေါ်မှုသည် ventilator များဖြစ်သည်။ >
< start="820.652" dur="6.974"> ထပ်, အမှန်တကယ်သော ICU အိပ်ရာ >
< start="824.556" dur="4.772"> ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဝင်လေထွက်ကုတင်ကိုဆိုလိုသည် >
< start="827.76" dur="4.07"> ထပ်, ဒီနည်းကိုတစ်ခုဖြစ်သည် >
< start="829.461" dur="3.77"> ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာ။ >
< start="831.963" dur="3.17"> သင်၌အိပ်ရာ၊ >
< start="833.365" dur="2.736"> စက်ကိရိယာ, သင်ဝန်ထမ်းလိုအပ်ပါတယ်, AND >
< start="835.267" dur="4.771"> နားလည်ရန်လိုအပ်သည် >
< start="836.234" dur="5.773"> သောအချို့ဝန်ထမ်းသွားမယ့် >
< start="840.171" dur="3.271"> ဖျားနာသူတို့ထွက်လိမ့်မည်။ >
< start="842.141" dur="3.97"> ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အလုပ်လုပ်နေပြီ >
< start="843.575" dur="3.036"> တစ် ဦး ထက်ပိုသော SURGE ကျန်းမာရေး >
< start="846.244" dur="2.569"> ဂရုစိုက်ပါ >
< start="846.745" dur="4.604"> ပြန်သွား GO ပြန်သွား GO နောက်သို့ >
< start="848.947" dur="6.706"> ဖြစ်နိုင်သည့်သူနာပြုများနှင့်ဆရာဝန်များ >
< start="851.483" dur="6.673"> ဆေးရုံတွင်မနေပါနှင့် >
< start="855.787" dur="6.741"> ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုအလုပ်များနှင့်မေးပါ >
< start="858.29" dur="5.372"> သူတို့တာဝန်ကျဖို့လက်မှတ်ထိုးရန် >
< start="862.661" dur="2.936"> တာဝန်ဝတ္တရား။ >
< start="863.796" dur="5.405"> သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ >
< start="865.731" dur="14.814"> 40,000 လူတွေ AS UP လက်မှတ်ထိုးကြပါပြီ >
< start="869.334" dur="12.579"> တစ် ဦး က Surge ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု Force ။ >
< start="880.679" dur="1.968"> ဤလိုအပ်သောရူပဗေဒပညာရှင်များ >
< start="882.781" dur="3.069"> YOL ES ည့်သည်များ၊ သူနာပြုများ၊ LPN များ၊ >
< start="885.05" dur="4.838"> လူတွေတက်လက်မှတ်ထိုးပါပြီ >
< start="885.984" dur="5.305"> ဒါကအလွန်အရေးကြီးပါတယ် - BIG ဆိုတာဘာလဲ၊ >
< start="890.022" dur="3.569"> BIG သဘောတူညီချက်။ >
< start="891.423" dur="3.837"> သင်သည်အိပ်ရာများကိုဖန်တီးနိုင်သောကြောင့်၊ >
< start="893.725" dur="2.936"> သင်ရှိသည့်ပစ္စည်းကိုရှာတွေ့နိုင်သည် >
< start="895.393" dur="3.904"> ဝန်ထမ်းများရှိသည်။ >
< start="896.795" dur="4.004"> AND သင်ကဝန်ထမ်းရှိသည် >
< start="899.43" dur="3.538"> သောအပိုဆောင်းကုတင်များအတွက် >
< start="900.932" dur="2.37"> ယခုဆေးရုံတွင်မရှိပါ >
< start="903.101" dur="3.304"> စနစ်။ >
< start="903.435" dur="4.504"> သငျသညျအခါ >
< start="906.538" dur="5.406"> ရှိပြီးသားဝန်ထမ်းများရရှိနိုင်ပါသည်။ >
< start="908.073" dur="5.405"> OR နည်းလမ်းဖြင့်အလုပ်လုပ်မရနိုင် >
< start="912.077" dur="2.903"> ကျနော်တို့သွားမယ့်နာရီ >
< start="913.612" dur="5.305"> လူတွေအလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်။ >
< start="915.114" dur="5.071"> ဒါအလွန်ကောင်းသည်။ >
< start="919.051" dur="2.168"> ဒီနည်းနဲ့အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်။ >
< start="920.319" dur="1.768"> ဘယ်သူ့ကိုမှမသိဘူး >
< start="921.353" dur="2.769"> ဒီနည်းကိုပြီးပြီ။ >
< start="922.221" dur="4.437"> ကျနော်တို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းပြောခဲ့တယ် >
< start="924.256" dur="2.736"> ဒီနည်းကိုဖွင့်သောဖိစီးမှု >
< start="926.792" dur="4.137"> လူတွေ။ >
< start="927.125" dur="4.872"> AND စိတ်ကျန်းမာရေးဖိအားနှင့် >
< start="931.063" dur="2.802"> စိတ်ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ။ >
< start="932.131" dur="2.035"> ဘယ်သူမှတကယ်အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး >
< start="933.999" dur="1.635"> ဒီနည်းကို။ >
< start="934.299" dur="4.104"> ငါတို့အားလုံးအကြောင်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ် >
< start="935.767" dur="5.339"> ချက်ချင်းလိုအပ်ချက်, ဘဝ >
< start="938.537" dur="6.139"> နှင့်ချက်ချင်းသေခြင်း >
< start="941.239" dur="4.872"> မှန်ကန်သောအခြေအနေ, သို့သော် >
< start="944.809" dur="2.537"> အထင်မသေးပါနဲ့ >
< start="946.244" dur="3.771"> စိတ်လှုပ်ရှားမှုစိတ်ဒဏ်ရာလူတွေ >
< start="947.479" dur="2.87"> ခံစားချက်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေး >
< start="950.149" dur="2.602"> ဆောင်းပါးများ။ >
< start="950.482" dur="5.406"> ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်တောင်းခံသည် >
< start="952.884" dur="5.606"> စေတနာ့ဝန်ထမ်းမှပရော်ဖက်ရှင်နယ် >
< start="956.021" dur="5.505"> အွန်လိုင်းစိတ်ဓာတ်ကိုထောက်ပံ့ပေးရန် sign up လုပ်ပါ >
< start="958.624" dur="5.638"> ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု။ >
< start="961.66" dur="5.138"> 6000 စိတ်ကျန်းမာရေး >
< start="964.395" dur="3.404"> ပညာရှင်များသဘောတူ >
< start="966.931" dur="3.538"> စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပေးရန်စေတနာ့ဝန်ထမ်း >
< start="967.933" dur="4.804"> WHO ကလူများအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု >
< start="970.602" dur="2.869"> လိုအပ်ပါတယ်။ >
< start="972.871" dur="5.873"> ဒီဟာကဘယ်လိုအလှအပပါလဲ။ >
< start="973.605" dur="10.41"> နှင့် HOTLINE 1-844-863-9314, >
< start="978.877" dur="6.473"> သင်ဤတယ်လီဖုန်းခေါ်နိုင်သလား, >
< start="984.148" dur="2.103"> အချိန်ဇယားတစ် ဦး နှင့်အတူရက်ချိန်း >
< start="985.483" dur="5.707"> စိတ်ကျန်းမာရေးပရော်ဖက်ရှင်နယ် >
< start="986.385" dur="6.272"> သူတို့ကိုစကားပြောရန်လုံးဝအခမဲ့ >
< start="991.323" dur="3.837"> သင်ခံစားရသောဖိစီးမှု။ >
< start="992.791" dur="5.005"> တဖန်ဘုရားသခင် 6000 ကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏ >
< start="995.293" dur="6.507"> WHO ကစိတ်ကျန်းမာရေးပရော်ဖက်ရှင်နယ် >
< start="997.929" dur="6.406"> ဒီနည်းကိုအခမဲ့လုပ်နေတယ်။ >
< start="1001.934" dur="3.169"> AND ငါသူတို့ပုံမှန်အတွက်သေချာပါတယ် >
< start="1004.469" dur="4.571"> သူတို့အလေ့အကျင့်အလုပ်များနေကြသည်။ >
< start="1005.237" dur="6.306"> ဒီနည်းကသာမန်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည် >
< start="1009.174" dur="3.003"> သူတို့ကိုငါသေချာ S >
< start="1011.676" dur="1.302"> သူတို့အလေ့အကျင့်အလုပ်များနေကြသည်။ >
< start="1012.31" dur="1.602"> ဒီနည်းကသာမန်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည် >
< start="1013.111" dur="3.17"> သူတို့ကို။ >
< start="1014.046" dur="4.137"> သမ္မတ Trump နှင့်စကားပြော >
< start="1016.414" dur="2.603"> အချို့သောကာလ, နောက်ဆုံးည, ငါ NO >
< start="1018.316" dur="2.67"> သူ့ကိုဒီမနက်နှင့်အတူ။ >
< start="1019.151" dur="3.804"> ငါလူတွေကိုပြောတယ် >
< start="1021.119" dur="2.936"> ကိုင်တွယ်သောအဖြူရောင်အိမ် >
< start="1023.088" dur="3.036"> ဤလုပ်ငန်းများကို။ >
< start="1024.189" dur="2.336"> ငါအသံနှင့်အတူပြောခဲ့တယ် >
< start="1026.258" dur="2.636"> သမ္မတ။ >
< start="1026.658" dur="4.571"> ငါ JARED KUSHNER နှင့်အတူပြောဆိုခဲ့သည် >
< start="1029.027" dur="2.569"> ဘယ်သူလဲ New Yorker သူသိတယ် >
< start="1031.363" dur="3.537"> နယူးယောက်။ >
< start="1031.73" dur="5.005"> သူသည်အဖြူရောင်တွင်အလုပ်လုပ်သည် >
< start="1035.033" dur="2.636"> အိမ်သူအိမ်သား >
< start="1036.868" dur="4.037"> အထူးသဖြင့်အထူးအထောက်အကူပြုသည် >
< start="1037.803" dur="6.272"> ဒီအခြေအနေတွေ၏။ >
< start="1041.039" dur="5.806"> ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသည့်အရာသည် A ဖြစ်သည် >
< start="1044.208" dur="5.339"> အများသုံးအခက်အခဲ။ >
< start="1046.979" dur="6.306"> ဤအဘယ်သူမျှဤ ventilator နှင့် >
< start="1049.681" dur="4.571"> ဘယ်သူ့ကိုမှမဆိုတစ် ဦး >
< start="1053.418" dur="3.07"> သင်လိုအပ်သည့်အခြေအနေ >
< start="1054.385" dur="5.707"> ဤစက်၏ဤနံပါတ် >
< start="1056.621" dur="3.904"> ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်ဆံပါ >
< start="1060.225" dur="1.468"> အရေးပေါ်။ >
< start="1060.659" dur="3.036"> ဒါကြောင့်ငါတို့အရာအားလုံးကိုဝယ်ယူခဲ့သည် >
< start="1061.827" dur="4.07"> ဝယ်ယူနိုင်။ >
< start="1063.829" dur="6.106"> ကျနော်တို့အခုအခြေအနေမှာပါပဲ >
< start="1066.03" dur="6.34"> WE အရှိန်မြှင့်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ် >
< start="1070.068" dur="4.772"> ဒီ VENTILATORS ၏ထုတ်လုပ်မှု >
< start="1072.504" dur="4.171"> နှင့် ventilator ရှုပ်ထွေးသည် >
< start="1074.973" dur="3.503"> ကိရိယာတန်ဆာပလာ။ >
< start="1076.808" dur="7.141"> သမ္မတနှင့်သူ၏အဖွဲ့ ၁ >
< start="1078.61" dur="7.207"> DPA သည်ကောင်းစွာအသုံးပြုနေသည် >
< start="1084.082" dur="5.572"> အခြေခံအားဖြင့်အိုင်တီကြောင့်ဖြစ်သော - အိုင်တီ >
< start="1085.95" dur="5.172"> ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့်အခါတစ် ဦး သြဇာကိရိယာ IS >
< start="1089.787" dur="2.837"> ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများနှင့်, လက်ျာဘက်? >
< start="1091.256" dur="4.204"> သင့်ကိုကူညီပါ။ >
< start="1092.758" dur="4.17"> သင်၏အကူအညီကိုကျွန်ုပ်တို့တောင်းခံနိုင်ပြီ။ >
< start="1095.594" dur="2.769"> OR သင်ကူညီရန်သဘောတူနိုင်သည် >
< start="1097.062" dur="1.901"> ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားတက်ရန်လိုအပ်သည် >
< start="1098.496" dur="3.538"> တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်မှု။ >
< start="1099.097" dur="5.906"> ပင်အတူရှိ၏ RAMP >
< start="1102.167" dur="4.604"> ထည့်သွင်းရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက် UP UP TIME >
< start="1105.136" dur="3.838"> , supply ချိတ်ဆက်အတူတကွ >
< start="1106.904" dur="5.573"> အလုပ်ခွင်အတူတကွနှင့် GET >
< start="1109.107" dur="4.705"> ဤအရာတို့ကိုအပြေး။ >
< start="1112.611" dur="4.571"> သင်ကြားနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာကကူညီလိမ့်မယ်။ >
< start="1113.945" dur="5.372"> အထွေထွေ motor များကူညီလိမ့်မည်။ >
< start="1117.316" dur="4.404"> ပြTHEနာကငါတို့ရဲ့အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ် >
< start="1119.45" dur="6.34"> ဒါကြောင့်တိုတို, ငါတို့ AN ကြည့်ရှုပါ >
< start="1121.853" dur="7.808"> APEX 21 ရက်အတွင်း။ >
< start="1125.924" dur="8.174"> VENTILATORS AND ဤအရ >
< start="1129.794" dur="7.841"> စီးပွားရေးညှိနှိုင်းရေးမှူးထား >
< start="1134.232" dur="6.44"> အတူတူ, ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်, >
< start="1137.769" dur="4.004"> ဖြန့်ဝေပေးပို့သည် AN IS >
< start="1140.805" dur="2.135"> အလွန်ခက်ခဲသောတာဝန်။ >
< start="1141.907" dur="4.137"> AND အိုင်တီကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုခု >
< start="1143.074" dur="4.038"> အဖွဲ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည် >
< start="1146.178" dur="4.003"> အဖြူရောင်အိမ်အသင်းနှင့်ငါချင်တယ် >
< start="1147.245" dur="5.572"> မိမိအဘို့အПрезидентကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="1150.314" dur="3.07"> ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်သူ့အဖွဲ့ >
< start="1152.95" dur="1.869"> သူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု။ >
< start="1153.518" dur="3.771"> ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုရယူပါ၊ >
< start="1154.953" dur="5.072"> ကျနော်တို့နိုင်ငံများနှင့်ပြောနေတာပါ >
< start="1157.422" dur="4.371"> အဖြစ်ကောင်းစွာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအသစ် >
< start="1160.158" dur="2.036"> လုပ်နိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီများ >
< start="1161.927" dur="3.87"> ထုတ်လုပ်မှု။ >
< start="1162.327" dur="6.706"> ငါတို့လည်းအဖြူနှင့်စကားပြောနေကြတယ် >
< start="1165.93" dur="4.572"> အခြားအယူအဆအကြောင်းအိမ်။ >
< start="1169.167" dur="4.271"> New York ကအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ရှိသည် >
< start="1170.636" dur="4.303"> နံပါတ်စည်းကမ်းချက်များ၌တည်၏။ >
< start="1173.572" dur="3.302"> နယူးယောက်မှလည်းအများဆုံးရှိသည် >
< start="1175.072" dur="2.136"> စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွက်လိုအပ်ချက် >
< start="1177.008" dur="0.5"> အချိန်။ >
< start="1177.341" dur="2.136"> ညာဘက်? >
< start="1177.642" dur="4.905"> ကျွန်ုပ်တို့၏ APEX အကြောင်းပြောဆိုဆွေးနွေးကြသည် >
< start="1179.611" dur="4.338"> သောကုလားကာအကြောင်း။ >
< start="1182.68" dur="3.771"> ပတ်ပတ်လည်ကွဲပြားဒေသများ >
< start="1184.082" dur="3.437"> တိုင်းပြည်သွားနေကြသည် >
< start="1186.584" dur="3.504"> ကွဲပြားခြားနားသောကျီး။ >
< start="1187.653" dur="5.438"> WE တချို့နည်းလမ်းတွေထဲမှာပထမ ဦး ဆုံး။ >
< start="1190.222" dur="5.638"> ကျွန်ုပ်တို့၏ပြUMနာအရေအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးတက်။ >
< start="1193.225" dur="6.506"> ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းကြောင်းပထမ ဦး ဆုံး။ >
< start="1195.994" dur="5.005"> ရှည်လျားသောရိုက်ချက် BY ။ >
< start="1199.865" dur="3.837"> ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရပါလိမ့်မယ် >
< start="1201.132" dur="4.571"> ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်သူတို့၏ကုလား။ >
< start="1203.835" dur="4.905"> သမ္မတ ဦး သိန်းစိန်ကိုငါပြောခဲ့တဲ့စကား၊ >
< start="1205.837" dur="6.373"> သူ့အဖွဲ့ကကြည့်ရှု, အဲဒီမှာထက် >
< start="1208.873" dur="5.973"> ကျနော်တို့ပေးဖို့ရှိသည်ဟုဆိုသည် >
< start="1212.343" dur="5.373"> တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာ >
< start="1215.013" dur="7.574"> တစ်ကြိမ်တွင်စကားပြောကြရအောင် >
< start="1217.849" dur="6.273"> လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း >
< start="1222.721" dur="3.003"> သော HOT အစက်အပြောက်, တခါ >
< start="1224.256" dur="2.969"> သင်ရှိသည်သောကြောင့်အစက်အပြောက်လည်ပတ် >
< start="1225.857" dur="6.106"> APEX ပြီးတော့ပြီးတော့သင်တစ် ဦး ကုလားအုတ်ရှိသည်, >
< start="1227.358" dur="5.306"> AND ကုလားဆွေမျိုးဖြစ်ပါတယ် >
< start="1232.797" dur="3.004"> တိုတို, သင်ဤအပူ ADDRESS ကိုတခါ >
< start="1234.232" dur="4.771"> သောပြင်းထန်မှုနှင့်အတူအစက်အပြောက်, >
< start="1235.934" dur="5.105"> INTENSE ပစ္စည်းကိရိယာ, INTENSE >
< start="1239.137" dur="3.103"> ဝန်ထမ်း, ထို့နောက်ပြောင်းရွှေ့ >
< start="1241.172" dur="3.103"> NEXT HOT အစက်အပြောက်။ >
< start="1242.374" dur="4.904"> AND တစ် ဦး ကပို။ ပို။ ရှိသည် >
< start="1244.408" dur="5.039"> နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှဖြုန်းတီးမှု >
< start="1247.411" dur="3.437"> တစ် ဦး static ပြန်ပို့, မှန်တယ်? >
< start="1249.581" dur="4.971"> ငါဖက်ဒရယ်အစိုးရ၌ရှိ၏ >
< start="1250.982" dur="4.004"> HUD မှာငါဆယ်ကျော်သက်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် >
< start="1254.686" dur="1.201"> ဘေးအန္တရာယ်များ။ >
< start="1255.119" dur="2.303"> သင်၌ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုနှင့်ပတ်သက်သည် >
< start="1256.02" dur="4.638"> ထိုကာလ၌သင်တို့ရှေ့ >
< start="1257.555" dur="3.47"> ထို့နောက်သင်သည်နောက်သို့ရွှေ့ပါ >
< start="1260.792" dur="2.002"> ဘေးအန္တရာယ်။ >
< start="1261.159" dur="4.271"> AND ငါသော Rolling တှေး >
< start="1262.927" dur="3.77"> DEPLOYMENT ဒီမှာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး >
< start="1265.564" dur="4.67"> NEW YORK ၏ BEF, >
< start="1266.831" dur="3.737"> ငါတို့ 100% ဖြစ်လိမ့်မည်လွတ်လပ်သော >
< start="1270.368" dur="1.469"> အထောက်အကူပြု။ >
< start="1270.701" dur="3.838"> H မြေတပြင်လုံးမှအကူအညီလိုအပ်သည် >
< start="1271.97" dur="4.271"> အခုအချိန်မှာနိုင်ငံ။ >
< start="1274.673" dur="3.736"> ကျနော်တို့ကနေအရင်းအမြစ်များလိုအပ်ပါတယ် >
< start="1276.374" dur="5.305"> အခုအချိန်မှာတစ်ခုလုံးကိုတိုင်းပြည်။ >
< start="1278.543" dur="6.106"> ငါတို့ APEX ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်သောကြောင့် >
< start="1281.812" dur="9.577"> AND ကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်များအမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြသည်။ >
< start="1284.783" dur="8.474"> ဒါပေမဲ့ APEX HIGH POINT ဖြစ်လိမ့်မည် >
< start="1291.523" dur="2.869"> တိုင်းပြည်ဖြတ်ပြီး SEQUENTIAL ။ >
< start="1293.391" dur="3.67"> ဒါနဲ့အဖြူရောင်အိမ်တော်ကိုပြောကြားခဲ့သည် >
< start="1294.526" dur="5.205"> ကျွန်ုပ်တို့ထံသောပစ္စည်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပို့ပါ >
< start="1297.195" dur="5.572"> လိုအပ်ပါတယ်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျွန်တော်တို့ကိုပေးပို့ပါ။ >
< start="1299.865" dur="7.373"> မကြာမီငါတို့အတိတ်ရ AS >
< start="1302.9" dur="6.24"> အရေးပါသောအချိန်, ငါတို့လိမ့်မည် >
< start="1307.372" dur="5.038"> သောပစ္စည်းကိရိယာပြန်ပေးရန်နှင့် >
< start="1309.274" dur="7.174"> NEXT ၏အစက်အပြောက်သို့ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ။ >
< start="1312.544" dur="6.239"> ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာမခံပါလိမ့်မယ် >
< start="1316.581" dur="7.541"> အိုင်တီနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအိုင်တီစီမံခန့်ခွဲ။ >
< start="1318.917" dur="7.374"> အကယ်၍ သင်သည် US 15,000 ပို့လျှင် >
< start="1324.255" dur="5.205"> ကျွန်ုပ်တို့၏ပြီးနောက် VENTILATORS ပြီးတော့ >
< start="1326.424" dur="4.572"> Los Angeles လိုအပ် CURVE 15,000 >
< start="1329.594" dur="2.469"> ကျနော်တို့ယူနိုင်ပါတယ် ventilator >
< start="1331.129" dur="3.603"> ဒီမှာမှပစ္စည်းကိရိယာ, ငါတို့ယူနိုင်ပါတယ် >
< start="1332.197" dur="6.105"> သူတို့ကိုမှဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်, ငါတို့ >
< start="1334.865" dur="4.773"> ဒီမှာမှသင်ခန်းစာယူနိုင်သလား, >
< start="1338.436" dur="2.903"> WE ပထမ ဦး ဆုံးသွား, အရာလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ် >
< start="1339.771" dur="2.502"> သောအခြားဘယ်သူမှလေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။ >
< start="1341.473" dur="5.138"> ငါတို့ဖြစ်မယ့်သောကြောင့် >
< start="1342.407" dur="5.806"> ပထမတစ်ဝက်ဖြတ်သန်းသွားသည်။ >
< start="1346.745" dur="2.736"> ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာမခံ >
< start="1348.346" dur="2.869"> WE, ထိုပစ္စည်းကိရိယာယူပါလိမ့်မယ် >
< start="1349.614" dur="3.303"> သောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ယူလာပါလိမ့်မယ် >
< start="1351.382" dur="3.304"> သောနည်းပညာအကူအညီကိုယူလာပါ >
< start="1353.05" dur="4.572"> NEXT ကိုအစက်အပြောက် TO ။ >
< start="1354.82" dur="4.671"> ငါသမ္မတဖြစ်မယ်, ငါဖြစ်လိမ့်မယ် >
< start="1357.756" dur="2.635"> NEXT ကိုသွားပါအပိုင်း >
< start="1359.624" dur="4.271"> ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့နှင့်အတူအစက်အပြောက်။ >
< start="1360.525" dur="3.637"> တိုင်းပြည်ကိုကူညီဖို့တောင်းပန်ပါတယ် >
< start="1364.029" dur="2.869"> အမေရိကန် >
< start="1364.296" dur="4.47"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမည်။ >
< start="1367.032" dur="4.438"> ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤ၌ရှိကြ၏။ >
< start="1368.9" dur="3.737"> ငါတို့သည်သူတို့အကူအညီအတွက်တောင်းပါတယ် >
< start="1371.603" dur="7.04"> AND သူတို့စဉ်းစား AND WE >
< start="1372.771" dur="8.474"> DIVIDENDS နှင့်အတူအိုင်တီပြန်ပေးလိမ့်မည်။ >
< start="1378.777" dur="6.606"> ကန်ြပATEတြာတငြ်အကALက်ြပ CONS သည် >
< start="1381.379" dur="5.972"> IS $2ထရီလီယံ Bill >
< start="1385.516" dur="6.907"> FOR Quote / Unquote Relief >
< start="1387.485" dur="5.339"> စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, တစ် ဦး ချင်းစီနှင့် >
< start="1392.557" dur="1.034"> အစိုးရများ။ >
< start="1392.957" dur="4.538"> အမှန်ပင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ် >
< start="1393.725" dur="5.539"> နယူးယောက်ပြည်နယ်။ >
< start="1397.629" dur="3.003"> ဒေါ်လာ ၂ ထရီလီယံငွေပမာဏ >
< start="1399.397" dur="1.635"> New York ပြည်နယ်ဆိုလိုတာက >
< start="1400.765" dur="4.037"> အစိုးရလား။ >
< start="1401.165" dur="7.442"> အိုင်တီကဒေါ်လာ ၃.၈ ဘီလီယံကိုဆိုလိုတယ်။ >
< start="1404.936" dur="4.304"> အများကြီးကဲ့သို့ $ 3.8 ဘီလီယံအသံ >
< start="1408.74" dur="2.235"> ပိုက်ဆံ။ >
< start="1409.374" dur="2.636"> ဘတ်ဂျက်ဒါရိုက်တာကသင့်ကိုစကားပြောနိုင်တယ် >
< start="1411.109" dur="5.205"> မှတဆင့်။ >
< start="1412.144" dur="7.139"> ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့တစ် ဦး မျက်နှာဖုံးကိုကြည့်ပါတယ် >
< start="1416.447" dur="8.542"> $9ဘီလီယံ, $ 10 ၏တိုတောင်း >
< start="1419.417" dur="8.909"> ဘီလီယံ, $ 15 ဘီလီယံ။ >
< start="1425.123" dur="4.871"> ဒီနည်းကိုဗိုင်းရပ်စ်ဖို့ဒီတုံ့ပြန်မှု >
< start="1428.459" dur="3.438"> ဖြစ်နိုင်သည် US $ 1 ကုန်ကျသည် >
< start="1430.128" dur="3.17"> ဘီလီယံ, ဖြစ်နိုင်သည်ကုန်ကျမည် >
< start="1432.03" dur="2.101"> အမေရိကန်မှာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ဒေါ်လာတွေ >
< start="1433.431" dur="2.069"> လုပ်ပြီးပြီ >
< start="1434.265" dur="4.805"> New York City တစ်ခုတည်းသာ $ 1.3 ရရှိသည် >
< start="1435.633" dur="6.006"> ဒီ packet ထဲကသန်းပေါင်းများစွာ။ >
< start="1439.204" dur="6.673"> သောအိတ်ထဲမှာတစ်စက်ဖြစ်ပါတယ်။ >
< start="1441.773" dur="5.105"> ကျွန်ုပ်အိမ်DEL္ဌာနဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ် SPO ကိုစကားပြောခဲ့သည်၊ >
< start="1446.011" dur="1.367"> ဒီနည်းကိုကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် >
< start="1447.012" dur="2.502"> နံနက်။ >
< start="1447.512" dur="2.269"> ငါဒီနည်းကိုမလုပ်ဘူးဟုပြောသည် >
< start="1449.648" dur="3.136"> အိုင်တီ >
< start="1449.915" dur="5.304"> ငါသိ၏ငါသိ၏ >
< start="1452.918" dur="4.337"> SENATE သီအိုရီနှင့်သမ္မတနိုင်ငံ >
< start="1455.353" dur="3.837"> သီအိုရီ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အိမ်လိုအပ်ပါတယ် >
< start="1457.389" dur="3.436"> Adjustments လုပ်ပါ။ >
< start="1459.324" dur="4.103"> သွားလေ၏အိမ်နှင့် Bill >
< start="1460.959" dur="2.969"> OVER, New York ပြည်နယ် $ 17 ရပြီ >
< start="1463.561" dur="5.806"> ဘီလီယံ >
< start="1464.062" dur="7.44"> အထွေထွေဥပဒေကြမ်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေါ်လာ ၃.၈ ရရှိသည် >
< start="1469.501" dur="3.737"> ဘီလီယံ >
< start="1471.636" dur="1.969"> AND, ကောင်းပြီ, သင်ရုံ - BIG >
< start="1473.371" dur="2.002"> သုံးစွဲခြင်း။ >
< start="1473.738" dur="2.636"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောသုံးစွဲမှုအခြေအနေမဟုတ်ပါ။ >
< start="1475.507" dur="2.535"> ငါနှစ်တိုင်းအခွန်ဖြတ်။ >
< start="1476.508" dur="4.07"> ကျွန်ုပ်တွင်အနိမ့်ဆုံးတိုးတက်မှုနှုန်းရှိသည် >
< start="1478.175" dur="4.972"> မျက်မှောက်ခေတ်ပြည်နယ်ဘတ်ဂျက် >
< start="1480.711" dur="2.803"> နိုင်ငံရေးနောက်ခံ။ >
< start="1483.281" dur="2.969"> အိုကေလား? >
< start="1483.648" dur="3.003"> ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ချွေတာဖြစ်ကြပြီး WE ဖြစ်ကြသည် >
< start="1486.384" dur="1.535"> အကျိုးသက်ရောက်မှု။ >
< start="1486.784" dur="2.77"> ဒီနံပါတ်များကိုငါပြောပြမယ် >
< start="1488.053" dur="4.604"> အလုပ်မလုပ်နဲ့ငါအိမ်ကိုပြောပြတယ် >
< start="1489.687" dur="3.604"> ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်လိုအပ်သောအသင်းဝင်များ >
< start="1492.79" dur="2.503"> သူတို့ရဲ့အကူအညီ။ >
< start="1493.425" dur="5.071"> NUMBERS ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, စုစုပေါင်း >
< start="1495.426" dur="3.604"> စမ်းသပ်ပြီးကျနော်တို့ 103,000 အထိပါပဲ >
< start="1498.63" dur="2.235"> လူတွေ။ >
< start="1499.164" dur="5.005"> WE 12,000 အထိစမ်းသပ်မှုအသစ်။ >
< start="1500.999" dur="4.805"> မနေ့က၏, ခန့် 28% ၏ >
< start="1504.302" dur="2.969"> တစ်နိုင်ငံလုံးစမ်းသပ်မှုအားလုံး >
< start="1505.937" dur="1.635"> အသစ်၏ပြည်နယ်အားဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည် >
< start="1507.405" dur="2.603"> YORK ။ >
< start="1507.705" dur="5.072"> နယူးယောက်ပြည်နယ်နောက်ထပ်လုပ်နေတယ် >
< start="1510.141" dur="4.337"> မည်သည့်ပြည်နယ်ကနေစမ်းသပ် >
< start="1512.91" dur="2.904"> အမေရိကန်ြပည်ထောင်စု။ >
< start="1514.612" dur="2.536"> ငါ TEAM အလွန်ဂုဏ်ယူပါတယ် >
< start="1515.947" dur="4.104"> ငါတို့ဘယ်လိုရွေ့လျားသွားခဲ့သလဲ >
< start="1517.281" dur="3.104"> ဒီနည်းကို UP စမ်းသပ်ပြီး >
< start="1520.185" dur="3.369"> အပြေး။ >
< start="1520.518" dur="3.337"> လူတွေကဒီမေးခွန်းကိုဘယ်လိုလုပ်ကြသလဲမေးကြပါ >
< start="1523.688" dur="4.438"> အလုပ်။ >
< start="1523.988" dur="4.738"> မည်သည့်ဆေးရုံတက်ရမည်နည်း >
< start="1528.259" dur="4.038"> စမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်။ >
< start="1528.86" dur="4.304"> သင်တစ် ဦး ဆေးရုံသို့သှားနိုငျသညျ >
< start="1532.43" dur="3.003"> ဘူဖလာ, New York သင်ပြပါလျှင် >
< start="1533.298" dur="4.837"> ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်တွေ့ဆုံ >
< start="1535.566" dur="3.937"> ပရိုတိုကော၊ သင့်ကိုစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ >
< start="1538.269" dur="4.705"> နည်းဗျူဟာအရ WE စမ်းသပ်ခြင်းကိုဖျက်လိုက်သည် >
< start="1539.637" dur="5.605"> ဘယ်နေရာမှာအများဆုံးဆုံး >
< start="1543.107" dur="2.97"> ကျနော်တို့ drive ကို - THRUS ကို set up ပြီးပြီ >
< start="1545.376" dur="0.968"> ET CETERA ။ >
< start="1546.211" dur="1.501"> အဘယ်ကြောင့်? >
< start="1546.478" dur="2.969"> ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြုသဘောဆောင်သည့်မုဆိုးများဖြစ်သောကြောင့်။ >
< start="1547.846" dur="4.837"> ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြုသဘောဆောင်သောမုဆိုးများဖြစ်သည် >
< start="1549.581" dur="3.436"> သူတို့ကိုသီးခြားဖယ်ရှားပေးနိုင်သလား >
< start="1552.817" dur="3.203"> ဖြန့် >
< start="1553.15" dur="5.172"> သင်ပို။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် >
< start="1556.154" dur="2.669"> မြင့်မားသောအပြုသဘောဆောင်သည့်အခြေအနေများ >
< start="1558.456" dur="2.702"> မှန်, ?ရိယာ? >
< start="1558.956" dur="6.173"> BRONX တွင် drive-THRU တစ်ခုတည်ဆောက်ပါ >
< start="1561.292" dur="5.339"> တစ် ဦး က drive-Thrus VERSUS >
< start="1565.262" dur="2.803"> CHAUTAUQUA County, သင်ရပါလိမ့်မယ် >
< start="1566.765" dur="3.402"> BRONX တွင်နောက်ထပ်အပြုသဘောဆောင်။ >
< start="1568.199" dur="4.004"> AND ငါတို့လိုအရာကားအဘယ်သို့။ >
< start="1570.301" dur="3.837"> သို့သော်မည်သည့်နေရာ၌မဆို >
< start="1572.337" dur="4.404"> သင့်အနေဖြင့်ရောဂါလက္ခဏာများရှိပါကသင် >
< start="1574.272" dur="3.47"> စိုးရိမ်ပူပန်, သင်ထဲသို့လမ်းလျှောက်နိုင် >
< start="1576.875" dur="2.869"> မည်သည့်ဆေးရုံနှင့်သောဆေးရုံ >
< start="1577.875" dur="3.304"> တစ် ဦး ကစမ်းသပ်မှုရရှိနိုင်သလား။ >
< start="1579.878" dur="3.302"> အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဖြစ်ရပ်များအရေအတွက်, ငါတို့ပါပဲ >
< start="1581.312" dur="5.472"> အထိ 300,000 အထိ။ >
< start="1583.314" dur="9.276"> ဖြစ်ရပ်အသစ်များ ၅၀၀၀ ။ >
< start="1586.918" dur="7.173"> ပြန်ကြည့်ပါ။ >
< start="1592.723" dur="2.169"> 13,000 - တောင်းပန်ပါတယ်, 17,000 New York >
< start="1594.225" dur="3.904"> မြို့တော်။ >
< start="1595.026" dur="4.738"> 4,000 WESTCHESTER, 3000 IN >
< start="1598.262" dur="5.406"> NASSAU County ။ >
< start="1599.898" dur="8.275"> ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသော WESTCHESTER ရှိသည် >
< start="1603.801" dur="5.006"> ဘာတွေသိသိသာသာနှေးကွေး >
< start="1608.306" dur="3.236"> အထင်ကရတိုးမြှင့်။ >
< start="1608.94" dur="5.638"> သတင်းကောင်းဘက်မှာပြန်စ >
< start="1611.675" dur="3.337"> သင်နှုန်းနှေးကွေးနိုင်သလား >
< start="1614.712" dur="0.767"> ရောဂါကူးစက်မှု။ >
< start="1615.145" dur="0.968"> ဟုတ်သည်။ >
< start="1615.613" dur="3.07"> မင်းဘယ်လိုသိလဲ? >
< start="1616.247" dur="2.87"> ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ခဲ့သလဲကြည့်ပါ >
< start="1618.817" dur="2.168"> WESTCHESTER ။ >
< start="1619.25" dur="4.805"> သောအပူဆုံးစပျစ်သီးပြွတ်ဖွစျသညျ >
< start="1621.118" dur="6.173"> အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု။ >
< start="1624.189" dur="3.503"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းများပိတ်ပြီးပြီ >
< start="1627.425" dur="1.635"> စုရုံး။ >
< start="1627.825" dur="4.138"> WE စမ်းသပ်ခြင်းကိုဖမ်းမိ။ >
< start="1629.193" dur="4.304"> ငါတို့သည်သိသိသာသာနှေးကွေးခဲ့သည် >
< start="1632.096" dur="4.137"> တိုးတက်မှု။ >
< start="1633.631" dur="5.639"> NASSAU County 3000 ဖြစ်ပါတယ်။ >
< start="1636.367" dur="3.57"> သူတို့ဆွေမျိုးမှန်ဖြစ်ကြသည် >
< start="1639.404" dur="3.203"> WESTCHESTER ။ >
< start="1640.071" dur="3.436"> WESTCHESTER သည့်အခါ ZERO ကဲ့သို့ >
< start="1642.74" dur="4.104"> စတင်ခဲ့သည်။ >
< start="1643.641" dur="4.004"> ဒါကြောင့်ငါတို့ကသူ့ကိုနှေးကွေးနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရှိသည် >
< start="1646.977" dur="2.87"> အိုင်တီနှေးကွေး >
< start="1647.779" dur="4.537"> ထပ်, သင်ကပြန့်ပွားကြည့်ပါ >
< start="1649.98" dur="2.904"> ငါတို့ပြောခဲ့သည့်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း >
< start="1652.45" dur="5.705"> ဖြစ်လိမ့်မယ်။ >
< start="1653.017" dur="5.639"> လက်ရှိအရေအတွက်, 30,000 စမ်းသပ် >
< start="1658.289" dur="2.736"> အပြုသဘော။ >
< start="1658.79" dur="7.073"> အပြုသဘောစမ်းသပ်သူမြား၏ 12% >
< start="1661.159" dur="9.208"> ဆေးရုံတင်ထားပါသည်။ >
< start="1665.997" dur="4.671"> ၃ ရာခိုင်နှုန်းသည် ICU တွင်ရှိသည်။ >
< start="1670.501" dur="4.037"> အိုကေလား? >
< start="1670.801" dur="5.373"> ဤသည်ကိုထပ်ရှူရှိုက်အချိန်။ >
< start="1674.672" dur="2.869"> ငါကအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားတယ်၊ >
< start="1676.307" dur="4.871"> ဆိုလိုတာလား >
< start="1677.675" dur="7.374"> 30,000 စမ်းသပ်ပြီးအပြုသဘော။ >
< start="1681.312" dur="10.577"> ဆေးရုံတွင် ၁၂% ရှိသည်။ >
< start="1685.183" dur="9.076"> ၃% သည် ICU တွင်ရှိသည်။ >
< start="1692.023" dur="5.472"> အကယ်၍ သင်သည်သူတို့ကို ၃% ကြည့်ရှုပါက၊ >
< start="1694.392" dur="5.105"> pre- လွှမ်းမိုးသောသက်ကြီးရွယ်အိုများဖြစ်ကြသည် >
< start="1697.629" dur="3.57"> နိုင်ငံသားများ, လူတွေ >
< start="1699.631" dur="4.404"> လူတွေဒုက္ခရောက်နေတယ် >
< start="1701.332" dur="3.77"> အမ်မိုင်နှင့်အတူ, လူတွေ >
< start="1704.168" dur="2.836"> နှိုင်းယှဉ် IMMUNE စနစ်။ >
< start="1705.236" dur="3.971"> ဤအရာအလုံးစုံအကြောင်းပါ။ >
< start="1707.138" dur="3.503"> ဆူညံသံအားလုံး၊ စွမ်းအင်အားလုံး၊ >
< start="1709.34" dur="5.906"> အိုင်တီဒီအကြောင်း 3% အကြောင်း။ >
< start="1710.775" dur="7.474"> အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါ။ >
< start="1715.38" dur="4.471"> NOW က, ဒီ 3%, ငါ့အမိကား, >
< start="1718.383" dur="3.002"> သင်၏အမိကားအဘယျသို့သော >
< start="1719.984" dur="3.436"> သင်၏နှမ၊ ဤသူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်ကြသည် >
< start="1721.519" dur="3.337"> ဤချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသူများဖြစ်သည် >
< start="1723.554" dur="2.269"> ငါတို့သည်ငါတို့ရှိသမျှလုပ်ပါလိမ့်မယ် >
< start="1724.989" dur="1.135"> တစ်ခုချင်းစီကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင် >
< start="1725.957" dur="1.334"> သူတို့ကို။ >
< start="1726.257" dur="2.002"> ငါလူတွေကိုပေးပါ >
< start="1727.424" dur="1.902"> နယူးယောက်၏ပြည်နယ်ငါ၏သောစကား >
< start="1728.393" dur="4.271"> WE အိုင်တီလုပ်နေပါတယ် >
< start="1729.46" dur="5.873"> ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အကြောင်းကို 3% အကြောင်းပြောနေတာပါ >
< start="1732.797" dur="5.138"> အပြုသဘောစမ်းသပ်သောလူများ >
< start="1735.466" dur="7.04"> ငါတို့အကြောင်းကြိုးစားနေပါတယ်။ >
< start="1738.069" dur="4.771"> အများဆုံးသက်ရောက်သောပြည်နယ်များ, ငါတို့ပါ >
< start="1742.639" dur="2.803"> ၃၀၀၀၀ ။ >
< start="1742.973" dur="3.971"> NEXT နှင့်အနီးဆုံးပြည်နယ်သည် New Jersey ဖြစ်သည် >
< start="1747.078" dur="4.004"> ကယ်လီဖိုးနီးယား2။ >
< start="1747.946" dur="3.57"> ဒီဟာတကယ်ကိုသိသိသာသာ drammatic >
< start="1751.215" dur="3.303"> ကွဲပြားခြားနားမှု။ >
< start="1751.649" dur="6.306"> ဤသူကားငါဖို့စီစဉ်သောအရာဖြစ်တယ် >
< start="1754.651" dur="8.176"> နားထောင်သူမည်သူမဆို။ >
< start="1758.089" dur="5.338"> ကျွန်ုပ်တို့မှာပြIMနာဆယ်ကြိမ်ရှိပြီ >
< start="1762.96" dur="3.104"> ဂျာစီအသစ်။ >
< start="1763.561" dur="4.437"> ကျွန်ုပ်တို့ကိုကာလီဖိုးနီးယားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည် >
< start="1766.197" dur="2.302"> သောစည်းကမ်းချက်များ၌ပို။ သော >
< start="1768.132" dur="3.47"> လူ ဦး ရေ။ >
< start="1768.633" dur="6.839"> ကျွန်တော်တို့မှာပြTနာ 15 ကြိမ်ရှိတယ်။ >
< start="1771.736" dur="4.737"> ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးကြည့်ရအောင် >
< start="1775.606" dur="5.606"> အဘယ်ကြောင့်။ >
< start="1776.607" dur="5.172"> ဘာကြောင့်နယူးယောက်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ >
< start="1781.345" dur="3.504"> နံပါတ်အမြင့်။ >
< start="1781.912" dur="4.171"> ထပ်မံ WE စုစုပေါင်း >
< start="1784.982" dur="2.336"> ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာနားလည်ဖို့။ >
< start="1786.217" dur="3.637"> ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့် NEW YORK ဘာကြောင့်လဲ >
< start="1787.451" dur="4.605"> နံပါတ်တစ်ခု? >
< start="1789.988" dur="4.271"> ဤရွေ့ကား, ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်။ >
< start="1792.19" dur="5.204"> ငါသေချာအောင်လို >
< start="1794.392" dur="3.336"> ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှသီးခြားအချက်အလက် >
< start="1797.528" dur="4.404"> အမြင်။ >
< start="1797.861" dur="5.306"> ငါပေးသောအချက်အလက်များ >
< start="1802.066" dur="2.569"> ငါနှင့်ဆန့်ကျင်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံး >
< start="1803.3" dur="2.403"> DAY မှနေ့ရက်များအပြောင်းအလဲများ။ >
< start="1804.769" dur="3.036"> ငါမူကားငါအတိအကျငါပေးမည် >
< start="1805.837" dur="3.936"> တစ်နေ့နေ့အခြေခံရှိခြင်း။ >
< start="1807.939" dur="4.338"> အသစ်သောအဘယ်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင် >
< start="1809.907" dur="4.805"> YORK ၌များစွာသောကိစ္စရပ်များရှိသည် >
< start="1812.41" dur="4.204"> အခြားပြည်နယ်တခုခုရှိပါသလား။ >
< start="1814.845" dur="5.105"> ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲ >
< start="1816.748" dur="4.07"> သငျသညျ၏နံပါတ် 15 ကြိမ်ပါပဲ >
< start="1820.084" dur="3.637"> ကယ်လီဖိုးနီးယား။ >
< start="1820.952" dur="4.57"> ငါဆိုလိုတာကတကယ်ပင်အငြင်းပွားနေသည် >
< start="1823.854" dur="2.803"> သင်စဉ်းစားသည့်အခါ။ >
< start="1825.656" dur="4.004"> အချိန် 30 နဲ့မက်ဆာချူးဆက် THE >
< start="1826.79" dur="5.54"> အမှုအရေအတွက်။ >
< start="1829.794" dur="3.47"> ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်သောမေးခွန်းကဘာလဲ >
< start="1832.463" dur="1.768"> လူတွေငါ့ကိုမေးကြည့်ပါ >
< start="1833.398" dur="3.269"> အဖြေနှစ်ခု။ >
< start="1834.365" dur="6.139"> အဖြေတစ်ခုကကျွန်ုပ်တို့ကကြိုဆိုပါတယ် >
< start="1836.801" dur="5.739"> ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလူများ။ >
< start="1840.638" dur="3.703"> ငါတို့ဒီမှာလာလူတွေ, ငါတို့ >
< start="1842.673" dur="3.57"> ဒီကနေလာကြတဲ့လူတွေရှိသည် >
< start="1844.475" dur="5.439"> အီတလီကနေလာတဲ့တရုတ်, >
< start="1846.377" dur="5.105"> နိုင်ငံများအားလုံးမှလာသောသူ >
< start="1850.048" dur="3.637"> ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း။ >
< start="1851.616" dur="6.206"> ကျွန်ုပ်တို့တွင်နိုင်ငံတကာခရီးသွားများရှိသည် >
< start="1853.818" dur="5.705"> တရုတ်ပြည်မှာဘယ်သူ WHO က >
< start="1857.955" dur="2.269"> ကိုရီးယားနှင့် KOREA ၌နေသော။ >
< start="1859.657" dur="3.037"> AND WHO ကဒီမှာလာကြ၏။ >
< start="1860.358" dur="3.803"> ငါ၌သံသယမရှိ >
< start="1862.827" dur="3.536"> VIRUS ဒီမှာအစောပိုင်း၌ရှိ၏ >
< start="1864.295" dur="3.737"> ငါတို့ပင် AN KNOW ။ >
< start="1866.497" dur="3.003"> ငါ၌သံသယမရှိ >
< start="1868.165" dur="4.605"> ဗိုင်းရပ်စ်ဒီမှာအစောပိုင်းကထက် >
< start="1869.634" dur="6.072"> အခြားပြည်နယ်တစ်ခုရှိခဲ့သည်။ >
< start="1872.904" dur="3.103"> သူတို့လာဒီမှာကြောင့် >
< start="1875.84" dur="1.868"> ပထမ။ >
< start="1876.14" dur="6.84"> ပထမ ဦး ဆုံးအဖြေဖြစ်ပါတယ်။ >
< start="1877.842" dur="6.106"> ဒုတိယအဖြေကြှနျုပျတို့သညျ >
< start="1883.113" dur="5.873"> နီးကပ်လာသည်။ >
< start="1884.082" dur="7.473"> WE နီးကပ်နေသောကြောင့်။ >
< start="1889.12" dur="5.538"> ဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့စကားပြောသနည်း >
< start="1891.688" dur="8.276"> DENSE နယ်မြေအတွင်းအိုင်တီလွှဲပြောင်း။ >
< start="1894.792" dur="5.473"> အိုင်တီ LITERALLY သောကြောင့် >
< start="1900.098" dur="3.436"> ပိတ်ပါ။ >
< start="1900.398" dur="3.503"> ငါတို့နှင့်နီးကပ်စွာနေထိုင်သောကြောင့် >
< start="1903.668" dur="0.967"> နောက်ထပ်။ >
< start="1904.035" dur="3.236"> သောကြောင့်ကျနော်တို့တစျခုနီးကပ်လာပါတယ် >
< start="1904.769" dur="6.139"> နောက်ထပ်လမ်းပေါ်မှာ။ >
< start="1907.404" dur="3.905"> ကျနော်တို့အနီးကပ်နေသောကြောင့် >
< start="1911.042" dur="1.601"> လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း။ >
< start="1911.442" dur="3.336"> သောကြောင့်ကျနော်တို့တစျခုနီးကပ်လာပါတယ် >
< start="1912.776" dur="3.804"> နောက်ထပ်ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်။ >
< start="1914.912" dur="2.302"> ကျနော်တို့နောက်ထပ်တ ဦး တည်းနီးကပ်လာပါပြီ >
< start="1916.714" dur="1.735"> စားသောက်ဆိုင်။ >
< start="1917.348" dur="4.537"> ကျနော်တို့နောက်ထပ်တ ဦး တည်းနီးကပ်လာပါပြီ >
< start="1918.582" dur="7.141"> ရုပ်ရှင်ရုံ။ >
< start="1922.019" dur="7.008"> AND ကျနော်တို့အများဆုံးထဲကတစ်ခုရှိသည် >
< start="1925.856" dur="3.538"> THE DENSE CLOSE ပတ်ဝန်းကျင် >
< start="1929.16" dur="4.037"> တိုင်းပြည်။ >
< start="1929.527" dur="8.274"> AND ဤဗိုင်းရပ်စ်ဘာလဲဆိုတာ >
< start="1933.33" dur="8.542"> အိုင်တီပြုခဲ့သောလမ်းဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ >
< start="1937.935" dur="4.338"> ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြုလုပ်သည် >
< start="1942.006" dur="3.169"> အားနည်းချက်။ >
< start="1942.406" dur="3.17"> ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြုလုပ်သည် >
< start="1945.309" dur="5.038"> အားနည်းချက်။ >
< start="1945.709" dur="5.572"> သော Spacial ပိုမိုနီးကပ်စွာကျွန်တော်တို့ကိုစေသည် >
< start="1950.481" dur="1.969"> အားနည်းချက်။ >
< start="1951.415" dur="5.106"> ဒါပေမဲ့ဒါဟာသင့်အတွက်အမှန်ပဲ >
< start="1952.583" dur="5.839"> အကြီးမြတ်ဆုံးနိုးကြားမှုသည်လည်းသင့်အတွက်ပါ >
< start="1956.654" dur="4.571"> အကြီးမြတ်ဆုံးခွန်အား။ >
< start="1958.556" dur="6.172"> နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အနီးကပ်စေသည်အရာဖြစ်တယ် >
< start="1961.359" dur="5.405"> ကျွန်ုပ်တို့ WHO သည်။ >
< start="1964.862" dur="6.439"> နယူးယောက် IS ကဘာလဲ။ >
< start="1966.898" dur="4.871"> ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြုလုပ်သောအရာဖြစ်သည် >
< start="1971.435" dur="2.402"> အထူး။ >
< start="1971.903" dur="3.436"> ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ခံမှု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တံခါးဖွင့်သည် >
< start="1973.971" dur="4.338"> အဘယ်အရာကိုအမေရိကန်အထူးစေသည်။ >
< start="1975.473" dur="3.903"> အိုင်တီကအမေရိကန်ကိုအဲဒီလိုခံစားရစေတယ် >
< start="1978.442" dur="3.737"> အခြားတယောက်ချိတ်ဆက်။ >
< start="1979.51" dur="5.572"> အိုင်တီကအမေရိကန်ကိုလက်ခံမှုဖြစ်စေသည် >
< start="1982.313" dur="5.806"> နောက်ထပ်တစ်ခု။ >
< start="1985.216" dur="6.372"> အိုင်တီစေသည်သောအနီးကပ် >
< start="1988.252" dur="8.209"> ကျွန်ုပ်တို့လူသားများကိုအသုံးပြုပါ။ >
< start="1991.722" dur="7.841"> အနီးကပ် New York က >
< start="1996.594" dur="3.703"> ငါစဉ်းစားသောလူသား >
< start="1999.696" dur="4.639"> အခြားအရာများ။ >
< start="2000.431" dur="7.107"> ကျွန်ုပ်တို့၏အနီးကပ်နီးကပ်မှုသည် >
< start="2004.468" dur="6.807"> အသိုင်းအဝိုင်း၏ခံစားချက်။ >
< start="2007.672" dur="8.341"> ငါ WHO ကတစ် ဦး ကလူနာရှိပါတယ် >
< start="2011.408" dur="5.973"> ဆက်လက်လမ်းညွှန် AND >
< start="2016.146" dur="4.004"> ဦး ဆောင်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှု။ >
< start="2017.515" dur="3.303"> သူဒီမှာနောက်ထပ်မဟုတ်ပါဘူး။ >
< start="2020.284" dur="3.604"> မင်းအတွက်။ >
< start="2020.952" dur="4.771"> သူနေဆဲငါ့အဘို့ဒီမှာ။ >
< start="2024.021" dur="6.974"> ဒါပေမဲ့သူကပိုမိုသောအရာတို့ကိုပြောခဲ့သည် >
< start="2025.857" dur="7.807"> နှင့်ပိုပြီးအလှအပထက်ပိုပြီးပို >
< start="2031.128" dur="3.871"> အခြားလူများရှိသည်။ >
< start="2033.798" dur="4.771"> သူပြောခဲ့သည်သောအရာတစျခု >
< start="2035.132" dur="6.006"> သောဤလျောက်ပတ်သည် >
< start="2038.703" dur="4.304"> ဒီနေ့ကျနော်တို့တစ် ဦး တည်း၌ယုံကြည်ကြသည် >
< start="2041.271" dur="3.638"> ဖော်ပြသောအခြေခံသဘောတရား >
< start="2043.14" dur="3.17"> ကျောင်းစာကြည့်တိုက်ထက်ပိုကောင်းတယ် >
< start="2045.042" dur="3.437"> ငါရေးလိုက်နိုင်တဲ့မိန့်ခွန်း >
< start="2046.443" dur="2.536"> ကောင်းတဲ့အစိုးရတစ်ခုဘာလုပ်သင့်လဲ >
< start="2048.613" dur="4.137"> BE ။ >
< start="2049.113" dur="5.338"> မိသားစု၏စိတ်ကူး၊ >
< start="2052.884" dur="4.837"> အကျိုးကျေးဇူးများဝေမျှခြင်းနှင့် >
< start="2054.585" dur="5.372"> လူအပေါင်းတို့၏ကောငျးကြိုးဝ။ >
< start="2057.855" dur="6.773"> နောက်ထပ်နာကျင်မှုတစ်ခုခံစားရသည်။ >
< start="2060.091" dur="6.806"> နောက်ထပ်ကောင်းချီးတစ်ခုဝေမျှပါ။ >
< start="2064.762" dur="3.737"> အမှန်တကယ်, ရိုးသားဖြောင့်မတ် >
< start="2067.03" dur="5.506"> လူမျိုးနှင့်လိင်ဆိုင်ရာရိုသေလေးစားမှုမရှိ >
< start="2068.632" dur="5.172"> OR ပထဝီဝင်သို့မဟုတ်နိုင်ငံရေး >
< start="2072.67" dur="2.368"> အထောက်အပံ့။ >
< start="2073.938" dur="4.571"> New York က။ >
< start="2075.172" dur="7.14"> ဒါကအနီးကပ်သော >
< start="2078.642" dur="6.406"> မိသားစု၏အယူအဆ, အသိုင်းအဝိုင်း။ >
< start="2082.446" dur="2.903"> NEW YORK အသစ်လုပ်သောအရာ >
< start="2085.182" dur="3.504"> YORK ။ >
< start="2085.482" dur="4.171"> ပြီးတော့ဒါက US ကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲ >
< start="2088.819" dur="3.571"> ဒီမှာအားနည်းချက်။ >
< start="2089.787" dur="5.505"> ဒါပေမဲ့ဒီနည်းကိုနီးကပ်စွာ >
< start="2092.523" dur="5.706"> နှင့်သောချိတ်ဆက် >
< start="2095.425" dur="5.039"> လူသားနှင့်ထိုမျှဝေသော >
< start="2098.362" dur="4.771"> ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးသောအစွမ်းသတ္တိဖြစ်ပါတယ်။ >
< start="2100.598" dur="5.505"> AND သွားမယ့်အရာဖြစ်တယ် >
< start="2103.266" dur="5.773"> နေ့၏အဆုံးကိုကျော်လွန်။ >
< start="2106.236" dur="4.805"> ငါသည်သင်တို့ကိုကတိ။ >
< start="2109.173" dur="2.669"> နယူးယောက်ဘယ်လောက်မြင်လဲ >
< start="2111.175" dur="2.436"> တုံ့ပြန်။ >
< start="2111.976" dur="2.835"> နယူးယောက်တွေဘယ်လိုမြင်လဲ >
< start="2113.744" dur="4.672"> နောက်ထပ်တစ်ခုကုသ။ >
< start="2114.945" dur="3.871"> ငါ 6000 စိတ်ကျန်းမာရေးကြည့်ရှုပါ >
< start="2118.549" dur="2.736"> စေတနာ့ဝန်ထမ်း။ >
< start="2118.949" dur="3.77"> ငါ 400,000 ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ကြည့်ပါ >
< start="2121.418" dur="2.703"> တက်န်အလုပ်သားများ။ >
< start="2122.853" dur="2.336"> ငါ့ကိုခေါ်တဲ့ရောင်းချသူတွေကိုမြင်လိုက်ရ >
< start="2124.254" dur="2.336"> ငါကူညီနိုင်ဟုဆိုသည်။ >
< start="2125.323" dur="3.636"> New York က။ >
< start="2126.724" dur="8.408"> New York က။ >
< start="2129.093" dur="6.473"> နှင့်ငါ့သူငယ်ချင်း IS >
< start="2135.265" dur="1.135"> IN-DEFEATABLE ။ >
< start="2135.699" dur="2.87"> AND ငါအချို့နည်းလမ်းတွေထဲမှာဝမ်းမြောက်မိပါတယ် >
< start="2136.533" dur="4.071"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအခြေအနေနှင့်ပထမ ဦး ဆုံးပါ >
< start="2138.702" dur="3.837"> ငါတို့အောင်မြင်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် >
< start="2140.738" dur="3.069"> AND ကျနော်တို့အခြားပြသပါလိမ့်မယ် >
< start="2142.672" dur="3.204"> ဒီနိုင်ငံဖြတ်ကျော်အသိုင်းအဝိုင်း >
< start="2143.94" dur="4.538"> ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ >
< start="2146.01" dur="5.305"> သူတို့အဘို့ထိုအရပ်၌ရှိပါလိမ့်မယ်။ >
< start="2148.612" dur="7.174"> ငါတို့သူတို့အဲဒီမှာဖြစ်ချင်တယ်။ >
< start="2151.448" dur="7.574"> ငါတို့သည်တစ်ခုချင်းစီရှိလိမ့်မည် >
< start="2155.92" dur="4.404"> အစဉ်အမြဲငါတို့ဖြစ်သကဲ့သို့အခြား။ >
< start="2159.156" dur="6.039"> မေးခွန်းများရှိပါသလား? >
< start="2160.458" dur="9.876"> >> နိုင်ငံတော်သည်မည်သူမည်ဝါဆုံးဖြတ်ပေးသည် >
< start="2165.329" dur="5.739"> အိုင်တီကြွလာသောအခါ ဦး စားပေး IS >
< start="2170.468" dur="3.102"> လေဝင်လေထွက်? >
< start="2171.202" dur="5.605"> >> ကျနော်တို့အဘယ်သူမျှမ antipipation ရှိသည် >
< start="2173.703" dur="5.139"> VENTILATOR ဦး စားပေးရှိသည် >
< start="2176.94" dur="2.803"> အသုံးပြုမှု။ >
< start="2178.976" dur="2.035"> ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်မှာ VENTILATOR တစ်ခုရှိရန်ဖြစ်သည် >
< start="2179.877" dur="3.37"> တစ်ယောက်လိုအပ်သူ။ >
< start="2181.145" dur="6.139"> >> သင်သောအမေရိကန် NUMBERS ပြသခဲ့သည် >
< start="2183.38" dur="5.306"> သင်အကောင်းမြင်ဖြစ်ကြောင်းပြပါ >
< start="2187.417" dur="2.136"> ၁၅၀၀၀ ကို AT ပြီးတော့မင်းကမင်းကိုပြောခဲ့တယ် >
< start="2188.819" dur="2.903"> လိုအပ်ပါတယ် ၄၀၀၀၀ ။ >
< start="2189.686" dur="3.237"> SO တချို့ရဲ့ NITTY- GRITTY မေးခွန်းများ, >
< start="2191.855" dur="2.603"> အဲဒီ VENTILATORS ဘယ်မှာလဲ >
< start="2193.057" dur="3.303"> FEMA ကနေလာကြပါပြီ။ >
< start="2194.592" dur="3.203"> သင်သည်မည်သည့်ကတိကဝတ်မှရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါ >
< start="2196.493" dur="3.07"> သူတို့လိမ့်မယ်အဖြူရောင်အိမ် >
< start="2197.928" dur="4.905"> သော 4000 ထက်ပို။ ပေးပို့ပါ >
< start="2199.696" dur="5.573"> သူတို့ကတိကဝတ်ပြုပြီးပြီလား >
< start="2202.966" dur="4.005"> နှင့်ရောက်ရှိရန်အစီအစဉ်ကဘာလဲ >
< start="2205.402" dur="2.203"> သောတူညီသောလမ်းအရေအတွက် >
< start="2207.104" dur="4.337"> ဆေးရုံတင်များ၊ >
< start="2207.738" dur="5.172"> >> ကောင်းတစ် ဦး သောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ >
< start="2211.575" dur="3.003"> WE ပထမ ဦး ဆုံး VENTILATORS >
< start="2213.043" dur="3.471"> လာကြလိမ့်မယ် >
< start="2214.711" dur="4.505"> STOCKPILE AND ငါမှစွန့်ပစ်ပါလိမ့်မယ် >
< start="2216.647" dur="4.17"> ငါတို့လိုအပ်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်။ >
< start="2219.35" dur="2.135"> လိုအပ်ချက်အပေါ် LITERALLY ဖျက်ပစ် >
< start="2220.951" dur="3.27"> အခြေခံ, မှန်? >
< start="2221.619" dur="4.237"> တစ် ဦး ကဆေးရုံတက်ခေါ်လျှင် >
< start="2224.354" dur="4.405"> WE Overlay, ဟုဆိုလိမ့်မယ် >
< start="2225.989" dur="5.439"> ဖျက်သိမ်းရန်အပြုသဘောဆောင်ပါ။ >
< start="2228.893" dur="4.17"> ကုတင်၏တိုးပွားလာ IS >
< start="2231.561" dur="3.17"> ငါတို့ထိန်းချုပ်မှုအတွင်း, ညာ? >
< start="2233.197" dur="2.97"> ဒီနေရာမှာအိတ်ဆောင်ရှိပါတယ်။ >
< start="2234.865" dur="2.603"> သူတို့သည်ဆေးရုံတင်မဟုတ်ပါ >
< start="2236.3" dur="2.169"> သင်မည်သို့ပုံကိုသိရန်ရှိသည် >
< start="2237.601" dur="2.402"> သူတို့ကိုဆေးရုံတင်များသို့ပြောင်းပါ >
< start="2238.602" dur="3.037"> တဖန်သင်တို့ပုံကိုသိရန်ရှိသည် >
< start="2240.136" dur="3.704"> သူတို့ကိုရဖို့, ဒါပေမယ့် WE >
< start="2241.772" dur="4.972"> အိပ်ရာ။ >
< start="2243.974" dur="4.004"> ဒါကြောင့်တစ် ဦး Logistic IS >
< start="2246.877" dur="2.937"> လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာအခက်အခဲ၊ >
< start="2248.111" dur="2.703"> သင်တစ် ဦး ထဲသို့နံနက်အခန်းသို့လှည့် >
< start="2249.947" dur="2.669"> ဆေးရုံတင်။ >
< start="2250.948" dur="2.602"> ဆေးရုံတွင်မည်ကဲ့သို့တည်ဆောက်မည်နည်း >
< start="2252.749" dur="2.436"> JAVITS ဗဟို။ >
< start="2253.684" dur="4.771"> VENTILATORS ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ >
< start="2255.319" dur="4.604"> သူတို့ကိုငါမရှိကြပါဘူး။ >
< start="2258.589" dur="2.969"> ဖက်ဒရယ်အစိုးရမရှိပါ >
< start="2260.056" dur="5.439"> သူတို့ကိုရှိသည်။ >
< start="2261.692" dur="4.104"> ဘယ်သူမှ၏ရှယ်ယာရှင်များရှိသည် >
< start="2265.629" dur="1.735"> ဤ။ >
< start="2265.929" dur="2.67"> ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှိခဲ့ပါတယ် >
< start="2267.497" dur="2.603"> သူတို့ကိုတူညီသောလမ်းကိုရယူပါ >
< start="2268.732" dur="4.037"> သူတို့ကိုဝယ်ယူရန်ရှိသည်။ >
< start="2270.234" dur="5.038"> ငါအဖြူရောင်အိမ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေပါတယ် >
< start="2272.903" dur="4.971"> ရယူရန်တီထွင်မှုနည်းလမ်းများ >
< start="2275.406" dur="4.838"> သူတို့ကို, RAMP ကုမ္ပဏီများရယူ >
< start="2278.008" dur="5.239"> UP, ကုမ္ပဏီများရယူခြင်း >
< start="2280.377" dur="7.374"> အခြားစက်များပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း >
< start="2283.38" dur="5.339"> လှိမ့်ဆင်းသက်လာနည်းစနစ်, >
< start="2287.885" dur="4.971"> ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှသူတို့ကိုရှိသည်။ >
< start="2288.853" dur="5.305"> ဆေးကုသမှုခံယူစရာမရှိပါ >
< start="2292.99" dur="3.103"> ဝါသနာတူနိုင်သလားဝါရှင်တန် >
< start="2294.291" dur="3.237"> သူတို့ကိုပေါ်လာပါစေ။ >
< start="2296.227" dur="3.77"> >> 2015 ခုနှစ်အစီရင်ခံစာရှိခဲ့သည် >
< start="2297.661" dur="4.137"> အကြံပြုထားသည့်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်တစ် ဦး >
< start="2300.13" dur="2.903"> Task Force ကအသစ်ဖြစ်နိုင်သည်အကြံပြုသည် >
< start="2301.932" dur="1.502"> YORK သည်၎င်း၏တိုးမြှင့်ရမည် >
< start="2303.167" dur="2.101"> STOCKPILE ။ >
< start="2303.567" dur="2.002"> သောမအကြောင်းပြချက် >
< start="2305.402" dur="1.569"> ပြီးပြီလား >
< start="2305.735" dur="2.47"> >> တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး, Jimmy >
< start="2307.104" dur="2.535"> AND သင်အိုင်တီသိတယ်။ >
< start="2308.339" dur="4.57"> အချက်အလက်များစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ >
< start="2309.773" dur="6.34"> အကြံပေးကော်မရှင်ရှိခဲ့သည် >
< start="2313.043" dur="7.708"> ဘဝဟုခေါ်ဝေါ်သောဥပဒေ >
< start="2316.247" dur="11.878"> အကယ်၍ သင်ပြောခဲ့သည့် ၂၀၁၅ ဇယား >
< start="2320.885" dur="8.174"> THE 1918 စပိန် FLU ရှိခဲ့ပါတယ် >
< start="2328.258" dur="1.669"> ကူးစက်ရောဂါ, သင်က X နံပါတ်လိုအပ်နိုင်ပါသည် >
< start="2329.192" dur="5.172"> VENTILATORS ၏။ >
< start="2330.06" dur="5.906"> ယူနိုက်တက်စတိတ်မရှိပါ >
< start="2334.498" dur="4.237"> ၀ န်ထမ်းများအားလုံလောက်သောအချက်များ >
< start="2336.099" dur="4.104"> စပိန် FLU ကူးစက်မှုသည်။ >
< start="2338.869" dur="3.737"> ဖက်ဒရယ်အစိုးရမ >
< start="2340.337" dur="2.936"> 1918 FOR ဝယ်ယူ ventilator >
< start="2342.739" dur="3.204"> စပိန် FLU ကူးစက်မှု။ >
< start="2343.407" dur="4.871"> ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်သူမှ >
< start="2346.076" dur="8.108"> တစ် ဦး အတွက်ပြင်ဆင်မှုအတွက် VENTILATORS >
< start="2348.412" dur="7.541"> 1918 စပိန် FLU ကူးစက်မှု။ >
< start="2354.318" dur="3.503"> >> သင်သောအမှု၏နံပါတ် >
< start="2356.086" dur="2.102"> အစီရင်ခံစာမည်မျှရှိသည် >
< start="2357.955" dur="2.603"> ဖြေရှင်းပြီး? >
< start="2358.322" dur="4.437"> ဥပမာ WHO ကအမျိုးသမီးကိုဥပမာ >
< start="2360.691" dur="4.972"> အိုင်ယာလန်မှ, သူမယခုရှင်းလင်းစွာ IS >
< start="2362.892" dur="4.038"> ဖြစ်ရပ်များကိုသင်အစီရင်ခံနေဆဲလား >
< start="2365.796" dur="3.603"> သူတို့ဖြေရှင်းပြီးပြီလား >
< start="2367.064" dur="4.972"> >> တိုတောင်းသောအဖြေဟုတ်သည်။ >
< start="2369.533" dur="3.303"> သင်သိသလား၊ ZUCKER THE >
< start="2372.169" dur="2.836"> မည်သူဖြေရှင်းခဲ့သနည်း။ >
< start="2372.97" dur="5.505"> >> WE ရာနှင့်ရာပေါင်းများစွာရှိသည် >
< start="2375.139" dur="4.737"> ထွက်ခွာသွားသောလူများ၏ >
< start="2378.609" dur="2.502"> ဆေးရုံနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီ >
< start="2380.01" dur="2.669"> ဖြေရှင်းပြီးပြီများစွာသော >
< start="2381.245" dur="3.403"> ဘယ်တော့မှမသောအခြားပုဂ္ဂိုလ်များ >
< start="2382.813" dur="3.303"> ဆေးရုံသို့ကျွန်တော်တို့ရောက်လာသည် >
< start="2384.782" dur="4.403"> သင်အတိအကျရရှိရန်ကြိုးစားနိုင်သလား >
< start="2386.249" dur="5.673"> သောအပေါ်နံပါတ်။ >
< start="2389.319" dur="4.138"> >> သင်မူကားပြောင်းလဲနေကြသည် >
< start="2392.055" dur="3.571"> အမေရိကန်ကိုပြောပြ KRITERIA နှင့် County >
< start="2393.59" dur="4.071"> အကယ်၍ စည်းမျဉ်းများသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားလျှင်၊ >
< start="2395.759" dur="2.503"> သူတို့ပြောင်းလဲခဲ့ - >
< start="2397.794" dur="1.435"> >> မှန်။ >
< start="2398.395" dur="2.002"> >> သင်ဘာတွေအကြောင်းပြောဆိုနိုင်သလား >
< start="2399.362" dur="3.17"> သောနောက်ကွယ်မှ? >
< start="2400.531" dur="3.67"> >> ကောင်းပြီ, ငါတို့ CDC နောက်သို့ပါတယ် >
< start="2402.666" dur="4.037"> လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များ >
< start="2404.334" dur="3.871"> ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးပြီးနောက်, အကယ်။ သင် >
< start="2406.837" dur="2.368"> ခုနစ်ပြီးနောက်အပြုသဘောဆောင်ခဲ့ကြသည် >
< start="2408.338" dur="2.836"> အပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့် AS ၏နေ့ရက်များ >
< start="2409.339" dur="3.403"> သင် 72 ထက်ပိုနေသမျှကာလပတ်လုံး 72 >
< start="2411.307" dur="7.608"> ရောဂါလက္ခဏာများမရှိသည့်နာရီများ၊ >
< start="2412.876" dur="8.575"> အိမ်သို့ပြန်သွားနိုင်သလား။ >
< start="2419.049" dur="2.703"> >> ဤအရာသည်အကောင်းဆုံးသောအချက်အလက်များဖြစ်သည်။ >
< start="2421.585" dur="1.902"> အိုကေလား? >
< start="2421.885" dur="5.472"> ဒါက Johns Hopkins ။ >
< start="2423.621" dur="4.437"> တရုတ်နိုင်ငံမှဖြစ်ရပ်တိုင်းသည်။ >
< start="2427.491" dur="2.803"> 435,000 ။ >
< start="2428.192" dur="3.536"> 19,000 သေဆုံးပြီးနောက်, ငါ >
< start="2430.427" dur="2.736"> သင်လုပ်နိုင်သည့်ငွေပမာဏများ >
< start="2431.862" dur="3.604"> Donuts, သင်သည်ထိုသူတို့ကြည့်ရှုပါ >
< start="2433.297" dur="3.636"> ၁၉၀၀၀၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ >
< start="2435.599" dur="3.47"> နှိုင်းယှဉ် IMMUNE စနစ်, ET >
< start="2437.067" dur="2.536"> CETERA ။ >
< start="2439.203" dur="0.734"> ပြန်လည်ထူထောင်ရေး, 100,000 ။ >
< start="2439.737" dur="1.734"> ညာဘက်? >
< start="2440.07" dur="3.837"> ရိုးရိုး ၂၅% ။ >
< start="2441.605" dur="5.339"> ဆိုင်းငံ့ထား 300,000 ။ >
< start="2444.041" dur="5.772"> ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပါတယ်, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးများမှာ >
< start="2447.077" dur="5.973"> ပြန်လည်ထူထောင်ရေးများ >
< start="2449.947" dur="6.072"> သင်ရပြီ - ငါသိတဲ့လူတွေ၊ >
< start="2453.183" dur="4.671"> အပတ်နှစ်ခုအတွက်အိမ်မှာနေကြတယ်၊ >
< start="2456.152" dur="3.504"> ပြီးတော့သူတို့အစမ်းစစ်ကြော။ >
< start="2457.988" dur="3.17"> သငျသညျနှစ်ခုထဲမှာအစမ်းစမ်းသပ်နိုင်သလား >
< start="2459.79" dur="3.27"> သုံးပတ်အတွင်းအပတ်များ၊ သင်လုပ်နိုင်သည် >
< start="2461.291" dur="2.369"> ပြီးနောက်တစ်ပတ်ထဲမှာစမ်းသပ်မှုအပျက် >
< start="2463.193" dur="3.27"> သင်၌ရှိသည်။ >
< start="2463.794" dur="4.504"> သောသူသည်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည် >
< start="2466.596" dur="2.836"> OVERWHELMING လူတွေ။ >
< start="2468.432" dur="2.535"> ဒီနည်းကိုသောအခါအကြီးမားဆုံးနံပါတ် >
< start="2469.566" dur="2.903"> DONE AND ကျနော်တို့တကယ်ပဲပြန်သွားနိုင်သလား >
< start="2471.101" dur="3.304"> နှင့်စမ်းသပ်မှု, အကြီးမားဆုံးနံပါတ် IS >
< start="2472.602" dur="4.071"> အိုင်တီ၌ရှိသောလူဖြစ်လာမယ့် >
< start="2474.538" dur="19.453"> ဘယ်သူ့ကိုမှမသိတဲ့ဘယ်သူ့ကိုကူညီဖြေရှင်းပေးခဲ့သူ >
< start="2476.807" dur="17.184"> အိုင်တီ။ >
< start="2537.634" dur="4.271"> >> ကျွန်ုပ်တို့သည် ပို၍ ICU ကုတင်များကိုဖန်တီးနိုင်သည် >
< start="2540.137" dur="4.07"> အိမ်၌ VENTILATORS နှင့်အတူ။ >
< start="2542.039" dur="6.573"> ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ 14,000 VENTILATORS ရှိသည်။ >
< start="2544.341" dur="9.442"> ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ် >
< start="2548.746" dur="7.173"> လေဝင်လေထွက်ကုတင် ၁၄၀၀၀ ကိုဖန်တီးပါ >
< start="2553.917" dur="2.769"> ကျနော်တို့ဆန့် Bump ခဲ့ကြသည် >
< start="2556.053" dur="1.501"> စွမ်းဆောင်ရည်, မှန်ကန်သော? >
< start="2556.82" dur="3.069"> >> မှန်ကန်သော။ >
< start="2557.688" dur="3.97"> ကာလပတ်လုံး ICU အိပ်ရာ >
< start="2560.423" dur="2.269">F $ !, DOI လက်ျာဘက်၌နေ>
< start="2561.792" dur="3.203"> NOW ကကွဲပြားခြားနားသည်။ >
< start="2562.826" dur="4.237"> တစ် ဦး နှင့်အတူ SO ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအခန်း >
< start="2565.129" dur="6.806"> VENTILATOR ဆိုတာ ICU BED ပါ။ >
< start="2567.197" dur="7.24"> ဒါအတိအကျနံပါတ်များပဲ >
< start="2572.069" dur="2.669"> ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီသတင်းအချက်အလက်ရှိသည် >
< start="2574.571" dur="7.908"> ကောင်းပြီ။ >
< start="2574.871" dur="12.579"> >> ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းရှိပါတယ် >
< start="2582.613" dur="7.44"> တိုးချဲ့ဖို့စီစဉ်ထားသလား >
< start="2587.584" dur="5.072"> နံပါတ်? >
< start="2590.487" dur="4.738">ထပ် 1.2 သန်းသန်းထပ်တိုး >
< start="2592.79" dur="3.903"> လာရန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူများ >
< start="2595.359" dur="4.637"> New York State နှင့်သင်တို့ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ် >
< start="2596.827" dur="5.138"> ဤနံပါတ်များကိုတင်ပြခဲ့သည် >
< start="2600.13" dur="3.303"> ဒီနေ့အထူး AS တိုးပွားလာ >
< start="2602.099" dur="3.069"> ခေါ်သွားကြသည်ခေါ်ဆိုမှု။ >
< start="2603.567" dur="5.672"> အိုင်တီရုံပြည်နယ်မဟုတ်ပါဘူး။ >
< start="2605.302" dur="8.007"> ငါတို့သည်လည်းပြည်နယ်ထဲကတောင်းဆိုနေတာ >
< start="2609.373" dur="7.307"> အငြိမ်းစားများနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရှိခဲ့သည် >
< start="2613.443" dur="4.805"> လုပ်သားများနှင့်သူတို့အတွက်စီစဉ် >
< start="2616.814" dur="3.703"> ဒီနေရာမှာလာရန်။ >
< start="2618.382" dur="9.475"> >> RESရိယာRESရိယာရှိခဲ့သည်။ >
< start="2620.651" dur="7.94"> >> နောက်သို့ Piggy့>
< start="2627.991" dur="3.203"> မေးခွန်း။ >
< start="2628.725" dur="5.272"> >> သင်အစီရင်ခံနေသည်ကိုမြင်ပါသလား >
< start="2631.328" dur="5.004"> သူတို့အားပြီးသားတုံ့ပြန်? >
< start="2634.131" dur="9.509"> >> ငါသူတို့အား NUMERER တုံ့ပြန် >
< start="2636.466" dur="11.278"> ငါတို့ရှိသည်။ >
< start="2643.774" dur="4.404"> နှင့် ICU အိပ်ရာ၏နံပါတ် >
< start="2647.878" dur="2.268"> ပိုးသတ်ဆေး။ >
< start="2648.311" dur="5.372"> နံပါတ်တစ်ပါပဲ။ >
< start="2650.28" dur="6.473"> အကယ်၍ သင်ကကျွန်ုပ်တို့အား ventilator များယူလာပါက >
< start="2653.817" dur="7.574"> သူတို့ကိုလက်၌ထည့်ပါ >
< start="2656.887" dur="7.44"> နံပါတ်တက်လာသည့်ကုတင်။ >
< start="2661.525" dur="7.874"> ကျနော်တို့သူတို့ကိုရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ >
< start="2664.461" dur="6.706"> >> AND STOCK လိပ်ခေါင်း။ >
< start="2669.533" dur="2.902"> ဒီမှာပုံ STOCK ။ >
< start="2671.301" dur="4.638"> အကွိမျမြားစှာ STOCK လိပ်ခေါင်းရှိတယ် >
< start="2672.569" dur="5.939"> ငါတို့လုပ်သော။ >
< start="2676.073" dur="4.303"> ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာ Multiple Stock Stores ရှိခဲ့တယ်။ >
< start="2678.642" dur="2.535"> WE ဤ Multiple ၌ထားရှိမည် >
< start="2680.51" dur="2.135"> STOCK ပုံ။ >
< start="2681.311" dur="2.602"> ကျနော်တို့မြို့တော်သို့သွားခဲ့ကြတယ်။ >
< start="2682.779" dur="4.104"> WE ရှည်လျားသော STOCK ပုံရှိသည် >
< start="2687.017" dur="5.438"> AND အိုင်တီအိုင်၌ပုံနှင့် STOCK အိုင်တီ >
< start="2689.753" dur="5.071"> ငါ၏မြေအောက်ခန်းထဲမှာ STOCK ပုံ။ >
< start="2692.589" dur="4.538"> >> သောအုပ်ချုပ်။ >
< start="2694.958" dur="5.038"> >> WE ICU ရှိခဲ့ပါတယ်။ >
< start="2697.261" dur="3.903"> WE ထဲမှာ VENTILATORS ရှိခဲ့ပါတယ် >
< start="2700.13" dur="2.369"> STOCK ပုံ။ >
< start="2701.298" dur="1.568"> သူတို့ကိုသူတို့ကိုမယူကြပြီ >
< start="2702.633" dur="1.701"> ဆေးရုံ။ >
< start="2703" dur="6.606"> ကျွန်မမှာဆေးရုံခေါ်ဝေါ်ခြင်းမရှိပါ >
< start="2704.468" dur="6.105"> ငါ VENTILED လိုအပ်ကြောင်းပြောခဲ့သည် >
< start="2709.74" dur="2.201"> ခုတင်။ >
< start="2710.707" dur="3.637"> >> ထုတ်ယူခြင်း။ >
< start="2712.075" dur="3.336"> သူတို့စွန့်ပစ်ခံနေရသည် >
< start="2714.478" dur="6.673"> ရှေ့တန်း။ >
< start="2715.845" dur="6.307">၏အစိတ်အပိုင်းများ■>
< start="2721.285" dur="10.843"> ဆေးရုံ။ >
< start="2722.286" dur="13.913"> >> သင်ငါ့ကိုဆုံးမနိုင်သလား။ >
< start="2732.262" dur="5.906"> ငါသူတို့မယုံကြည်ကြဘူး >
< start="2736.333" dur="5.004"> ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ >
< start="2738.302" dur="5.571"> သူတို့ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုသီးသန့်ထား။ >
< start="2741.471" dur="5.639"> အသစ်သောကုတင်များအတွက်သင်လိုအပ်သည်။ >
< start="2744.007" dur="6.306"> အခုသင် 200 လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် >
< start="2747.244" dur="6.239"> ကုတင်သို့မဟုတ်သင်တစ် ဦး ဆေးရုံရှိ >
< start="2750.447" dur="5.905"> အလုပ်သမားရှားပါးမှုရှိသည် >
< start="2753.617" dur="4.737"> နာရီနှင့်နာမကျန်းဖြစ်သောကြောင့်။ >
< start="2756.486" dur="5.439"> ဒါပေမဲ့ Jim, ငါကျနော်တို့မယုံပါဘူး >
< start="2758.488" dur="4.838"> NOW ကယာယီစပါးကျီ။ >
< start="2762.059" dur="3.703"> >> သောမှန်ကန်သော။ >
< start="2763.46" dur="5.705"> >> လူနာစိုးရိမ်ပူပန်ရပါမည် >
< start="2765.896" dur="6.239"> ပါဝင်ပတ်သက်စည်းမျဉ်းအကြောင်း >
< start="2769.299" dur="3.27"> ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုသမှုနှင့် >
< start="2772.269" dur="1.434"> စည်းမျဉ်း။ >
< start="2772.702" dur="1.702"> >> ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမေးခွန်းများကိုကြည့်ရှုပါ >
< start="2773.837" dur="2.002"> ကောင်းပြီ။ >
< start="2774.538" dur="5.972"> အချို့သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါတယ် >
< start="2775.973" dur="6.572"> ကျနော်တို့ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းထမြောက်ခဲ့ကြ >
< start="2780.644" dur="4.003"> အရင်ဖိအားပေးအစည်းအဝေးတွေမှာ။ >
< start="2782.679" dur="3.203"> ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းမျဉ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုသင့်သည် >
< start="2784.781" dur="2.335"> စည်းမျဉ်းများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် >
< start="2786.016" dur="6.606"> အညီဒီတော့ငါတို့လုပ်မယ့် >
< start="2787.25" dur="6.74"> အဖြစ်ကောင်းစွာ။ >
< start="2792.756" dur="3.269"> ငါနှင့်အတူဖုန်းပေါ်မှာရှိ၏ >
< start="2794.124" dur="3.703"> ဆေးရုံအုပ်ချုပ်ရေးမှူး။ >
< start="2796.159" dur="4.371"> ကျန်းမာရေး ဦး စီးဌာန - THE >
< start="2797.961" dur="5.305"> ကျန်းမာရေး ဦး စီးဌာနရှိခဲ့ပါတယ် >
< start="2800.664" dur="4.103"> ပြေးရန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ >
< start="2803.4" dur="3.303"> ယူနိုက်တက်တွင်အကောင်းဆုံးကျန်းမာရေးစနစ် >
< start="2804.901" dur="6.573"> အမေရိကန်။ >
< start="2806.837" dur="6.139"> ထိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအိုင်တီလုပ်ပါ >
< start="2811.608" dur="5.472"> စည်းမျဉ်းများတစ်ခါတစ်ရံတွင်နိုင်ပါတယ် >
< start="2813.11" dur="8.207"> အမြန်လမ်း၏ GET AND >
< start="2817.214" dur="6.639"> လုပ်ဆောင်မှုနှင့်လှုပ်ရှားမှု။ >
< start="2821.451" dur="3.303"> ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီဖြစ်ရပ်တွင်ပြောကြားခဲ့သည် >
< start="2823.987" dur="2.802"> လျှော့ပေါ့သွား။ >
< start="2824.888" dur="4.17"> သူတို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအများအပြား >
< start="2826.923" dur="4.037"> တက်နိုင်သလား, သူတို့သည်တိုးပွားလာနိုင်ပါတယ် >
< start="2829.192" dur="4.304"> စွမ်းရည်, သင်သိတစ် ဦး ကမေးတယ် >
< start="2831.094" dur="5.405"> နှစ်ဆစွမ်းရည်မှဆေးရုံ။ >
< start="2833.63" dur="3.303"> ကျွန်ုပ်တို့တွင်အာကာသအကျယ်အ ၀ န်းရှိသည် >
< start="2836.633" dur="2.002"> စည်းမျဉ်းများ။ >
< start="2837.066" dur="10.077"> ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လိုအပ်သည် >
< start="2841.237" dur="6.173">81çw NG81BI သို့ သူတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ >
< start="2847.277" dur="6.139"> လုပ်ပါ >
< start="2847.544" dur="8.608"> >> ငါရှုပ်ထွေးတယ်။ >
< start="2853.55" dur="5.572"> ငါ New York နဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင် >
< start="2856.286" dur="3.237"> စီးတီးပေမယ့် REICHERS NEW အားဖြင့်ပြေး >
< start="2859.256" dur="4.47"> York City ။ >
< start="2859.656" dur="5.205"> >> သင်တစ် ဦး ပွိုင့်ရှိနိုင်ပါသည်။ >
< start="2863.86" dur="2.436"> >> နယူးယောက်မြို့ပြီးပြီ >
< start="2864.995" dur="4.037"> သူတို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်နေတာ။ >
< start="2866.43" dur="6.105"> နယူးယောက်မြို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ် 77 >
< start="2869.166" dur="3.703"> တစ်နေ့တာအတွက်အချိန်။ >
< start="2872.669" dur="5.538"> >> 78 ။ >
< start="2873.002" dur="6.34"> >> NO ။ >
< start="2878.341" dur="2.669"> >> ငါနိုင်သလား။ >
< start="2879.476" dur="1.868"> သင်တစ် ဦး ကွန်ဂရက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ် >
< start="2881.144" dur="2.969"> ပုဂ္ဂိုလ်။ >
< start="2881.477" dur="4.939"> ခင်ဗျားမှာစီနီယာတစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ် >
< start="2884.247" dur="4.438"> ထိုသူအပေါင်းတို့နှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ >
< start="2886.55" dur="2.536"> ဝါရှင်တန်ကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ် >
< start="2888.819" dur="3.035"> BUREAUCRACY ။ >
< start="2889.219" dur="4.537"> ကိုယ်အဲဒီမှာရှိနေတယ်။ >
< start="2891.988" dur="2.903"> ဒါပေမဲ့ငါရှိစဉ်အခါ, ဘီလ်ဖြတ်သန်း >
< start="2893.89" dur="3.003"> အတွင်းရေးမှူး။ >
< start="2895.025" dur="4.237"> ဘယ်လောက်ခက်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်ငါလည်းသိတယ် >
< start="2897.027" dur="2.536"> Stak ဘယ်လောက်မြင့်သလဲဆိုတာ KNOW >
< start="2899.396" dur="5.038"> ဒီမှာ။ >
< start="2899.696" dur="6.172"> သင်ဆုံးရှုံးမှုကိုကြည့် >
< start="2904.568" dur="2.201"> ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး >
< start="2906.002" dur="3.77"> ငါ့ကိုအကြောင်းပြောနေတာ။ >
< start="2906.903" dur="5.105"> နိုင်ငံပိုင်ဘတ်ဂျက်ကိုသင်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်သနည်း >
< start="2909.906" dur="3.637"> အကျိုးကျေးဇူးများဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူ။ >
< start="2912.142" dur="2.936"> သူကောင်းပြီဟုဆိုခဲ့သည် >
< start="2913.677" dur="3.569"> ဖက်ဒရယ်အစိုးရသွားတော့ >
< start="2915.212" dur="4.103"> သောလှုံ့ဆော်မှု Package ဖြတ်သန်း >
< start="2917.38" dur="3.236"> ထပ်ဆောင်းရန်ပုံငွေပေးပို့ >
< start="2919.449" dur="1.668"> အစိုးရမဟုတ်သောအစိုးရများ။ >
< start="2920.75" dur="1.468"> အိုကေ။ >
< start="2921.251" dur="7.907"> ဒီမှာအိတ်ဆောင်။ >
< start="2922.352" dur="9.275"> ၎င်းသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃.၈ ဘီလီယံကိုပေးသည်။ >
< start="2929.292" dur="2.702"> ဒီအပေါက် $ 15 အထိအမြင့် >
< start="2931.761" dur="2.236"> ဘီလီယံ >
< start="2932.128" dur="6.907"> >> သင်တစ် ဦး $ 15 ဘီလီယံထိုးကြပုံ >
< start="2934.131" dur="8.174"> 3.8 ဘီလီယံနှင့်အတူအပေါက်? >
< start="2939.169" dur="5.972"> မင်း >
< start="2942.439" dur="3.937"> >> သင်မည်သို့တုံ့ပြန်သလဲ >
< start="2945.275" dur="2.368"> သောစိတ်နှင့်အတွေးအခေါ် >
< start="2946.51" dur="3.369"> အဆိုပါကုသမှုထက်ဆိုးရွားသည် >
< start="2947.777" dur="3.403"> BY ရောဂါနှင့်အကြံပြုချက် >
< start="2950.013" dur="3.436"> သူလိုခငျြသောသမ္မတ >
< start="2951.314" dur="2.502"> တိုင်းပြည်ဖွင့်လှစ်ရန် >
< start="2953.583" dur="9.009"> အီစတာလား >
< start="2953.95" dur="9.543"> >> ကြည့်ရှုပါ, ငါအိုင်တီရဲ့အပိုင်း >
< start="2962.726" dur="2.502"> ဘာသာစကား၊ >
< start="2963.627" dur="3.369"> >> ဘယ်သူမှအိုင်တီပြောပါလိမ့်မယ် >
< start="2965.362" dur="1.968"> စီးပွားရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်ရေရှည်တည်တံ့ >
< start="2967.13" dur="3.77"> ပိတ်သိမ်း။ >
< start="2967.463" dur="9.276"> >> အိုင်တီရေရှည်တည်တံ့မဟုတ်ပါဘူး။ >
< start="2971.034" dur="8.341"> ငါတို့ရ။ >
< start="2976.873" dur="4.137"> သော .1, .2 ပါပဲ။ >
< start="2979.509" dur="3.837"> ငါယုံကြည်သည်လူတိုင်းသဘောတူသည် >
< start="2981.144" dur="3.703"> ဒီနည်းကိုပြည်နယ်။ >
< start="2983.48" dur="9.175"> ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သမျှလုပ်နိုင်သည် >
< start="2984.981" dur="11.044"> ဘဝကိုလုံခြုံစေရန်။ >
< start="2992.789" dur="6.373"> ဤသူတို့သည်အားနည်းသောလူဖြစ်ကြ၏။ >
< start="2996.159" dur="4.537"> မကြာခင်မှာသူတို့သေတော့မယ် >
< start="2999.296" dur="5.505"> ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် >
< start="3000.83" dur="5.772"> SO ရွှေ့ကြပါစို့။ >
< start="3004.935" dur="2.368"> ငါမည်သည့်အမေရိကန်မယုံကြည်ကြဘူး >
< start="3006.736" dur="2.669"> သောယုံကြည်သည်။ >
< start="3007.437" dur="3.303"> နယူးယောက်ကိုမယုံဘူးဆိုတာငါသိတယ် >
< start="3009.539" dur="3.136"> သောနှင့်အစိုးရ၏အဖြစ် >
< start="3010.874" dur="6.139"> ငါကျိန်ဆိုနိုင် New York ၏ပြည်နယ် >
< start="3012.809" dur="7.24"> ငါလုပ်ပေးဘယ်တော့မှသင်။ >
< start="3017.147" dur="3.303"> ဒါဆိုသင့်မှာနှစ်ခုရှိတယ် >
< start="3020.183" dur="1.601"> သံသယ >
< start="3020.583" dur="2.87"> သင်စီးပွားရေးရရှိရန်ရှိသည် >
< start="3021.918" dur="3.003"> run နှင့်သင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည် >
< start="3023.587" dur="6.239"> သင်လုပ်နိုင်သည့်ဘဝတိုင်း။ >
< start="3025.055" dur="12.145"> ငါပိုမိုသန့်စင်သောရှိပါတယ်ယုံကြည်သည် >
< start="3029.959" dur="8.308"> WE ယခုပြောနေတာထက်နည်းဗျူဟာ >
< start="3037.334" dur="2.935"> အကြောင်း။ >
< start="3038.401" dur="5.505"> ငါအိုင်တီ BINARY စဉ်းစားကြဘူး။ >
< start="3040.403" dur="5.605"> ငါသည်သင်တို့ကိုချပိတ်ပင်ထင်ပါတယ် >
< start="3044.04" dur="5.172"> တစ်ခုလုံးကိုစီးပွားရေးနှင့်ဖွင့်လှစ် >
< start="3046.142" dur="3.404"> AS စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးလူ့အဖွဲ့အစည်း >
< start="3049.346" dur="1.701"> ပုံမှန် >
< start="3049.679" dur="6.006"> အဲဒီမှာကျနော်တို့လေ့လာသင်ယူကြပြီ >
< start="3051.181" dur="8.141"> သိသာထင်ရှားတဲ့သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်။ >
< start="3055.819" dur="6.939"> လူငယ်များသည်အန္တရာယ်နည်းပါးသည်။ >
< start="3059.456" dur="5.104"> ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့လူတွေ >
< start="3062.892" dur="3.136"> လျော့နည်းအန္တရာယ်ရှိသည်ဖြေရှင်းနိုင် >
< start="3064.694" dur="3.069"> ယူလာခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးကိုစတင်ပါ >
< start="3066.162" dur="4.871"> အနည်းငယ်သောလူငယ်များ >
< start="3067.897" dur="4.037"> အန္တရာယ်မှာစတင်ရွေ့လျား >
< start="3071.167" dur="4.638"> နည်းလမ်း။ >
< start="3072.068" dur="6.373"> စီးပွားရေးကိုပြန်လည်စတင်ပါ >
< start="3075.939" dur="4.137"> လမ်း။ >
< start="3078.575" dur="4.604"> ထို့အပြင်အကောင်းဆုံးအများပြည်သူ >
< start="3080.21" dur="4.537"> ကျန်းမာရေးဗျူဟာ။ >
< start="3083.313" dur="2.035"> ထွက်သွားသောလူငယ်တစ် ဦး >
< start="3084.881" dur="5.739"> ပန်းခြံသို့။ >
< start="3085.482" dur="10.043"> ဘတ်စကက်ဘောမကစား။ >
< start="3090.754" dur="6.873"> ထို့နောက်BACKçóသို့လာ >
< start="3095.659" dur="3.236"> အများပြည်သူမဖြစ်သည့်အိမ် >
< start="3097.761" dur="3.236"> ကျန်းမာရေးဗျူဟာ။ >
< start="3099.029" dur="5.004"> ဒါသန့်စင်သောအတိတ်ရှိသေး၏ >
< start="3101.131" dur="5.605"> ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမဟာဗျူဟာနှင့် >
< start="3104.167" dur="3.37"> စီးပွားရေးတိုးတက်ကြီးပွားခြင်းနှင့် >
< start="3106.87" dur="7.307"> ငါတို့ရှိသည်ဖို့ဘာလဲ - သောပါပဲ >
< start="3107.671" dur="11.143"> တဆင့်ကျနော်တို့အလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်။ >
< start="3114.311" dur="6.105"> >> ဒါကသင့်ကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါသလား။ >
< start="3118.948" dur="2.536"> သငျသညျအရပျ၌တည်နေသလား >
< start="3120.55" dur="2.969"> သင့်ကိုယ်ပိုင်မြန်နှုန်းသို့ \_ t >
< start="3121.618" dur="2.802"> >> ဖက်ဒရယ် >
< start="3123.653" dur="2.969"> ပြီးပြီလမ်းညွှန်ချက်များ။ >
< start="3124.554" dur="4.971"> သူတို့ကသူတို့ကိုလမ်းညွှန်ခေါ်ဆိုခဲ့သည် >
< start="3126.756" dur="5.405"> အကြောင်းမှာသူတို့သည်လမ်းညွှန်ချက်များဖြစ်သည်။ >
< start="3129.659" dur="3.336"> ထို့နောက်ပြည်နယ်များလိုက်နာနိုင်ပါတယ် >
< start="3132.295" dur="2.469"> လမ်းညွှန်ချက်များ။ >
< start="3133.129" dur="5.505"> ပြည်နယ်များဖက်ရှင်နိုင်ပါတယ် >
< start="3134.898" dur="4.203"> သူတို့ရဲ့အထူးသင့်လျော်ဖို့လမ်းညွှန် >
< start="3138.768" dur="1.501"> အခြေအနေများ။ >
< start="3139.235" dur="2.436"> New York သောသံသယမရှိပါ >
< start="3140.403" dur="2.302"> ကွဲပြားခြားနားပါတယ် >
< start="3141.805" dur="3.536"> မည်သည့်နေရာတွင်ရှိပါကပြနာ >
< start="3142.839" dur="4.17"> တိုင်းပြည်, ညာ? >
< start="3145.475" dur="1.801"> သငျသညျသောနံပါတ်တိုင်းပါပဲ >
< start="3147.143" dur="2.669"> ကြည့်ပါ။ >
< start="3147.41" dur="3.27"> သင်သိသည့်အချက်အလက်များအားလုံးသည်။ >
< start="3149.946" dur="3.47"> သံသယမရှိပါ။ >
< start="3150.814" dur="7.24"> ဒီမှာပိုကြီးတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုရှိတယ် >
< start="3153.55" dur="8.541"> နယူးယောက်၌ CITY နံပါတ်များ >
< start="3158.188" dur="4.304"> AND အရှိဆုံးသောတစ်ခု >
< start="3162.225" dur="5.271"> စီးပွားရေး။ >
< start="3162.625" dur="6.974"> AND သောသူအပေါင်းတို့ယူရမည် >
< start="3167.63" dur="3.937"> ပြီးတော့ငါလိုအပ်သည် IFS မသိ >
< start="3169.733" dur="4.003"> TULSA OR SAN အတွက်အလုပ်လုပ်ရန်သွား >
< start="3171.701" dur="3.27"> Antonyo >
< start="3173.87" dur="2.702"> ဒါကြောင့်ငါတို့တစ် ဦး အစီအစဉ်နှင့်အတူတက်လာပါလိမ့်မယ် >
< start="3175.105" dur="3.102"> သော New York နှင့်အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ် >
< start="3176.706" dur="2.402"> ဖက်ဒရယ်အစိုးရမပြောပါ >
< start="3178.341" dur="1.535"> ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အရာကိုမဆိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ >
< start="3179.242" dur="5.672"> သူတို့ကကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းပါတယ်ပြောနေ >
< start="3180.009" dur="6.306"> လမ်းညွှန်ချက်များ။ >
< start="3185.048" dur="6.673"> >> သင်သည်အဘယ်သို့သောအရာကိုလုပ်ပါ >
< start="3186.449" dur="6.706"> သမ္မတကပြောကြားခဲ့တဲ့အဖွဲ့ >
< start="3191.855" dur="4.67"> ကိုယ့်ကိုယ်ကို -Quarantine AND >
< start="3193.289" dur="7.908"> ဒုတိယမေးခွန်းသင်လိမ့်မည် >
< start="3196.659" dur="5.139"> ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ပါ >
< start="3201.331" dur="1.168"> YORK YESTERDAY ၌တည်၏။ >
< start="3201.931" dur="1.868"> >> သမ္မတဘယ်သူ့ကိုမှပြောကြားခဲ့သည် >
< start="3202.632" dur="2.802"> နယူးယောက်မြို့သို့ခရီးသွားလာ >
< start="3203.933" dur="1.835"> နှစ် ဦး အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကို -Quarantine သင့်သည် >
< start="3205.568" dur="0.667"> အပတ် >
< start="3205.901" dur="1.535"> >> နယူးယောက်၌။ >
< start="3206.369" dur="3.136"> >> နယူးယောက်မြို့၌။ >
< start="3207.57" dur="3.47"> >> သင်နယူးယောက်၌ရှိလျှင် >
< start="3209.639" dur="1.802"> သငျသညျအသစ်အတွက် Quantantine ရမယ်မြို့ >
< start="3211.174" dur="2.302"> York State ။ >
< start="3211.574" dur="2.869"> သင်သည်နောက်သို့ပြန်သွားစရာမလိုပါ >
< start="3213.61" dur="4.804"> Quantantine ဖို့ York မြို့။ >
< start="3214.577" dur="4.271"> ငါအသစ်အတွက် Quantantine သွားတော့မည် >
< start="3218.548" dur="8.208"> York State ။ >
< start="3218.981" dur="9.009"> >> ဒါကဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံပေးချက်ကို IS ။ >
< start="3226.89" dur="3.002"> ဘဝ၌အရေးအပါဆုံးအရာ >
< start="3228.124" dur="4.704"> သင်မသိသောအရာကိုသိရန်ဖြစ်သည်။ >
< start="3230.026" dur="4.137"> ငါဆေးမသိဘူး >
< start="3232.962" dur="3.17"> ဆရာဝန်ဆီသို့လှည့်ပါလိမ့်မယ်။ >
< start="3234.297" dur="4.037"> ငါလိုက်နာရန်လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ် >
< start="3236.266" dur="3.169"> CDC လမ်းညွှန်များနှင့် CDC >
< start="3238.468" dur="2.402"> လမ်းညွှန်များကိုသင့်အားအကြံပြုသည် >
< start="3239.569" dur="3.369"> ဝေးနေတဲ့ဝေးနေပါ။ >
< start="3241.004" dur="3.936"> လူမှုရေးအကွာအဝေးအဖြစ်ကောင်းစွာနှင့် >
< start="3243.072" dur="3.737"> ဒီနည်းကိုနယူးယောက်မြို့ကျော်လွန် >
< start="3245.074" dur="3.637"> အစိုးရမှဖော်ပြခဲ့သည်။ >
< start="3246.943" dur="9.943"> >> SPENCERy] သင်ကပြောနေတာ >
< start="3248.845" dur="12.245"> Quantantine သငျ့သညျ။ >
< start="3257.02" dur="5.638"> >> သူတို့လူမှုရေးအကွာအဝေး။ >
< start="3261.224" dur="1.768"> ဒီအဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးအပေါငျးတို့သ >
< start="3262.792" dur="3.036"> တိုင်းပြည်။ >
< start="3263.125" dur="20.421"> အိုင်တီရုံ New York ကမဟုတ်ပါဘူး။ >
< start="3265.962" dur="18.952"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှေ့တန်းရောက်နေသည်။ >
< start="3283.68" dur="3.469"> >> နောက်ထပ်ရန်ပုံငွေမရရှိပါက >
< start="3285.047" dur="5.439"> FEDS မှငါဘယ်လိုသိလည်းမသိဘူး >
< start="3287.283" dur="5.839"> ကျနော်တို့ဘတ်ဂျက်ရေးလိုက်။ >
< start="3290.62" dur="5.038"> ဒီနည်းကိုဒီ SENATE Bill သည်အဘယ်ကြောင့် >
< start="3293.256" dur="11.344"> အရမ်းဝမ်းနည်းပါတယ်။ >
< start="3295.792" dur="11.978"> ငါ PLAY ၏နိုင်ငံရေးကိုငါသိ၏ >
< start="3304.734" dur="5.505"> မည်သည့်ဖိအားကိုမထားပါနဲ့ >
< start="3307.904" dur="3.303"> ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့်အခြားရုံးများ။ >
< start="3310.373" dur="19.486"> အခြားသူတို့သင်ပြောလိမ့်မယ် >
< start="3374.17" dur="1.001"> ဒီနည်းကိုအလုပ်မလုပ်ဘူး။ >
< start="3374.87" dur="0.301"> ဝမ်းသာပါတယ်။ >